Arakan Muslim’s Document: ရခိုင်ပြည်ရှိ မွတ်ဆလင် အထောက် အထား များ | Danya Wadi
»The Best Doccuments of Rohingyas in Burma: အကောင်းဆုံး ရိုဟင်ဂျာ အထောက် အထား များ
»Arakan Muslim’s Document: ရခိုင်ပြည်ရှိ မွတ်ဆလင် အထောက် အထား များ
ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည် ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနိုင်ငံမှ ခိုးဝင်လာသော ကျူးကျော်နေထိုင်သည့် ဘင်္ဂဂါလီ မဟုတ်ကြောင်း ၊ နှစ်ထောင်ချီ၍ ရခိုင်ပြည် ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ်နေထိုင် ခဲ့သူ များဖြစ် ကြောင်း၊ မသိသူများဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် သမိုင်းအထောက်အထား အချို့ ကို စုစည်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ရန်ကုန်အဝေးသင် တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် – သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပြဌာန်းစာအုပ် မြန်မာနိုင်ငံပထ၀ီဝင် အမှတ်စဉ် – ၁၀၀၄ သမိုင်းဘာသာ အထူးပြုကျောင်းသားများ အတွက်သာ အမှတ်စဉ် (၁၉) (၂၀၁၂)။
စာမျက်နှာ- (၉၄) ပထ၀ီဝင်သင်းရိုးညွှန်းတမ်းအဖြစ် ပုံနှိပ်ဖော်ပြထားသော နောက်ဆုံးစာပိုဒ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ပျံ့နှံ့နေထိုင်ပုံကိုရေးသား ထားရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်နယ်နိမိတ် အတွင်းလူနည်းစုများ နေထိုင်ပုံတွေ့ရှိရာတွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ လာအိုနှင့် ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်း တို့တွင် နေထိုင်သည့် ယောင် လူမျိုးများကို ရှမ်းပြည် နယ်တောင်ပိုင်း ကျိုင်းတုံမြို့နယ်ဘက်တွင် တွေ့ရှိကြောင်း၊ ကိုးကန့်တရုတ်လူမျိုးများကိုလည်း သံလွင်မြစ်အရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိ ကိုးကန့်ဒေသအတွင်း၌ နေထိုင်ကြောင်း ရေးသား ထားပါ သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်နှင့် ဆက်စပ်နေပြီး ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောဒေသများသည် ရိုဟင်ဂျာများနှင့် ကျစ်တကောရီယံတို့ နေထိုင်ရာဒေသဖြစ် သည်။ အဆိုပါ တိုင်းရင်းသားလူနည်း အစုအဖွဲ့သည် ၄င်းဒေသတွင် အခြေချနေထိုင်သည်မှာ ရှေးမဆွကပင် ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
MINSTRY OF EDUCATION, DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION, YANGON UNIVERSITY OF DISTANCE EDUCATION, FIRST YEAR TEXT BOOK, Module No. Geog 1004-Geography of Myanmar (For History Students), Code No (19), (2012)
Along the borders of Myanmar where mountain barriers do not hinder movement of population, minority groups are found on either side of the boundary. A small ethnic group named Young who lives in northern Thailand, Laos and northern Vietnam can be found in Kyaington of southern Shan State. The Kokant Chinese group is found east of the Thanlwin Kyaington of southern Shan State. In northern Rakhine State close to the border with Bengladesh at Butheetaung and Maungdaw townships are where the Rohinggas and Chittagarians live. These minority ethnic groups had settled in the border regions since early days. (page-94)
မေယုနယ်ခြားခရိုင်သည် နယ်ခြားအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ရန် ပြဌာန်းထားသောခရိုင်နယ်ဖြစ်၏။ နယ်ခြား အုပ်ချုပ်ရေးကို နိုင်ငံအစိုးရက ပြဌာန်း ကျေညာပြီးနောက် မေယုနယ်ခြားခရိုင်ကို လွဲပြောင်း ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် အကြောင်းကြောင်းတို့ကြောင့် လက်တွေ့အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ပေ။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့တွင်မှစ၍ ထိရောက်သော အုပ်ချုပ်ရေးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ လေသည်။
မေယုနယ်ခြား ခရိုင်သည် အရှေ့ပါကစ္စတန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံစပ်ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ နတ်မြစ် အားဖြင့် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ထားလျက်ရှိသည်။ မေယုနယ်ခြား ခရိုင်သည် အနောက် ဖက်လားသော် အရှေ့ ပါကစ္စတန်၊ အရှေဖက်လားသော် မယူမြစ် စိုင်းတင်ချောင်းအားဖြင့်၎င်း၊ တောင်ဖက်လားသော် ရခိုင်ကမ်းရိုး တန်း၊ ဘင်္ဂလားပင်အော် တို့ဖြင့်၎င်း၊ မြောက် ဖက်လားသော် အရှေ့ပါကစ္စတန်အားဖြင့်၎င်း၊ ပိုင်းခြားသတ်မှတ် ထား၏။ ယခင်ရခိုင်တိုင်း စစ်တွေခရိုင်အတွင်းရှိ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ မောင်းတော်မြို့နယ်နှင့် ရသေ့တောင် အနောက်မြောက်မြို့နယ် များပါဝင်သော ဒေသဖြစ်သည်။ မယူတောင်တန်းကို ဗဟိုပြု၍ မယူမြစ်နှင့် နတ်မြစ်ကြားရှိနေရာများသည် မေယုနယ်ခြား ခရိုင်းအတွင်းပါဝင်လေ သည်။ မေယုနယ်ခြား ခရိုင်သည် တောအထပ်ထပ်၊ တောင်အလျှိုလျှို၊ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များဖြင့် ရောယှက် ၀န်းရံလျက်ရှိသော ဒေသ တစ်ခုဖြစ် ၏။ မြောက်ဘက်တွင်မြင့်၍ တောင် ဖက်သို့ ဆင်ခြေလျှော တဖြည်းဖြည်း နိမ့်ဆင်းသွားသည်။ စိုင်းတင်တောင်နှင့် မယူတောင်တန်းဟူ၍ တောင်တန်းနှစ်ခုရှိပြီးလျှင်၊ မယူမြစ်နှင့် နတ်မြစ်တည်းဟူသော ထင်ရှားသည့် မြစ်နှစ်သွယ် ကလည်း မြောက်ဖက်မှ တောင်ဖက်သို့ စီးဆင်းလေသည်။
မေယုနယ်ခြား ခရိုင်တွင် လူဦးရေ ၄ သိန်းကျော် ၅ သိန်းနီးပါးရှိ၏။ များသောအားဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုး ရေး လုပ်ငန်းနှင့် တံငါးလုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အသက်မွေးကြသည်။ လူများစု (၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်) မှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဖြစ်၍၊ ရခိုင်၊ ဒိုင်နက်၊ မြို၊ ခမွီးစသောတိုင်းရှင်းသားလူမျိုးစုများလည်း နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့သည် အစ္စလာမ်အယူဝါဒီများဖြစ်၏။ ရခိုင်လူမျိုးများ ကား ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ကြ လေသည်။ လေလောဆယ်အားဖြင့် မေယုနယ်ခြားခရိုင်ဌာနချုပ်ကို မောင်းတောမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ရခိုင်တပ်ပေါင်းစုမှုး သည် မေယုနယ်ခြား ခရိုင်၏လုံခြုံရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မေယုနယ်ခြား ခရိုင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိအဖြစ် အာဏာကုန် လွှဲအပ်ထားခြင်း ခံရသည်။ မေယုနယ်ခြားခရိုင်တွင် အထူးသဖြင့် မောင်းတောမြို့၊ ဘူးသီးတောင်မြို့များတွင် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အစိုးရရုံးများ အများအပြားရှိသည်။ ထိုအပြင်အစိုးရစာသင်ကျောင်းများလည်းရှိသည်။
ဖွဲ့စည်းရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ရပ်ရွာအေးချမ်းရေးတို့ဖြစ်၏။ လောလောဆယ်အားဖြင့် မေယုနယ်ခြားခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တို့ သည် အောက်ပါ အချက်များ ကို အဓိကထား၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည်။ ယင်းတို့မှာ ဆူပူသောင်းကျန်းနေသော မူဂျာဟစ် သူပုန်များအား ထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းရန်၊ တရားဥပဒေအပြင်ဖက်မှ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆိုးသွမ်းလျက် ရှိသော စီးပွားရေး သောင်းကျန်းသူများနှင့် လာဘ်ယူ ကိစ္စများကို ထိရောက်စွာအရေးယူရန်၊ မေယုနယ်ခြားခရိုင်တွင် လူမျိုးရေးအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အယူဝါဒရေး အားဖြင့်ဖြစ်စေ ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်မွေးမြူရေးကို အဓိကထား၍ တရားမျှတစွာ အုပ်ချုပ်သွားရန်၊ နိုင်ငံအစိုးရ၏ ချမှတ်ထားသောဝါဒ၏အရ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံဖြစ်သည့် ပါကစ္စတန်အစိုးရနှင့် ချစ်ကြည်ရင်နှီးမှုတိုးတက်ရန် အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ရန်၊ မေယုနယ်ခြား ခရိုင်တွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လုံခြံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန် လာသည်နှင့် အမျှ အထူးလိုအပ်လျက်ရှိသော တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်သွားရန်၊ နယ်ခြားဒေသသို့ သွားရောက် အမှုထမ်းကြ သည့် အထမ်းများသည် လေးလေးနက်နက်ပြုပြင်၍ အတတ်နိုင်ဆုံး သံတမန်စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် သွားရန်၊ ပြည်ထောင်အစိုးရပို့ထားသော အမှုထမ်းအရာထမ်းများအားလုံးသည် နယ်ခြားဒေသ အုပ်ချုပ်ရေး၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် တစည်းတလုံးတည် စုပေါင်းကြ၍ ပြဿနာ အရပ်ရပ်ကို ညီညာစွာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း သွားရန် စသည်တို့ဖြစ်လေသည်။
မေယုနယ်ခြားခရိုင်ကို ဤသို့ နယ်ခြားဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှ တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်လာခဲ့ရာ၊ ယခုအခါတွင် အခြေအနေများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်။ ထို့ကြောင့် မေယုနယ်ခြားခရိုင်ကို စစ်တွေခရိုင် အတွင်းသို့ ပြန်လည် ဆွတ်သွင်းပြီး လျှင် ပြည်ထဲရေးဌာန၏ အုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်သို့ ပြန်လည်ထားရှိရန် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ တောင်လှန်ရေးအစိုးရ အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ခဲ့၏။ မေယု နယ်ခြားဒေသ အုပ်ချုပ်ရေး လက်အောက်မှ ပြည်ထဲရေးဌာနလက်အောက်သို့ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့လေသည်။
May Yu Frontier Area
May Yu Frontier Area was administrative by Border Admin Department for directly. This admin system was declare by state Government and handover to May Yu Frontier Area. But various of reasons for not arrange to practically. Begining form 30th day of May 1961 for yield result to admin istrative system.
May Yu Frontier Area is located at between East Paskistan and Myanmar. Fixed by Nai River for measure. That Frontier Area was west to East Pakistan, East to May Yu River, Sai Tin Creek, South to Rakhine Coastline, Bay of Bengal, North to East Pakistan. In previous time, Buthi Taung Township, Maung Taw Township and North-West of Rathitaung Township in Sittwe District Central of May Yu Mountain and Between the May Yu and Naf River place in May Yu Frontier Area. That May Yu Frontier Area is around the very many of Mountain, River and fisher place. Very slope for hight at North to South. Two mountain of Sai Tin and May Yu and May Yu river and Naf River are very famous from North to South.
Total population of over4lakhs to nearly5lakhs in May Yu Frontier Area. All of people are Agriculture and Fisheries 75 % of Rohingya and afew of Rakhine, Dai Nat, Myo, KhMee. Rohingya are Islamist. Rakhine are all of Buddhist and other race is Naf Religious. At that present time for May Yu Frontier Area Head office is open at Maung Taw. Head officer of Rakhine force take duty of Security, Defence, Peace, Law and Order of Social Development. Especially very many of Administrative Office at Maung Taw, Buthl Taung. And many school at that place. (See at Buthi Taung Town, Maung Taw Town.
Main objection of found for law and order to May Yu Frontier Area. Under mentioned and are officer of admistrative of May Yu Frontier Area.
Mujarhit Rebit were fight, to take action to rebit of economics by out of law and order, to event of entry by without discipline to Myanmar, to admin for not different to race or religious, to friendly for Govermment of Pakistan for neighbours, to deplomatics of all service to Border area, all stuff under the Guardianship of Frontier Area and very unity.
So, May Yu Frontier Area administrative are very good and improve in now. So Union of Myanmar, Revolutionary Government decide for keep for keep the May Yu Frontier Area under the Sittwe District and under the admistrative system.
So, May Yu Frontier Area was handover to Ministry of Home Affair from Frontier Area dministrative on 1st day of February 1964.
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ဒေသခံအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် သမိုင်းကြောင်းအရ ရှေးပဝေသဏီကပင် မိမိတို့၏ ပင်ရင်းဒေသအဖြစ် အတည်တကျ နေထိုင်လာခဲ့ကြသော လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါ အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။
၁။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့်ခွန်း(Blank Cheque)
၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ဦးဘိုးခိုင် စစ်တွေသို့ပြန်ရောက်စဉ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဟင်္သာတဦးမြ၊ ဦးအောင်ဇံဝေတို့ စစ်တွေသို့ရောက်လာကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်က- ”မွတ်စလင်မ်လူထုလဲ ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်စေလိုပါ သည်။ ကျွန်တော် Blank Cheque ပေးပါမည်။ သေအတူရှင်အမျှပါ။ မိမိတို့လိုရာကို တောင်းကြပါ။ ကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက် လိုက်လျောပါမယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေကွဲနေရင် ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးရဖို့ခက်ပါ တယ်”ဟု မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါသည်။
This is submitted monograph that the Islam, inhabitants within Rakhine State are minority natives, Citizen who are living constantly as their native region since ancient time according to history.
1. BOGYOKE AUNG SAN’S SPEECH (BLANK CHEQUE)
While U BO Khine arrived at Sittwe in 1946, Bogyoke Aung San, Hindata U Mya and U Aung Zan Wai arrived at Sittwe. Bogyoke Aung San gave speech that “Please Muslim People make hand in hand with us. I shall give Blank Cheque. Die together and alive together. Claim as you wish. I shall allow asmuch as I can. If natives are divided, it is difficult to achieve independence of Burma.”
၁၉၄၆ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၄)ရက်နေ့ထုတ် ဒီးဒုတ်ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ရာ- ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့သော ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ မြန်မာ နိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ နောက် ဆုံးညီလာခံကြီးတွင် ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုက-မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မြန်မာမူဆလင်များကိုလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ ရထိုက်သော အခွင့်အရေးများကို ပေးရန် သဘောတူကြောင်း အဆိုတစ်ရပ် တင်သွင်းခဲ့ရာ၊ ၎င်းအဆိုကို အဆိုအမှတ်(၆) အဖြစ် လက်ခံပြီး ပုသိမ်ကိုမြစိန်၊ ဖျာပုံကိုဘဆွေနှင့်မွန်ဘိုးချိုတို့က ထောက်ခံပြီး ကန့်ကွက်သူမရှိသဖြင့် အဆိုကို အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။
2. PHA-SA-PA-LA CONGRESS
Dee Doke Journal published on 4th February of 1946, mentioned ” Dee Doke U Ba Cho submittedaproposal to the last whole Burma Congress of Pha-Sa-Pa-La Organization where Bogyoke Aung San had attended, in order to give reasonable rights of minority natives for Myanmar Muslims with Union of Myanmar. Such proposal was accepted as proposal No.(6)and Pathein Ko Mya Sein, Phapon Ko Ba Swe, Mon Phoe Cho recommended it, and there were no objector so that the proposal was confirmed.
အောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်၏နောက်ဆက်တွဲ(က)အရလာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်နှင့် ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံပိုင်ခွင့် အလို့ငှာ မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် မွေးဖွား၍ ၁၉၄၂ ခု၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁)ရက်၊ သို့မဟုတ် ၁၉၄၇ ခု၊ ဇန်န၀ါရီလ(၁)ရက်နေ့ မရှေးမနှောင်းဖြစ်သော ၁၀ နှစ်အတွင်းတွင် စုစုပေါင်း (၈)နှစ် ထက်မနည်း မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် နေထိုင်ခဲ့ သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
3. AUNG SAN ATTLEE TREATY
In ANNEX (A) of Aung San Attlee Treaty mentioned, “A Burma National is defined for the purposes of eligibility to vote and to stand asacandidate at the forthcoming elections asaBritish Subject for the Subject of an Indian State who was born in Burma and resided there foratotal period of not less than eight years in the ten years immediately proceeding either 1st January, 1942 or 1st January, 1947.” Bogyoke Aung San signed it.
ပင်လုံညီလာခံ သဘောတူညီချက်အပိုဒ်(၇)တွင် နယ်ခြားဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသော နိုင်ငံသားများသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင် ရရှိလေ့ရှိသော အခြေခံအခွင့်အရေးများနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို ခံစားကြရမည်ဟု ပါရှိပါသည်။ အဆိုပါ အချက်များနှင့်အညီ မေယုနယ်ခြားခရိုင်ကို ၀န်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် မေယုနယ်ခြား ခရိုင်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ၎င်းမေယုနယ်ခြား ခရိုင်တွင် နေထိုင်သော သူများကို ၀န်ကြီးအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လူနည်းစု ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်၍ လူနည်းစု တိုင်းရင်း သားဘာသာ အစီအစဉ်ကို ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၅) ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာ့အသံတိုင်းရင်းသားဘာသာအစီစဉ်မှ အသံလွှင့်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းများသည် ”ပင်လုံညီလာခံ”တွင် သဘောတူညီခဲ့သော အပိုဒ်(၇)၏ အကျိုးဆက်များဖြစ် သည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
4. THE PANGLONG AGREEMENT
In paragraph7of the Panglong Agreement mentioned “Citizen of the Frontier Areas shall enjoy rights and privileges which area regarded as fundamental in democratic countries. In accordance with such facts meeting of Cabinet decided to prescribed May Yu Frontier Area, the inhabitants within May Yu Frontier Area had been prescribed as minority Rohingya natives and then also allowed to broadcast as minority ethnic programme from Myanmar national broadcasting radio with effect from 15th May, 1961. That is to be considered asaresult arisen from paragraph7of the Panglong Agreement.
၅။ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဗဆွေ မိန့်ခွန်း
(၂၅-၉-၁၉၅၄)နေ့တွင် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု၏ မိန့်ခွန်းတွင် ဘူးသီး တောင်၊ မောင်တောနယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများမှာ မွတ်စလင်များဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ဖူးသကဲ့သို့ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဦးဗဆွေကလည်း (၃-၁၁-၁၉၅၉) နှင့် (၄-၁၁-၁၉၅၉)နေ့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော လူထု အစည်း အဝေးပွဲတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသည် အခြားတိုင်းရင်းသားများနှင့်တန်းတူ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရှေးအစဉ် အဆက်ကတည်းက နှစ်ပေါင်းများစွာအတူ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ရာဇ၀င်အထောက်အထားများနှင့်တကွ မိန့်ကြားဟောပြော အသံလွှင့်ကြေညာခဲ့ဖူးပါသည်။
5. THE SPEECHES OF PRIME MINISTER U NU,
DEPUTY PRIME MINISTER AND DEFENCE MINISTER U BA SWE.
In speech of Prime Minister U Nu by Cabinet decision delivered on (25-9-1954) stated that the Rohingya residing within Buthitaung, Maung Taw regions were Muslims. U Ba Swe, Deputy Prime Minister and Defence Minister also delivered speeches on (3-11-1959) and (4-11-1959) at Buthitaung, Maungtaw Public meetings that Rohingya were living together with other natives long long ago for many years within Union of Myanmar with equal status. He also broadcast about it from Myanmar Radio together with evidences.
၁၉၆၄ ခုနှစ် စာပေဗိမာန်မှ ထုတ်ဝေသည့် မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၉)စာ (၈၉) မေယုနယ်ခြားခရိုင် အကြောင်း ဖော်ပြထားရာ မေယုနယ်ခြားခရိုင် (ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော) တွင် လူဦးရေ (၄)သိန်း (၅)သိန်းခန့်ရှိရာ ၇၅%မှာ ”ရိုဟင်ဂျာ”များဖြစ်ပြီး ရခိုင်၊ မြို၊ ခမီ၊ ဒိုင်းနက် စသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများတို့ နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထား ပါသည်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ-၉ တွင် မောင်တောမြို့အကြောင်း ကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
6. MYANMAR ENCYCLOPEDIA
In page 89-90, volume9of Myanmar Encylopedia Published by Sarpay Beikhman in 1964 stated about May Yu Frontier Area there were population about4lakhs or5lakhs in May Yu District (Buthitaung Maungtaw), 75% were Rohingyas and Rakhine, Myo, Khamei, Dainet, etc. Ethnic groups were living. In volume9of Myanmar Encyclopedia also stated about Maungtaw town.
မေယုရှေ့ရေး (ဒုတိယအကြိမ်)ထုတ် စာအုပ်တွင် ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၅)ရက်နေ့က မေယုနယ်ခြားခရိုင်၊ မောင်တောမြို့၌ မူဂျဟစ်အလင်းဝင်လက်နက်ချအခမ်းအနား၌ ဒု-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီး၊ ဒု-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)ဗိုလ်မှူးချုပ်သန်းဖေနှင့် နယ်ခြားဒေသ အုပ်ချုပ် ရေး အရာရှိ ချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး စောမြင့်တို့၏ မိန့်ကြားချက်များကို ဖော်ပြထားကြသည်။
ဤမေယုရှေ့ရေး (ဒုတိယအကြိမ်)ထုတ် စာအုပ်မှာ မေယုနယ်ခြားခရိုင် စီးပွား ရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျုိုးဟူ၍ ဖော်ပြထားသည်ကို လေ့လာသိရှိနိုင်သည်။
7. STATEMENT FOR MAY YU’s FUTURE
In May Yu’s future book (2nd edition) stated the speeches of Deputy Chief Defence Staffs (Army) Brigadier General Aung Gyi, Deputy Chief Defence Staffs (Marine) Admiral Than Pe and Chief Administrator of frontier Colonel Saw Myint, delivered at Surrender ceremony of Mujahids held on 15th November, 1961 at Maungtaw, May Yu Frontier Area.
This May Yu’s future (2nd edition) book stated about economy, social education, religion of May Yu Frontier Area and Rohingya race.
(၂၀-၁၁-၁၉၆၁)နေ့ မေယုနယ်ခြားခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် အညီ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် (UNDP) ထုတ် သတင်းလွှာ စာမျက်နှာ (၈)တွင် ဖော်ပြထားသည်။
8. MAY YU FRONTIER AREA
May Yu Frontier Area administrator’s office issued notification in accordance with decision of central government (20-11-1961) that Rohingyas were natives / Nationals. It was stated in page 8, news bulletin of (UNDP) issued in February of 1992.
၉။ ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ (UNDP) သတင်းလွှာ
ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီမှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီထုတ် (UNDP) သတင်းလွှာ၌ လူနည်းစု ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားရှိကြောင်းကို သက်သေခံချလျက် ရေးသားဖော်ပြချက်များ လေ့လာဖတ်ရှု သိရှိနိုင်ပါသည်။ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသကို မေယုဒေသဟု သတ်မှတ်ပြီး စစ်ရုံးမှ အုပ်ချုပ်ရန် တင်ပြသောအခါ အစိုးရ ကက်ဘိနက်မှ လက်ခံသဖြင့် ဗိုလ်မှူးကြီး စောမြင့်ကို ထိုဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ နာမည်ကိုလည်း ရခိုင်-မွတ်စလင်အစား ရိုဟင်ဂျာ သုံးခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာရှိကြောင်းကို သတင်းလွှာတွင် အခိုင်အမာ ရေး သား ဖော်ပြခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
9. THE UNION NATIONAL DEMOCRACY PARTY (UNDP)’S NEWS BULLETIN
You can read and study in news bulletin published by Union National Democracy Party in February, 1992 Stated with evidence that there wasaminority Rohingya natives. When submitted to be prescribed Buthitaung, Maungtaw region as May Yu region and to be administered by Army Office, the Cabinet accepted it and appointed Colonel Saw Myint as administrator of such region and also granted to use Rohingya instead of Rakhine Muslims. Can be seen sound writings in news bulletin that there was Rohingya.
၁၀။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၁၁)တွင် နိုင်ငံသား ဆိုသည့် စကားရပ်၏ အဓိပ္ပါယ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
ပုဒ်မ၁၁ (က)။ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးမျိုးတွင်ဖြစ်သော သို့တည်းမဟုတ်ဖြစ်ခဲ့သော မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူတိုင်းသည်၎င်း။
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးမျိုးတွင်ဖြစ်သော သို့တည်းမဟုတ် ဖြစ်ခဲ့သော ဘိုးဘွားများ အနက် အနည်းဆုံးတစ်ဦးမှ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင် ပါဝင်လတ္တံ့သော အာဏာပိုင်နက် အတွင်း၌ မွေးဖွားသူ တိုင်းသည်၎င်း၊
(ဂ) ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားဖြစ်သော သို့တည်းမဟုတ် ဤအခြေခံ ဥပဒေစတင် အာဏာ တည်သည့်နေ့တွင် အသက်ရှင်နေသည်ဖြစ်ပါက တိုင်းရင်းသားအဖြစ်ကို ရယူခွင့်ရှိသော မိဘနှစ်ပါးမှ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင် ပါဝင်လတံ္တ့သော အာဏာပိုင်နက်အတွင်း၌ မွေးဖွားသူတိုင်းသည်၎င်း၊
(ဃ) ဗြိတိသျှဘုရင်မင်းမြတ်၏ အာဏာပြန့်ရာနယ်မြေတစ်ခုခုတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်ဖြစ်၍ ဤအခြေခံ ဥပဒေစတင်အာဏာတည်သည့်နေ့မှ အထက်၊ သို့တည်းမဟုတ် ၁၉၄၂ ခု၊ ဇန်န၀ါရီလ(၁)ရက်နေ့မှ အထက်အခြားမဲ့သော ဆယ်နှစ်အတွင်း ရှစ်နှစ်အောက်မဟုတ် သော ကာလအဖို့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင် ပါဝင်လတ္တံ့သော အာဏာ ပိုင်နက်အတွင်း၌ နေထိုင်ခဲ့ ဘူးပြီးလျှင်၊ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအတွင်းတွင် ထာဝစဉ် နေထိုင် ရန် ကြံရွယ်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ ထို့ပြင် တရားဥပဒေဖြင့် သတ်မှတ်သောအချိန်အတွင်းတွင် ထိုသို့ သတ်မှတ်သော နည်းလမ်းနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းကို ထုတ်ဖော်သူတိုင်းသည် ၎င်း ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။
10. THE CONSTITUTION OF 1947
The Section 11 of the Constitution of 1947 defined the meaning of Citizen as follows.
S.11 (i) Every person, both of whose parents belong or belonged to any of the indigenous races of Burma.
(iii) every person born in any of the territories included within the Union, of parents both of whom are or if they had been alive at the commencement of this Constitution would have been Citizen of the Union;
(iv) every person who was born in any of the territories which at the time of his birth was included within His Britannic Majesty’s dominions and who has resided in any of the territories included within the Union foraperiod of not less than eight years in the ten years immediately proceeding the date of the Commence-ment of this Constitution or 1st January 1942 proceeding reside permanently therein and who signifies his election of citizenship of the Union in the manner and within the time prescribed by law, shall beacitizen of Union.
၁၁။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေ
၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၄)ရက် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေမှာ ပုဒ်မ ၄ (၂) တွင် အောက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
ပုဒ်မ ၄ (၂)။ ပြည်ထောင်စုတွင် ပါဝင်သော နယ်မြေတစ်ခုခုတွင် အနည်းဆုံး ဘိုး ဘွားအားလုံးလက်ထက်မှစ၍ မိမိတို့၏ ပင်ရင်းတိုင်းပြည်အဖြစ် မျိုးဆက်မပြတ် ထာဝစဉ် အခြေစိုက်နေထိုင်လာခဲ့သည့်အပြင်၊ မိမိ၏ မိဘ နှစ်ပါးနှင့်တကွ မိမိ၏ မိဘနှစ်ပါးနှင့်တကွ မိမိကိုယ်တိုင် ထိုနယ်မြေတစ်ခုခုတွင် မွေးဖွားသူဖြစ်လျှင် ထိုသူအား မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
11. THE UNION CITIZENSHIP ACT OF 1948
The Union Citizenship Act was enacted on 4th January, 1948. Such Act defined in Section 4(2) as follows.
S.4 (2) Any person descended from ancestors who for two generations at least have all made any of the territories included within the Union their permanent home and whose parents and himself were born in any of such territories shall be deemed to beacitizen of the Union.
၁၂။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး အက်ဥပဒေ
၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄(၂) တွင် အောက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
ပုဒ်မ၄(၂)မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်၊ သို့တည်းမဟုတ် လက်ထောက်မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်၊ မှတ်ပုံတင် ထား သူတိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အကြောင်းအရာပါရှိသော မည်သူဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံသည့် ကပ်ပြား တစ်ချပ်ကို ဤအက်ဥပဒေအရ ပြုလုပ်သည့်နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ထုတ်ပေးရမည်။ ထိုကဒ်ပြားကို ဤမှနောင်အဘို့တွင် သက်သေခံကဒ်ပြားးဟု ရည်ညွှန်းသည်။
12. THE REGISTRATION OF RESIDENTS IN THE UNION OF MYANMAR ACT, 1949.
In Section4(2) of the Registration of Residents in the Union of Myanmar Act, 1949 defined as follow.
S.4(2) The Registration Officer (or) assistant registration officer shall issueacard in accordance with the rules of this Act, which proved the provided facts therein, in respect of every registered person. Such card referred hereinafter as the certificate.
၁၃။ ၁၉၃၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ မြန်မာ့အလင်း နှစ်သစ်မင်္ဂလာသတင်းစာ
၁၉၃၅ ခု ဧပြီလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် မြန်မာ့အလင်းနှစ်သစ်မင်္ဂလာသတင်း စာတွင် ”မြန်မာမူစလင်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ရာ ၁၉၃၁ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင် စာရင်း အရ ရခိုင်မူစလင် ၅၁၆၁၂ ဦးရှိကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ ရှိရသည်။
13. THE MYANMAAHLIN NEW YEAR NEWSPAPER, APRIL, 1935.
The Myanma Ahlin new year newspaper published in April, 1935 described an article with the heading “Myanmar-Muslim” According to census of British Government in 1931, it was found out that there Rakhine – Muslim 51612 persons, respectively.
၁၄။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၅ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
ပုဒ်မ၁၄၅(က) ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တိုင်းရင်းသား မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူ အားလုံးသည် နိုင်ငံသားများဖြစ်သည်။
(ခ) ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားသည့်နေ့တွင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး သူများ သည်လည်း နိုင်ငံသားများဖြစ်သည်။
14. THE CONSTITUTION OF1974
In Section 145 of the Constitution of the Socialist Republic of the Union of Myanmar provided as follows.
S. 145(a) All persons born of parents both of whom are nationals of the Socialist Republic of the Union of Myanamr, are Citizens of the Union.
(b) Persons who are vested with citizenship according to existing laws on the date of this Constitution cornes into force, are also citizens.
၁၅။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၅၊ ပုဒ်မ ၃၄၇၊ ပုဒ်မ-၃၄၈၊ ပုဒ်မ-၃၄၉ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
ပုဒ်မ–၃၄၅ အောက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ပြည့်စုံသူများသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်-
(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူ၊
(ခ) ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းသည့်နေ့တွင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံ သားဖြစ်ပြီးသူ။
ပုဒ်မ ၃၄၇ နိုင်ငံတော်သည် မည်သူ့ကိုမဆို ဥပဒေအရာတွင် တန်းတူညီမျှအခွင့် အရေးရရှိစေရမည်။ ထို့ပြင်
ဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ကိုလည်း တန်းတူညီမျှစွာ ရပိုင်ခွင့်ပေးရမည်။
ပုဒ်မ ၃၄၈ နိုင်ငံတော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ မည်သည့် နိုင်ငံသားကိုမျှ လူမျိုး၊ ဇာတိ၊
ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနန္တရ၊ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ တို့ကအကြောင်းပြု၍ ခွဲပြားမှု မရှိစေရ။
ပုဒ်မ ၃၄၉ နိုင်ငံသားများသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တူညီသော အခွင့် အလမ်းရရှိစေရမည်-
(က) ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု၊
(ဂ) ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှု၊
(င) အတတ်ပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊
(စ) ၀ိဇ္ဖာပညာ၊သိပ္ပံပညာနှင့် နည်းပညာရပ်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု။
15. THE CONSTITUTION OF 2008
Sections 345, 347, 348 and 349 of the Constitution of 2008 provided as follows.
S.345 All persons who have either one of the following qualifications are citizens of the Republic of the Union of Myanmar.
(a) Person born of parents both of when are nationals of the republic of the Union of Myanmar.
(b) Person who is alreadyacitizen according to law on the day this Constitution comes into operation.
S.347 The Union shall guarantee any person to enjoy equal rights before the law and shall equally provide legal protection.
S.349 Citizens shall enjoy equal opportunity in carrying out the following functions: –
(a) Public employment,
(e) Technical know-how and vocation,
(f) Exploration of art, science and technology
၁၆။ ရွေးချယ်ခံပါလီမန်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ခေတ်အဆက်ဆက် ပါလီမန်(သို့) လွှတ်တော်ရွေးကောက် ပွဲများတွင် ပါဝင်အရွေးချယ်ခံ ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသခံ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စာရင်းများမှာ
နှစ် ရာထူး အမည် မဲဆန္ဒနယ်
၁၉၃၆ M.G.C ဦးဂနီမာရ်ရာခါန် ဘူးသီးတောင်+မောင်တော
M.P ဦးအဘူ(ရ်)ဘောရှော(ရ်) ဘူးသီးတောင်(တောင်)
M.P ဦးအဘုလ်ခိုရ် မောင်တော(တောင်)
M.P ဦးအာဒုလ်ဂဖါရ် ဘူးသီးတောင်၊မောင်တော
၁၉၅၁ M.P ဦးအာဒုလ်ဂဖါရ် ဘူးသီးတောင်(မြောက်)
M.P ဦးအာဘုလ်ဘော်ရှောရ် ဘူးသီးတောင်(တောင်)
M.P ဦးဆုလ်တန်အာမတ် မောင်တော(တောင်)
၁၉၅၆ M.P ဦးအေဇာရ်မျာ ဘူးသီးတောင်(မြောက်)
M.P ဦးဆုလ်တန်မာမွတ် ဘူးသီးတောင်(တောင်)
M.P ဦးအာဘုလ်ဘော်ရှေရ် ဘူးသီးတောင်(တောင်)
M.P ဦးအာဘုလ်ခိုရ် မောင်တော(မြောက်)
M.P ဦးအာဒုလ်ဂဖါရ် မောင်တော(တောင်)
၁၉၆၀ M.P ဦးအဘူ(ရ်)ဘောရှော(ရ်) ဘူးသီးတောင်(တောင်)
M.P ဦးဆုလ်တန်မာမွတ် ဘူးသီးတောင်(မြောက်)
M.P ဦးရော်ရှိတ် မောင်တော(မြောက်)
M.P အမ်အေဆူဘာန် ဘူးသီးတောင်၊မောင်တော
16.THE ELECTED PARLIAMENT MEMBERS AND HLUTTAW
The lists of elected Parliament Members and Hluttaw Representatives who were locallslam in Rakhine States, are as follows.
Year Post Name Constitutency
1936 M.G.C U Gani Markan Buthitaung+Maungtaw
M.L.C U Sultan Ahmed Maungtaw
M.L.C U Abdul Gaffer Buthitaung
1951 M.P U Abdul Gaffer Buthitaung (North)
M.P U Abul Bashar Buthitaung (South)
M.P U Sultan Ahmed Maungtaw (North)
1956 M.P U Ezar Meah Buthitaung (North)
M.P U Sultan Mahmood Buthitaung (North)
M.P U Abul Khair Maungtaw(South)
M.P U Abdul Gaffer Buthitaung-Maungtaw (Upper House)
1960 M.P U Abul Bashar Buthitaung (South)
M.P U Abul Khair Maungtaw (South)
M.P U Rashid Maungtaw (North)
M.P U M.A Subban Buthitaung-Maungtaw
၁၉၇၄ လွှတ်တော်အမတ် Drအဗ်ဒူရဟိမ်း(ခ)ဦးချစ်မောင် မောင်တော
လွှတ်တော်အမတ် ဦးအဘုလ်ဟူဆိန်း ဘူးသီးတောင်
၁၉၇၈ လွှတ်တော်အမတ် ဦးအဗ်ဒုလ်ဟိုက်(ခ)ဦးထွန်းအောင်ကျော် မောင်တော
MHA SAH LA GOVERNMENT
1974 Hluttaw Representative Maungtaw
Dr.A Rahim (a) Dr.Chit Maung
U Abul Hussain
1978 Hluttaw Representative Maungtaw
U Abdul Hai (a) U Tun Aung Kyaw
န၀တအစိုးရခေတ် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ
၁၉၉၀ လွှတ်တော်အမတ် ဦးဖေါ်ဇောလ်အာမတ် မောင်တော(တောင်)
လွှတ်တော်အမတ် ဦးချစ်လွင်(ခ)ဦးအီဗြာဟိမ်း မောင်တော(မြောက်)
လွှတ်တော်အမတ် ဦးတင်မောင်(ခ)ဦးနူရ်အာမတ် ဘူးသီးတောင်(တောင်)
လွှတ်တော်အမတ် ဦးကျော်မင်း(ခ)ဦးအနူဝါရုလ်ဟောက် ဘူးသီးတောင်(မြောက်)
NA WA TA GOVERNMENT (1990 ELECTION)
1990 Hluttaw Representative Maungtaw (South)
U Fazal Ahmed
Hluttaw Representative Maungtaw (North)
U Chit Lwin (a) U lbrahim
Hluttaw Representative Buthitaung (South)
U Tin Maung (a) U Noor Ahmed
Hluttaw Representative Buthitaung (North)
U Kyaw Min (a) U Anwarul Haq
နအဖ အစိုးရခေတ် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ
၂၀၁၀ လွှတ်တော်အမတ် ဦးဇော်ကိရ်အာမက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်
(ခ) ဦးအောင်ဇော်ဝင်း (မောင်တော)
လွှတ်တော်အမတ် ဦးရွှေမောင်(ခ) ပြည်သူ့လွှတ်တော်
(ခ) ဦးအပ္ပဒူလ်ရာဇတ် (ဘူးသီးတောင်)
လွှတ်တော်အမတ် ဦးဇာယာဒ်ရော်မံ(ခ) အမှတ်(၇) အမျိုးသားလွှတ်တော်
(ခ) ဦးဌေးဝင်း (မောင်တော)
လွှတ်တော်အမတ် ဦးဇာဟန်ဂိရ်(ခ) အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်
(ခ) ဦးအောင်မျိုးမင်း (မောင်တော)
လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာ အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်
NA AH PHA GOVERNMENT (2010 ELECTION)
2010 Hluttaw Representative Pyithu Hluttaw
U Zakir Ahmed (a)U Aung Zaw Win (Maungtaw)
U Shwe Maung (a) U Abdul Razak (Buthitaung)
Hluttaw Representative No.(2) State Hluttaw
Hluttaw Representative No.(7)Amyother Hluttaw
U Zayad Rahman (a) U Htay Win (Maungtaw)
Hluttaw Representative No.(1)State Hluttaw
U Zahin Gir (a) U Aung Myo Min (Maungtaw)
Hluttaw Representative No.(2)State Hluttaw
Dr. Bashir Ahmed (Buthitaung)
ထို့ပြင် လွှတ်တော်အသီးသီး၌ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒေသခံ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များထဲမှ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်အများ အပြားရှိပါသည်။ ဖဆပလခေတ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနက် အချို့မှာ ၀န်ကြီးရာထူး၊ ပါလီမန်အတွင်းဝန်ရာထူးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးပါသည်။
Besides there are many local Muslim candidates for respective Hluttaw who compete in General Election in Rakhine State. Among Pha Sa Pa La Parliament Members, some had served at Ministerial posts and Secretaries of Parliament posts.
(ဂ) ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ဒေသခံအစ္စလာမ်ဘာ သာဝင်များသည် တပ်မတော်တွင် အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြည်တပ်သားများအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်တပ်သားများ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ပါမောက္ခရာထူးအပါအ၀င် တက္ကသိုလ် ကောလိပ်များတွင် ကထိက၊ လက်ထောက်ကထိက၊ နည်းပြ ဆရာများ၊ မြို့နယ်ပညာရေး မှူးများ အခြေခံ ပညာ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်းကျောင်းများတွင် ကျောင်းအုပ်ဆရာ၊ ဆရာမ များအပါအ၀င် ကျောင်းဆရာများအဖြစ် လည်းကောင်း၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးတွင် အရာထမ်း အမှုထမ်းများ အဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့ဘူးပါသည်.။ သို့ရာတွင် န၀တခေတ်မှစ၍ လူမျိုးဘာသာ ခွဲခြားမှုကြောင့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ စစ်တွေစသည့် မြို့များတွင် ဒေသခံအစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအား ဌာနအသီးသီးတွင် ၀န်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းမရှိ၍ ယခုအခါ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဌာနအသီးသီးတွင် ဒေသခံ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များထဲမှ အသစ်ခန့်အပ်မှု တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မရှိတော့ပါ။ ထိုနည်းတူ တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တွင်လည်း မရှိတော့သည်မှာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်။
(C) Besides, the locallslam, inhabitants in Rakhine State had served as military officers and military staffs in Tatmataw; as police officers and staffs in Police Force; as Professor, Lecturers, Assistant Lecturers, Tutors, Demonstrators of University and colleges under Ministry of Education; Township Education Officers, Headmasters and teachers of High school, Middle schools and Primary schools; as Senior Officers and Staffs at other Ministries respectively. But it is found out that there are no appointment for regional Muslims at respective departments within Rakhine State as well as in Tatmataw and Police Force.
၁၇။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအခန်း(၂)တွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
ပုဒ်မ(၃) နိုင်ငံတော်တွင်ပါဝင်သော နယ်မြေတစ်ခု၌ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၈၅ ခုနှစ်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၂၃ ခုနှစ် မတိုင်မီကာလမှစ၍ ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ် အမြဲ နေထိုင်ခဲ့သော ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည့် တိုင်း ရင်းသားများနှင့် မျိုးနွယ်စုများသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။
ပုဒ်မ(၄) မည်သည့် မျိုးနွယ်စုသည် တိုင်းရင်းသားဖြစ်သည်၊ မဖြစ်သည်ကို နိုင်ငံတော်ကောင်စီ (ယခုပြည် ထောင်စု အစိုးရ) က ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ပုဒ်မ(၅) တိုင်းရင်းသားတိုင်းသည်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူတိုင်းသည် လည်း ကောင်း မွေးရာပါနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။
ထိုဥပဒေအခန်း(၈)တွင် အထွေထွေကဏ္ဍကို ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
17. THE MYANMA CITIZENSHIP LAW OF (1982)
In Chapter (2) of the Myanmar Citizen Law of 1982, provided as follows in respect of Citizenship.
Nationals such as Kachin, Kayar, Kayin, Chin, Barmar, Mon, Rakhine, Shan etc., and ethnic group as have settled in any of territories within the state as their permanent home fromaperiod prior to 1185 B.E, 1823 AD are Myanmar citizens.
Any ethnic group whether which is ethnic group or not may be decided by the State Council (Now, Union Government)
Every National and every person born of parents both of whom are Nationals are citizen by birth.
အထွေထွေကဏ္ဍပါ ပုဒ်မ-၇၅ တွင် ” ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆောင် ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ “၀န်ကြီးအဖွဲ့”သည် လိုအပ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နိုင်ငံတော်ကောင်စီ (ယခုပြည်ထောင်စုအစိုးရ)၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ရ မည်” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံသားဥပဒေပုဒ်မ-၇၅ ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ၀န်ကြီးအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ်-၁၃/၈၃ဖြင့် (၂၀-၉-၁၉၈၃)နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ)၏ အခန်း (၂) နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအခန်းတွင်-
အပိုဒ်(၄) ၁၈၂၄ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ထိုကာလ ၏ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံခြား သားများ အဖြစ် နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၈၅ခုနှစ်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၂၃ ခုနှစ် မတိုင်မီကာလကို ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အပိုဒ်(၅) ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊ဗမာ၊မွန်၊ရခိုင်၊ရှမ်းစသည့် လူမျိုးများပင်ဖြစ် စေကာမူ နိုင်ငံတော်တွင် ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ် အမြဲနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အခြားနိုင်ငံတွင် ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ် အမြဲနေ ထိုင်ကြသူများသည် တိုင်းရင်းသားများ မဟုတ်ပါ။ ၁၈၂၃ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက် နေထိုင်ကြသော အမည်တူ မျိုးနွယ်စုများသည်လည်း တိုင်းရင်းသားများ မဟုတ်သည့်အပြင် မွေးရာပါ နိုင်ငံသားများလည်း မဟုတ်ပါ။
အပိုဒ်(၇) ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ -၁၄၅၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ အခြေခံဥပဒေအာဏာတည်သည့်(၁၅-၁၀-၁၉၈၂)နေ့တွင်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူများ သည်နိုင်ငံ သား များဖြစ်ကြသည် စသည်ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
In Section 75, ” In order to carry out the provision of this law ” Cabinet” must stipulate required procedures by consent of the State Council (Now, Union Government)”
In Chapter (2) of Myanmar Citizen Procedures (Citizen Procedures), stipulated on (20-9-1983) as Notification No.13/83 of Cabinet under power section 75, provided as follows.
Paragraph (4) In 1824 English- Myanmar first war had been broken out. After such period entered in the State and resided as foreigners. Therefore, before the period of Myanmar Era 1185, Christ Era 1823 had been separated and prescribed.
Paragraph(5) Although Kachin, Kayar, Kayin, Chin, Bamar,Mon, Rakhine, Shan etc., are national, if they do not reside in Union permanently as Country of origin and resided in another country permanently as country of origin is not national. The same name ethnic groups who entered in Union and resided after 1823 were not national and not vested Citizens.
Paragraph(7) The persons who were citizens on (15-10-1982), the enforcement data of Constitution under S.145, Sub-Section (b) of the Constitution of the Socialist Republic of the Union of Myanmar.
၁၈။ တရားလွှတ်တော်ချုပ် စီရင်ထုံးများ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ဒေသခံအစ္စလာမ်ဘာသာဝင် များသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေများနှင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပဒေပုဒ်မ ၄(၂)တို့အရ အကျုံးဝင်သော ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ကြောင်း အောက်ပါ လမ်းညွှန်စီရင်ထုံးများတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
(က) မဘီဂမ်ဘဟာခါတွန်ပါ (၁၄)ဦး၏ တရားလွှတ်တော်ချုပ် (ရန်ကုန်)စီရင်ထုံး
အတွင်းဝန် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဝန်ကြီးဌာန
18. RULINGS OF SUPREME COURT
In under mentioned leading Rulings described that the regional Islams, inhabitants within Rakhine State, are Citizens under the Constitution of 1947, the Constitution of 1974 and Section4(2) of the Myanmar Citizenship Act of 1948.
(a) MA BIGUNA BAHAR KHTOOM AND
ANOTHER (13) PERSONS, SUPREME COURT (YANGON)
MA BIGUNA BAHAR KHTOOM ………….. Applicants
Ministry of Immigration and
National Registration and
Another (1)person ………….. Respondents
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရ ပြည်နှင်ဒဏ်အမိန့်၊ ထုချေခွင့်မပေး၍ ပယ်ဖျက်ရခြင်း၊ ထုချေ ခွင့် ပေးရလျှင် လိုက်နာရန် အရေးကြီးသည့်အချက်။
ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိများ စစ်ဆေးသော မှတ်တမ်းများ ကြည့်ရှုလေ့လာပြီးနောက် လျှောက်ထားသူများအား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ မတရားဝင်ရောက်နေထိုင်သူများဟု မှတ်ယူ၍ ပြည်နှင်ဒဏ် အမိန့်များ ချမှတ်ထားသည့်ကိစ္စတွင် အာဏာပိုင်က လျှောက်ထားသူများကို ထုချေ သက်သေပြရန် အခွင့်မပေးသည့်အတွက် အဆိုပါ အာဏာပိုင်၏ အမိန့်များကို ပယ် ဖျက်လေသည်။
ယခုကဲ့သို့ အမှုမျိုးတွင် လျှောက်ထားသူများအား ထုချေခွင့်ပေးရာ၌ သာမန် တရားရုံးတော်များတွင် လိုက်နာသော နည်းလမ်းဥပဒေများအရ စစ်ဆေးရန် မလို ချေ။ အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ သင့်တော်သလို စုံစမ်းရရှိသော သက်သေခံချက် များကို အရေးယူခံရသောသူများအား သိစေပြီး ၎င်းတို့အား ထိုအချက်များ မမှန်လျှင် မမှန်ကြောင်း ငြင်းကွယ်ရန်၎င်း၊ သက်သေအထောက်အထားပြရန်၎င်း အခွင့်အရေးပေးရ မည်ဖြစ် သည်။
ဦးပစ်နှင့် သဲကုန်းရွာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကော်မတီနှစ်ဦး၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာပြည် စီရင်ထုံးများ ၇၅၉၊ ဟာစန်အလီနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုး သားမှတ်ပုံတင်ရေး ၀န်ကြီးဌာနအတွင်း ၀န်မင်းပါ (၂)၊ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ မြန်မာပြည် စီရင်ထုံးများ (တရားလွှတ်တော်) ၁၈၇ တို့ကို ရည်ညွှန်းသည်။
Deportation order under the Immigration Law, cancellation due to did not allow to defend, important fact to abode by if allow to defend.
HELD : In the event the relevantauthority ordered deportations by mean of considering that applicants were intruders into the Union of Myanmar after viewing the investigation records of immigration Officers, all of such authority’s orders were cancelled because of the authority did not allow applicants to defend.
In present case, it is no need to examine under law and procedures which are to be abode by ordinary Courts in order to give right of defence to applicants. The important fact is the evidence got from reasonable examination shall be known by the accused and shall give rights of defence whether the accusation is correct or wrong, if does not correct to deny or to produce witness and evidence.
Thisreferred to V Pit V. Two Agricultural Committee Members of Thaekone Village 1948 MLR, 759; and Hasan Ahli V. the Secretary of Ministry of Immigration & National Registration and another (1), 1959 MLR (S.C).
လျှောက်ထားသူများအတွက် ။ ။ မည်သူမျှမလာရောက်
လျှောက်ထားခံရသူများအတွက် ။ ။ အစိုးရရှေ့နေ ဦးဘဘေ လိုက်ပါသည်။
တရားဝန်ကြီး ဦးဘိုကြီး ။ ။ ဤရုံးတော် ရာဇ၀တ်သေးမှုအမှတ် ၁၆/၆၁ တွင် လျှောက်ထားသူ မဘီဂမ်ဘဟာခါတွန်နှင် အလားတူ အမှု ၁၃မှုတွင် လျှောက်ထားသူ ၁၃ဦးတို့အား စစ်တွေခရိုင်တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိများက စစ်ဆေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ မတရားဝင်ရောက်နေထိုင်သူများ ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူ၍ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (လတ်တလောပြဋ္ဌာန်းချက်များ) အက်ဥပဒေပုဒ်မ၇(၂)အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အာဏာအပ်နှင်းသော စစ်တွေမြို့ ခရိုင်ဝန်ထံ သက်ဆိုင်ရာ အမှုတွဲများ တင်ဆက်ရာ၌ ထိုအမှုများကို စစ်ဆေးပြီး ယခုလျှောက်ထားသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ မတရားဝင်ရောက်နေထိုင် သူများ ဖြစ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး ၎င်းတို့အပေါ် ပြည်နှင်ဒဏ်အမိန့်ချမှတ်၍ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (အုပ်ချုပ်ရေး) နည်းဥပဒေများအရ ချုပ်နှောင်ထားရန် အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်။
ထိုအမိန့်များကို မကျေနပ်သဖြင့် ယခုလျှောက်ထားသူများက ရှေ့တော်သွင်း စာချွန်တော်အမိန့်ဖြင့် ၎င်းတို့အား အချုပ်မှ လွှတ်ပါရန် လျှောက်ထားကြလေသည်။
For Applicants : No one appear
For Respondents : Government Advocate U Ba Bay
U Bo Gyi Judge- In Criminal Miscellaneous Case No.16/61 of this Court, there are Similar (13) Cases. The 13 applicants were investigated by Sittwe District Immigration Officers and considered as intruders into Union of Myanmar so that submitted relevant case files to Sittwe District Deputy Commissioner who was empowered by the President under Section7(2) of the Immigration (Emergency Provision) Act. Those cases had been examined and ordered that present applicants were intruders into Union of Myanmar and passed transportation order on them and to detain under Immigration (Detention) rules of 1951.
The applicants did not satisfy those orders and applied to allow to defend on bail under Habeas corpus.
ထိုလျှောက်ထားသူများအနက် မဘီဂမ်ဘဟာခါတွန် (ရာဇ၀တ်သေးမှုအမှတ် ၁၆/၆၁) ဇော်ဟာခေါ် အဘာ ဒူးဇဖား (ရာဇ၀တ်သေးမှုအမှတ် ၃၀/၆၁)၊ ဟရုံးမီယား (ရာဇ၀တ်သေးမှုအမှတ် ၃၁/၆၁)နှင့် ကာစင်အလီ (ရာဇ၀တ်သေးမှုအမှတ် ၄၅/၆၁)မှ အပ အခြားလျှောက်ထားသူများက မိမိတို့မှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ထုတ်ပေးသော နိုင်ငံသားလက်မှတ် ရရှိသူများဖြစ်သည်ဟု ကျမ်းကျိန်ချက်များတွင် ဖော်ပြပြီး လျှောက်ထားသူ ပွေလီမီယား (ရာဇ၀တ်သေးမှုအမှတ် ၃၃/၆၁) နှင့် အရှောအလီခေါ် အရှေ့အလီ (ရာဇ၀တ်သေးမှုအမှတ် ၃၉/၆၁)တို့က လွန်ခဲ့သည့် ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မိမိတို့ မဲဆန္ဒတွင် ပေးခဲ့ကြောင်း ကျမ်းကျိန်ထွက် ဆိုခဲ့ကြလေသည်။
ထို့ပြင်လည်း ယခုလျှောက်ထားသူ ၁၄ဦးက မိမိတို့အားလုံးသည် ပြည်ထောင်စုသားများဖြစ် သော်လည်း ရုံးတော်ရှေ့၌ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များရှေ့၌ဖြစ်စေ ယင်းသို့ မိမိတို့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အပေါ်၌ စွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်အတိုင်း ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ မတရားဝင်ရောက်နေထိုင်ကြသူများမဟုတ်ကြောင်းကို ထုချေ၍ အထောက်အထား တင်ပြရန်အတွက် အခွင့်မရခဲ့ပါဟု ကျမ်းကျိန်ထွက် ဆိုကြလေသည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ဝန်ကြီးဌာန တွဲဖက် အတွင်းဝန်ဦးမောင်ကြီးက လျှောက်ထားသူ ၁၀ ဦးထွက်ဆိုရည်ညွှန်းသော နိုင်ငံသားလက်မှတ်ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ အက်ဥပဒေပုဒ်မ (၄) ၂ အရ ထုတ်ပေးသော မြန်မာပြည်တွင် နေထိုင်ကြသော သက်သေခံ ကတ်ပြားများ သာဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ထုချေလေသည်။
ဤအမှုများတွင် အဓိကအားဖြင့် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန်အချက်မှာ လျှောက်ထားသူများအားလုံး တသံတည်း ထွက်ဆိုသော မိမိတို့မှာ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်ရှေ့မှောက်၌ ထုချေခွင့် မရခဲ့ပါဟူသော အကြောင်းပြချက်မှန် မမှန်ကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန် ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စစ်တွေမြို့ လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေး (လတ်တလော ပြဋ္ဌာန်းချက်များ) အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇ (၂)အရ အရေးယူသော ကြောင့်ဖြစ် သည်။ ယင်းသို့ အရေးယူရာ ခရိုင်ဝန်က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရ သက်ဆိုင်ရာရုံးတော်တွင် တရားစွဲ မည်ဖြစ်ကြောင်းအစား မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ယခု လျှောက်ထားသူများသည် နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်သည် မဖြစ်သည်ကို အဆိုပါ အက်ဥပဒေကိုဖြစ်စေ၊ ထိုအက်ဥပဒေအရ ပြဋ္ဌာန်းထားသော နည်းဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ် ကိုဖြစ်စေ၊ ကျူးလွန်ချိုးဖောက်သလောဟူသည့် ပြဿနာများကို မိမိကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ ဆုံးဖြတ်ရာ၌ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအပိုဒ် ၁၅၀ အရ ကန့်သတ်ထားသည့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ဝတ္တရားများကိုဖြစ်စေ၊ အာဏာများကိုဖြစ်စေ သုံးစွဲဆောင် ရွက်စေရန် တရားဥပဒေဖြင့် ကျနစွာ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသောသူဖြစ်သည့်အတိုင်း ခရိုင်ဝန်က ဆောင်ရွက်သော ကြောင့် ဖြစ်သည်။
Among applicants, other application except Ma Bigam Bahar Khatoom (Criminal Miscellaneous Case no.16/1), Zahar (a) Bahar Doo Za Phar (Criminal Miscellaneous case No.30/61), Hayone Meer (Criminal Miscellaneous Case No. 31/61)and Kachin Ahli (Criminal Miscellaneous Case No. (45/61), described in Affidavits that they were holder of Citizen cards issued by the Government. The applicant Pwayli Meer (Criminal Miscellaneous No.39/61) gave deposition on oath that they voted in last Parliament Election.
Besides, all of these 14 applicants gave depositions on oath that although all of them are citizens of Union, they did not get right defence to defend and to produce evidence that they are Myanmar Citizens and they are not intruders into Union of Myanmar.
The joint Secretary U Maung Gyi of Ministry of Immigration and National Registration, the Government of the Union of Myanmar defended that the Citizen Card referred by 10 applicants were evidence cards for inhabitants in Union of Myanmar Only issued under Section4(2) of the residents in Myanmar Act.
In these cases the main fact to be considered is the same reason of applicants that they did not get right of defence in the presence of relevant authority, whether such reason was correct or not. Because, taken action under Section 7(2) of Sittwe Immigration (Emergency Provisions) Act. In taking such action District Deputy Commissioner decided by himself that these applicants were foreigners under such Act or committed any Rules of such Act, instead of allegation at competent Court. In deciding so, the District Deputy Commissioner performed Judiciary duties restricted by Section 150 of the Constitution of the Union of Myanmar or powers or empowered authority under law properly.
When view on all relevant case files it is found out that the Deputy Commissioner passed deportation orders after studying investigation records of Immigration officers without giving rights of defence to applicants. Therefore all orders of District Deputy Commissioner must be cancelled.
သက်ဆိုင်ရာ အမှုတွဲအားလုံးကို လေ့လာသုံးသပ်ရာ၌မူကား ခရိုင်ဝန်သည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာ ရှိများ စစ်ဆေးသော မှတ်တမ်းများကို ကြည့်ရှုလေ့လာပြီးနောက် ယခုလျှောက်ထားသူများအား ထုချေ သက်သေပြရန် အခွင့်အရေးမပေးဘဲ ပြည်နှင်ဒဏ်အမိန့်များ ချမှတ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရလေသည်။ ယင်းသို့ တွေ့ရှိရသည်ဖြစ် ၍ ခရိုင်ဝန်၏ အမိန့်အသီးသီးကို ပယ်ဖျက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့သော အမှုမျိုးတွင် လျှောက်ထားသူများအား ထုချေခွင့်ပေးရန် သာမန်တရားရုံးတော်များတွင် လိုက်နာသော နည်းဥပဒေများအရ စစ်ဆေးရန် မလိုချေ။ အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ သင့်တော်သလို စုံစမ်းရရှိ သော သက်သေခံချက်များကို အရေးယူခံရသောသူများအား သိစေပြီး ၎င်းတို့အား ထိုအချက်များ မမှန်လျှင် မမှန် ကြောင်း ငြင်းကွယ်ရန်၎င်း၊ သက်သေအထောက်အထားပြရန်၎င်း အခွင့်အရေး ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤရုံးတော် ဦးပစ်နှင့် သဲကုန်းရွာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကော်မတီ နှစ်ဦး (၁)အမှုတွင် အောက်ပါအတိုင်း မိန့်မြွက်ထားလေသည်။
In present case, it is no need to examine under law and procedures which are to be abode by ordinary Courts in order to give right of defence to applicants. The important fact is the evidence got from reasonable examination shall be known by the accused shall give rights of defence whether the accusation is correct or wring; if does not correct to deny or to produce witnesses and evidence. Regarding with this fact, this Court held as follows in U Pit V. Two Agricultural Committee Members Case.
ထို့ပြင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေ ၇(၂)အရ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ အဆုံးအဖြတ်ပြုရာ၌ ဤရုံးတော်ဟာဆန်အလီနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန အတွင်းဝန်ပါ ၂(၁)အမှုတွင် အောက်ပါအတိုင်း မြွက်ဆိုခဲ့သည်ကို သတိချပ်အပ်ပေသည်။
” In the absence of any specific statuary provision to the contrary applicable to the proceedings ofaquaisi-Judicial body, it is entitled to obtain information in any way it considers situated that those who are parties to the Controversy before it, are givenafair opportunity to correct or Contradict any relevant statement or view to their prejudice.
Besides, relevant authorities ought to take care of under mentioned Ruling of this Court “Hasan Ahli v. Secretary of Ministry of Immigration and National Registration and another (1) person, in deciding by relevant authorizes under Section 7(2) of the Immigration act.
အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းများကြောင့် ယခုလျှောက်ထားသူ ၁၄ဦးအပေါ်၌ ချမှတ်ထားသော ပြည်နှင် ဒဏ်အမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ပြီးလျှင် ၎င်းတို့အား အချုပ်မှ လွှတ်ရန် အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်။
” On the question of adjudgement we desire to observe that this procedure is meant to be confirmed to cases where there is on room for controversy and where is prosecution would beawaste to time and labour, such as whenaforeigner has remained on in Burma under an expired stay permit, or whereastowawaty is caught in Burma waters. But where the question ofaman’s nationality is involve and where as in Hasan Ali’s Case, he is even in possession ofaNational Registration Certificate (being N.R.C AH.No.024299) recourse to Section 7(2)and (3) would be undesired.”
Therefore, deportation orders passed on these 14 applicants are cancelled and to release them from custody.
(ခ) ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံးများ၊ စာမျက်နှာ – ၂၁၅ ဆော်ယော့အလမ် (ခေါ်) ဆော်ယော့ခန် အမတ်ပါ ၂၃ ဦး စီရင်ထုံး တရားလွှတ်တော်ချုပ်
ဆော်ယော့အလမ်(ခေါ်) ဆော်ယော့ခန်အမတ်ပါ ၂၃ ဦး လျှောက်ထားသူ
အတွင်းဝန်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဝန်ကြီး လျှောက်ထားခံရသူ
ဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့ပါ ၂။
လူဝင်မှု အရေးပေါ်အက်ဥပဒေ၊ ကျယ်ပြန့်အာဏာ၊ ပြည်နှင်ဒဏ်မပေးမီ လေးနက်စွာ စဉ်းစားဝေဖန် သင့်ခြင်း၊ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၅၀ နှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စ၊ လုံးဝမသင့်လျော်သော ဆောင်ရွက် ချက်၊ ဥပဒေအရ၊ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားများ၊ ဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီဆန့်ကျင်သော ပြည်နှင်ဒဏ်နှင့် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားခြင်း။
ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ လူဝင်မှုအရေးပေါ် အက်ဥပဒေအရ၊ အာဏာများအပ်နှင်းခြင်းခံရသူအာဏာပိုင်များ အသုံးပြုရမည့်အာဏာများသည် အထူးပင်ကျယ်ပြန့်လှ သည်။ ပြည်နှင်ဒဏ် အမိန့်ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးအတွက် ဖြစ်စေကာမူ၊ အထူးပင်ကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်၍ မှားယွင်းပြီး၊ ပြည်ထောင်စုသားတစ်ဦး ကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့ပါမူ၊ သေဒဏ်လောက် ပင်နီးနီး ကြီးလေးသည့်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ပေမည်။ သို့အတွက် ပြည်နှင်ဒဏ် အမိန့်များကို မပေးမီလေးနက်စွာ စဉ်းစားဝေဖန်သင့်သည်။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ခိုးဝင်လာသည်ဆိုသည်မှာ တရားစီရင်ရေးကိစ္စသာ ဖြစ်၍ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၅၀အရ၊ ကန့်သတ်ထားသည့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ဝတ္တရားအနေဖြင့် တရား ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်စီရင်ဆုံးဖြတ်ရပေမည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထောက်က၊ ထင်သမျှကို စစ်ဆေး၊ ကြားနာခြင်းမပြုဘဲ၊ ပြီးစလွယ် အသင့်ရှိပုံစံတွင် လက်မှတ်ထိုး၍ ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးခဲ့ခြင်းမှာ လုံးဝ မသင့်လျော်ချေ။
မြန်မာပြည်တွင် မြန်မာလူမျိုး အစစ်အများအပြား မရောက်သေးသော ဒေသများ၌ မြန်မာနှင့် အသွင် မတူ၊ မြန်မာစကားမတတ်၊ မြန်မာပြည်တွင် ဘယ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့သည်ကို မပြောနိုင်သော ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားများ ရှိကြသေးသည်၊ ရခိုင်ဒေသများ၌ မြန်မာစကားမတတ်သူပြည်ထောင်စုသားများ အမြောက် အမြား ရှိနိုင်သည်။ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄(၂)အရ၊ ရှေးအခါက နိုင်ငံခြားမှလာ၍ နေထိုင်ကြသူများမှ ဆင်းသက်သော မြေးမြစ်များသည် ဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည် ကိုလည်း သတိမူသင့်သည်။
(b) SAW YAWT ALAM (a) SAW YAWT KHAN AND ANOTHER (23) PERSONS, 1960 MLR, P.215.
SAW YAWT ALAM (a) ……………….. Applicants
SAW YAWT KHAN and
Another (23) persons.
SECRETARY, ……………….. Respondents
MINISTRY OF IMMIGRATION &
NATIONAL REGISTRATION ,
Another (1) person.
Immigration Emergency Act, Wider Power, ought to consider and view deeply before deportation, matter to be performed in accordance with Section 150 of the Constitution, absolute unreasonable performance, Union Citizens, under law; deportation arrest and detention which are not in accordance with law.
Held: The powers to be used by empowered authorities under the Immigration Emeregency Act are wider especially. As Deportation Order is grievous punishment foraCitizen, If punishaCitizen wrongly it is nearly punishment for death sentence.Therefore ought to consider deeply before deportation orders.
As any person intruding into Union of Myanmar is only Judiciary affair, must adjudicate in accordance with law for limited Judiciary duty under Section 150 of the Constitution. Immigration Officer examined as he thought fit and did not hear and signed in ready from unsystematically and punished for deportation were not reasonable absolutely.
At many regions were pure Myanmars do not arrive in Union of Myanmar, there are natives of Union who are different characters from Myanmar, do not speak Myanmar Language and also do not know about history of Union. At Rakhine regions, there may be many natives of Union who do not speak Myanmar language. Under S.4 (2) of the Union Citizenship Act, the descendants, grand-children and grand-grandchildren from inhabitants who were coming from foreign countries in ancient times are union Citizens under law. Ought to pay attention to such fact.
ထို့ကြောင့် ဖမ်းဆီးသည့်နေ့ကစ၍ ထောင်ထဲတွင် ချုပ်ထားခြင်းခံရသော လျှောက်ထားသူကို တရား သဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်နေထိုင်သူများဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားပြ ရန်အတွက် အခွင့်အရေး လုံးဝမပေးသည့်အပြင် ကိုင်ဆောင်သည့် နိုင်ငံသား၊ လက်မှတ်များကိုပင် အာဏာပိုင်များက သိမ်းဆည်းထားပြီး လျှောက်ထားသူများ သည် မြန်မာစကားပင် မတတ်၊ တရားသဖြင့် မြန်မာပြည်သို့ ၀င်ရောက်နေထိုင်ကြ သူများဖြစ် ကြောင်းကို ယုံကြည်လောက်အောင် မပြနိုင်ဟု အကြောင်းပြပြီး၊ လူဝင်မှု အရေးပေါ်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၇(၂) အရ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်းသည် တရားဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီ၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခြင်းမှာ တရားဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင် သော ချုပ်နှောင်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။
လျှောက်ထားသူများအတွက် ။ မရှိ။
လျှောက်ထားခံရသူများအတွက် ။ အစိုးရလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးလှမောင် လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်သည်။
တရားဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်သိန်း ။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အကုန်လောက်တွင် စစ်တွေခရိုင် မောင်တောဒေသရှိ ရွာများမှ ပါကစ္စတန်အမျိုးသားများဖြစ်သည်ဟု မသင်္ကာသူအမြောက်အမြားတို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးရန်အတွက် ချုပ်နှောင်ထားခဲ့သည်။
ဤရုံးတော်၏ ၁၉၅၉ ခုနှစ် ရာဇ၀တ်အသေးအဖွဲ့မှုအတွက် ၁၅၅ နှင့် ၁၅၆ တို့တွင် ဟာဆင်အလီ ဆိုသူနှင့် မူဟာအလီဆိုသူတို့၏ စာချွန်တောင်အမှုများကို စစ်ဆေးပြီး ၎င်းတို့အား ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခြင်းမှ လွှတ်ပစ်ရန် ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့စွဲနှင့် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ စီရင်ချက်တွင် ဖော်ပြသည့် အချက်များကို လေးစားလျက် အခြားဖမ်းဆီးထားသူများကို အာဏာပိုင်များက လွှတ်ပစ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆခဲ့သော်လည်း ထိုယူဆခဲ့သည့်အတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိသည်ကို မကြာမီပင် တွေ့ကြုံခဲ့ရတော့သည်။ ထိုသို့ ဆက်လက်၍ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသူများနှင့်ပတ်သက်၍ ဤရုံးတော်၏ ၁၉၅၉ ခုနှစ် ရာဇ၀တ် အသေးအဖွဲ့မှုအမှတ် ၁၆၃ မှ ၂၃၉ တို့ကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ၇၆ ဦးကို တဖန် လွှတ်ပစ်ရန် အမိန့် ချမှတ်ရပြန် တော့သည်။ ဤကဲ့သို့ ဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီဘဲ ချုပ်နှောင်ဖမ်းဆီးထားသဖြင့် အနစ်နာခံရနေသူများ ကုန်လောက်ပြီဟု ဤရုံးတော်က ယူဆခဲ့သည်မှာ နောက်တစ်ကြိမ် မှန်းခြေနှင့် မညီပြန်ကြောင်း တွေ့မြင်ရသည်။ ယခုထပ်မံ၍ ၂၃ ဦးက မိမိတို့အား မြန်မာပြည်မှ နှင်ထုတ်ရန် ချုပ်နှောင်ထားသဖြင့် လွှတ်ပစ်ပါရန် စာချွန်တော်များ လျှောက်ထားကြသည်။
ဦးစွာဖော်ပြရမည်မှာ လိုက်ပါဆောင်ရွက်သူပညာရှိအစိုးရရှေ့နေကြီးက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန အနေနှင့် ဤလျှောက်လွှာများကို ကန့်ကွက်၍ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများကို မှန်ကန်သည်ဟု ထောက်ခံ စေလိုသော်လည်း မိမိအနေနှင့် မထောက်ခံနိုင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ လျှောက်သူတို့၏ အစစ်ခံချက်များ တွင် မိမိတို့သည် ပြည်ထောင်စု သားဖြစ်သည် ဟု ထွက်ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း။ အချို့လည်း တိုင်းရင်းသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားများပင် ပြနိုင်ကြကြောင်း၊ လျှောက်သူများသည် မြန်မာပြည်တွင်း သို့ ခိုးဝင်လာကြသူများဖြစ် သည်ဟု ယူဆရန် တရားဝင် သက်သေခံ အထောက်အထားမရှိကြောင်း။ ဤကဲ့သို့ အလားတူ အမှုများတွင် ဤရုံးတော်က ဖော်ပြသည့် အချက်အလက်များကို လေးစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အစိုးရရှေ့နေ ကြီးက ဖော်ပြသည်။
ဤအမှုများတွင် လျှောက်သူတို့ကို ဖမ်းဆီးပြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထောက်တစ်ဦးက စစ်ဆေးခဲ့ သည်။ လျှောက်သူများက မိမိတို့သည် ခိုးဝင်လာသူများမဟုတ်။ မိဘဘိုးဘွား ကစ၍ မြန်မာပြည်အတွင်းတွင် နေထိုင်ပေါက်ဖွားခဲ့ကြကြောင်း။ အချို့က နိုင်ငံသားလက်မှတ်များပင် ရှိကြကြောင်းကို အစစ်ခံသော်လည်း ၎င်းတို့သည် မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ခိုးဝင်လာကြသူများဖြစ်၍ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးရန် ဘူးသီးတောင်နယ်ပိုင် ၀န်ထောက်မင်းထံသို့ လျှောက်ထားတော့သည်။ ဤကဲ့သို့ တင်သွင်းသည့် လျှောက်လွှာများမှာလည်း ပုံနှိပ်ထားသည့် ပုံစံများဖြစ်ပြီး နာမည်၊ အသက်၊ အမှတ်အသားလောက်သာ မှင်နှင့်ရေး၍ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ၀န်ထောက်မင်းထံသို့ ရောက်သည့် အခါ၌လည်း အလားတူ အသင့်ပုံနှိပ် ထား သည့် ပြည်နှင်ဒဏ် ပုံစံများတွင် လျှောက်သူတို့၏ နာမည်များ ရေးသွင်း၍ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ လျှောက်သူများကိုပင် ခေါ်၍ စစ်ဆေးခြင်းမရှိ သည့်အပြင် ပြည်ထောင်စု သားများ ဖြစ်ပါသည်ဟု ချေပရန် အခွင့်အရေးမရရှိခဲ့ကြဘဲ ယခုထက်တိုင် ထောင်ထဲတွင် ချုပ်နှောင်ခြင်းခံနေရရှာ ကြတော့သည်။
မောင်တောမြို့နယ်ပိုင်ဝန်ထောက်မင်းနှင့်အလားတူ လူဝင်မှုအရေးပေါ်အက်ဥပဒေအရ အာဏာပိုင်များ အပ်နှင်းခြင်းခံရသူ အာဏာပိုင်များတို့ကို လေးနက်စွာ သတိပေးလိုသည်မှာ မိမိတို့အသုံးပြုရမည့် အာဏာများသည် အထူးပင် ကျယ်ပြန့်လှသည်။ ပြည်နှင်ဒဏ်အမိန့်ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးအတွက် ဖြစ်စေကာမူ အထူးပင် ကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်၍ မှားယွင်းပြီး ပြည်ထောင်စုသားတစ်ဦးကို ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးခဲ့ပါမူ သေဒဏ်လောက်ပင်နီးနီး ကြီးလေးသည့် ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ပေမည်။ သို့အတွက် ပြည်နှင်ဒဏ် အမိန့်များကို မပေးမှီ လေးနက်စွာ စဉ်းစားဝေဖန်သင့်သည်။
ဤကဲ့သို့သော အမှုများတွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ခိုးဝင်လာသည်ဆိုသည် မှာ တရားစီရင်ရေးကိစ္စသာဖြစ်၍ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၅၀ အရ ကန့်သတ်ထားသည့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ဝတ္တရားအနေဖြင့် တရားဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်စီရင်ဆုံးဖြတ်ရပေမည်။ ယခုကဲသို့ပင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထောက်က တင်သမျှကို စစ်ဆေးကြားနာခြင်းမပြုဘဲ ပြီးစလွယ် အသင့်ရှိပုံစံတွင် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့ခြင်းမှာ လုံးဝမသင့်လျော်ကြောင်းကို ဤရုံးတော်က ဖော်ပြလိုက်သည်။
Therefore, detention and deportation upon applicants is illegal arrest under S.7 (2) of the Immigration (Emergency) Act on the ground that did not give right of defence to show evidence as they were legal inhabitants in Union of Myanmar with effect from data of arrest in Jail, and seized their holding Citizenship Cards by authorities, and did not show sound evidence that they could speak Myanmar language and legal inhabitants.
For applicants : No.
For respondents : Government Advocate, U Hla Maung
In about end of 1959, many suspected persons in villages, Maungtaw Region of Sittwe District were arrested as they were suspected as Pakistan nationals and detained in order to make deportation.
In Criminal Miscellaneous Case No.155/1959 and 156/1959 of this Court Hason Ali and Muhar Ali had been released from detention after examination their submitted Habeas Carpus Cases under order passed on (4-11-1959). Although assumed that authorities should release other arrested persons due to paying respect to such Judgement, it was found out recently that it did not happen as per such Judgement. Therefore this Court have to pass order to release 76 persons again after examination of further arrested 239 persons in Criminal Miscellaneous Case No.163/1959. As arrested illegally it was found out that the assumption of this Court is not accord with estimation again and arrested persons were not ended. Now, again 23 persons applied Habeas Carpus Cases in order to release from detention and deportation from the Union.
Firstly I have to explain that I do not recommend on performances of Immigration Department and objection of upon this applications submitted by the learned Government Advocate. In depositions of the applicants found out that they are Union Citizens. Some could show registration cards and there were no legal evidence to be considered that they were illegal trespassers into Union of Myanmar. In similar cases Government Advocate described that the mentioned facts of this Court shall be paid respect.
In these cases, an Immigration Officer arrested and investigated the applicants. Although the applicants gave depositions that they were not trespassers; they were descendants from inhabitants ancestors in Union of Myanmar and some have Citizen cards, they had been applied to Buthitaung regional Officer in order to deport as trespassers. Those submitted applications are printed forms and filled up only names, age and marks by written ink. When arrived at township officer filled up similarly with ready made printed deportation forms and signed by applicants. Did not call and examine applicants and did not get rights to defend that they were Union Citizens and they are detained in Jail upto now.
I have to warn Maungtaw Township Officer and similar authorities authorized under the Immigration Emergency Act deeply that the power to be exercised by them are very wide. Deportation order means as heavy punishment especially even though foraforeigner, if punished deportationaUnion Citizen wrongly it shall be heavy as sentence for death so that ought to consider deeply before sentence for deportation.
In those cases, any persons who has trespassed into Union of Myanmar meansaJudiciary matter only and must adjudicate in accord with law as restricted Judiciary responsibilities under S.150 of the Constitution. This Court have to mention that deportation is not reasonable absolutely after signing in ready made form easily without examination all submitted cases by the Immigration Officer like that of present case.
In this case Joint Secretary of Immigration Ministry described that applicants did not speak Myanmar language absolutely and could not give sound evidence that they were legal inhabitants in Union of Myanmar.
ဤအမှုတွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တွဲဘက်အတွင်းဝန်မင်းက လျှောက်သူများသည် မြန်မာ စကားပင် မတတ်၊ တရားသဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်နေထိုင်ကြ သူများဖြစ်ကြောင်းကို ယုံကြည် လောက်အောင် မပြနိုင်ဟု ဖော်ပြသည်။
ဤကဲ့သို့ ချေပခြင်းမှာ အဆန်းမဟုတ်၊ ရှေးကအမှုများတွင်လည်း ထိုနည်းတူ ချေပခဲ့သည်ကို ဤရုံးတော်က ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင် မြန်မာလူမျိုး အစစ်အများအပြား မရောက်သေးသော ဒေသများ၌ မြန်မာနှင့် အသွင်မတူ၊ မြန်မာစကားမတတ်၊ မြန်မာပြည်တွင် ဘယ်တုံးက ဘာဖြစ်ခဲ့သည်ကို မပြောနိုင်သော ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများ ရှိကြသေး သည်။ ရခိုင်တိုင်းဒေသများ၌ မြန်မာစကားမတတ်သူ ပြည်ထောင်စုသားများ အမြောက်အမြားရှိနိုင်သည်။ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄(၂)အရ၊ ရှေးအခါက အခြားနိုင်ငံခြားမှလာ၍ နေထိုင်ကြသူများမှ ဆင်းသက်သော မြေးမြစ်များသည် ဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်ကိုလည်း သတိမူသင့်သည်။
ယုံကြည်လောက်အောင် အထောက်အထားမပြနိုင်ဆိုသည့်အချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးသည့်နေ့ ကစပြီး ထောင်ထဲတွင် ချုပ်ထားသူတို့ကို အထောက်အထားပြရန်အတွက် အခွင့်အရေးကို လုံးဝမပေးသည့် အပြင် ကိုင်ဆောင်သည့် နိုင်ငံသားလက်မှတ်များကိုပင် အာဏာပိုင်များက သိမ်းဆည်းထားသေးသည်။
လျှောက်သူ ၂၃ ဦးတို့ကို မြန်မာပြည်သို့ ခိုးဝင်လာသူများဟု ယူဆနိုင်ရန် တရားဝင် သက်သေခံဖြစ်နိုင် သော အထောက်အထား လုံးဝမရှိ၍ ထိုကဲ့သို့သော ယူဆချက်များကို ကိုးကားပြီး လူဝင်မှု အရေးပေါ် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ၇(၂)အရ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်းသည် တရားဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သော ချုပ်နှောင်ထားခြင်း သာဖြစ် သောကြောင့် မောင်တောနယ်ပိုင် ၀န်ထောက်မင်း၏ အမိန့်များကို ပယ်ဖျက်ပြီး လျှောက်သူများအား အချုပ်မှ ချက်ခြင်း လွှတ်ပစ်ရန် အမိန့်ချမှတ်သည်။
၁၉၅၅ ခုနှစ်မှစ၍ ၁၉၈၂ ခုနှစ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ဒေသခံ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်သက်သေခံကဒ်ပြားများကို ကိုင်ဆောင်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြ သည်။ ၁၉၈၂ ခု၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် ယင်းဥပဒေအရ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ ထုတ်ပေးသော နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားကို စတင်ထုတ်ပေး သည့်အချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော အခြားတိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားများနည်းတူ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်သက်သေခံကဒ်ပြားများကို ကိုင်ဆောင် ခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါသည်။
Such defence is not strange. In former cases also defended similar argument so that this Court had criticized on it. At many regions whwere pure Myanmars do not arrive in Union of Myanmar, there are natives of Union who are different characters from Myanmar, do not speak Myanmar Language and also do not know about history of Union. At Rakhine regions there may be many natives of Union who do not speak Myanmar Language. Under S.4 (2) of the Union Citizenship Act, the descendants of, grand-children and grand-children from inhabitants who were coming from foreign countries in ancient times are Union Citizens under law. Ought to pay attention to such fact.
In respect of did not give sound evidence, did not give right of defence to show sound evidence to applicants in Jail sufficiently and absolutely with effect from date of arrest and authorities seized their Citizen Cards.
The deportation under S.7 (2) of the Immigration Emergency Act on the ground of assumption that 23 applicants did not give sound deviance that they were not illegal trespassers into Union of Myanmar, is not in accord with law and the detention is also wrong under law so that orders of Maungtaw Township Officer are cancelled and order to release the applicants from Jail immediately.
19. NATIONAL REGISTRATION CARD
The Islam residing in Rakhine State were entitled to hold national registration card from 1955 up to 1982. After enactment of the Citizenship Law of 1982, with effect from Citizen Scrutiny Card issued date 1989 under such Act, Islam residing in Union of Myanmar are entitled to hold National Registration Cardsas other natives of Union.
မောင်တောမြို့တွင် ၁၉၅၅ ခုနှစ် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်သက်သေခံကဒ်ပြားများ စတင်ထုတ်ပေးပြီး၊ ယင်း နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်ကြသော ဒေသခံ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်သက်သေခံကဒ်ပြားများ ဆက်လက် ထုတ်ပေးမှုလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေအရလည်းကောင်း၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄(၂)အရလည်းကောင်း၊ ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလည်းကောင်း၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ အရလည်းကောင်း၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရလည်းကောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြ သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် ဥပဒေအရ နိုင်ငံ သား၊ မွေးရာပါ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ရရှိခံစားခွင့်ရခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါလျက် ၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်သော ညွှန်ကြားချက်များ အရ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားများအား ထုတ်ပေးရန် ဆိုင်းငံ့ခြင်းကို ခံခဲ့ကြရပါသည်။
သို့ရာတွင် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မူလအမျိုးသား မှတ်ပုံတင် သက်သေခံကဒ်ပြား ကိုင်ဆောင်သူနှင့် ၎င်းတို့မှ မွေးဖွားပြီး အရွယ်ရောက်သူများ အနေဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်၊ ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ရရှိခဲ့ကြသည့်အပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံ ယူပွဲဖြင့် အတည်ပြုသည့်အခါတွင် မဲဆန္ဒပေးခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲတွင်လည်း မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်၊ ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးလည်း ရရှိခဲ့ကြပါသည်။
In Maungtaw national registration cards were issued in 1955 and then the Islam residing within Rakhine State had been issued national registration card. Although Islam residing within Rakhine State are entitled to enjoy as vested Citizenship under the Constitution 1947, Section 4(2) of the Residents Registration Act in Union, the Constitution 1974, and the Constitution 2008, have been suspended to issue the Citizen Scrutiny Card under directive of the Citizenship Law 1982.
But, former holders of national registration cards and the persons who attained at age of majority, descendants from them were entitled to vote and candidate fully in Multiparties Democracy General Election, 1990 and also entitled to vote the referendum of the Constitution 2008. Also entitled to vote and to be elected in the Multiparties Democracy General Election 2010.
၂၀။ ၁၉၈၇ ခုနှစ် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေအရ လည်း မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ လွှဲပြောင်းရောင်းချ၊ ပေါင်နှံ၊ ပေးကမ်း လဲလှယ် ခွင့်များ ကို အခြား တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားများနည်းတူ အခွင့်အရေးများ အပြည့်အ၀ ရရှိခံစားလျက်ရှိကြသည်။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရရှိခံစားလာခဲ့ကြပြီးဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်း နေထိုင်ကြသည့်ဒေသခံအစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအားလက်ရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ အင်အားဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် တင်းကြပ်သော ညွှန်ကြားချက်များကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်အညီ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။
20. Also entitled to enjoy fully as other natives of Union in respect of title ship, transfer, sale, mortgage, gift, exchange on immovable properties under the Immovable Property Restriction Act, 1987.
Therefore, it is required to revise the strict directives stipulated by Present Department of Immigration and Population upon regional Islam residing within Rakhine State who have been enjoyed above citizenship rights, in accordance with international norms.
၂၁။ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်မှု
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် နိုင်ငံသားဥပဒေ၌ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံခြားသားဟူ၍ နှစ်မျိုးတည်း သာ ခွဲခြားပြဋ္ဌာန်း ထားရှိမည့်အပြင် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံ
21. REQUIREMENT TO REVISE IN ACCORDANCE WITH
In respective citizen laws of countries of the world, provided as two types such as Citizen and foreigner only. Also in the constitution of 1947 and the constitution of 1974 provided citizen and foreigners, two types only. But the Citizenship Law of 1982 had been enacted against operational constitution of 1974 as three types
အခြေခံဥပဒေများတွင်လည်း နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံခြားသားဟူ၍ (၂)မျိုးတည်းသာရှိကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းပါရှိပြီး ၁၉၈၂ ခုနှစ် တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသည့်အခါ ထိုစဉ်ကအတည်ဖြစ် လျက်ရှိခဲ့သော ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်၍ (က) နိုင်ငံသား (ခ) ဧည့်နိုင်ငံသား (ဂ) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဟူ၍ နိုင်ငံသားသုံးမျိုးသုံးစားခွဲ ခြား သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေသည် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် မကိုက်ညီသည့် အပြင် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအခြေခံဥပဒေကို ဆန့်ကျင်၍ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရာ ရောက်နေပါသဖြင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာ နိုင်ငံသား ဥပဒေအခန်း(၁)၊ ပုဒ်မ (၂)၊ ပုဒ်မ ၂(ဂ)၊ ပုဒ်မ ၂(ဃ)၊ ပုဒ်မ ၂(ဆ)၊ ပုဒ်မ ၂(ဇ) တို့နှင့် သက်ဆိုင်သမျှ ဥပဒေ၊ နည်း ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အမိန့်ညွန်ကြားချက်များအားလုံးကို ပယ်ဖျက်၍ နိုင်ငံတကာစံနှုန်း နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။
(a) Citizen (b) Associate Citizen and (c) Naturalized Citizen.
Therefore, it is required to revise Chapter (1), Section (2), Section 2(c), Section 2(d), Section 2(g), Section 2(h) of the Citizen Act of 1982 and to cancel its all relevant rules, procedures, orders and directives in accordance with international norms.
၂၂။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ရခိုင်လူမျိုး၊ ဒိုင်းနက်၊ မရမာကြီး(ခ)ဘရူးဝါ နှင့် သက်လူမျိုးတို့မှာ တစ်ဘက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများကို ရရှိခံစားဘိသကဲ့သို့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း၊ တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများကို ရရှိခံစားလျက်ရှိပါသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး အပါအ၀င် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဝန်ကြီး (၃)ဦးပင် ယခုအခါ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိနေပါသည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ်ကြီး ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် ဒိုင်းနက်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ဒေသခံ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို မည်သည့် လူမျိုးဟု ခေါ်စေကာမူ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့် မကိုက်ညီသော ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်၍ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား၊ အခွင့်အရေး တားဆီးခံရသဖြင့် အဆိုပါ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များကို အစောတလျှင် ပယ်ဖျက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
22. MINORITY ETHNIC GROUPS
The Rakhine, Dinet, Maramagyi (a) Baruwa and Thet are inhabitants in Rakhine are enjoying rights of minority ethnic groups and Citizens in Bangladesh as well as they are also enjoying rights of natives and citizens in the Republic of the Union of Myanmar. Now, there are (3) Rakhine Buddhists ministers including one female minister serving in Bangladesh. The present Ambassador of Bangladesh to the Republic of the Union of Myanmar isaDainet race and Buddhist. We have studied and find out it.
It is necessary to cancel directives stipulated by Department of Immigration and Population which are not in accordance with international norms in respect of rights ofminority of Union of Myanmar whether the regional Islam, residing within Rakhine State are what kind of race.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်း အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သော စင်္ကာပူ (Singapore)နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၁၂၀) အပိုဒ်ခွဲ (၂)ပါ နိုင်ငံသားဆိုရာတွင် (a) by birth, (b) by descent (c) by Registraction or , before the commencement of this constitution, by enrolment, or (d) by naturalization ဟု ဖော်ပြထားပြီး၊ ပုဒ်မ (၁၂၃) (c) တွင် စကာင်္ပူနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံသားလျှောက်ထားသည့်နေ့မှစ၍ (၁၂)နှစ်အတွင်းအနည်းဆုံး (၁၀)နှစ် နေထိုင်သူသည် နိုင်ငံသားအဖြစ် လျှောက်ထားရယူခွင့်ရှိကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
23. THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
In Section 120 (2) of the Constitution of the Republic of Singapore, neighboring country of Union of Myanmar andamember state of ASEAN, provided the Citizen as (a) by birth, (b) by descent, (c) by Registration or, before commencement of this Consitution, by enrollment, or (d) by naturalization and In Section 123 (c) provided that the resident who had resided at least (10) years within (12) years with effect from commencement date of citizen application at Singapore, is entitled to apply as Citizen.
၂၄။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တွေ့ရှိချက်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ဒေသခံ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ထုတ်ဝေသော ”သာသနာ့ရောင်ဝါထွန်းစေဖို့”စာအုပ်အရ အေဒီ ၇၈၈-၈၁၀ တွင် ရမ်းဗြဲကျွန်းအနီး သင်္ဘောများ ပျက်ခဲ့ကြောင်း၊ အစ္စလာမ် ဘသာဝင် သင်္ဘောသားများအား ရခိုင်ပြည်မသို့ ပို့ကာ ကျေး ရွာများတွင် အတည်အကျနေရာချထား ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရ၏ဟု ရေးသားဖော်ပြချက်နှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ တွင် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ယှဉ်တွဲလေ့လာပါက ရာစုနှစ်ပေါင်း ထောင်ချီ၍ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်အခြေချ နေထိုင်လာခဲ့ကြသော ဒေသခံအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နိုင်ငံသားအခွင့် အရေးပင် အပြည့်အ၀မရရှိဘဲရှိနေရသည်ကို ထောက်ထားပါ က နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသော နိုင်ငံသားဥပဒေတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ရန် အထူးလိုအပ်နေကြောင်း တွေ့မြင် ရပါသည်။
24. FINDINGS OF MINISTRY OF DEFENCE
According to the book known as “Sasana Yaung War Tun Lin Say Bo” published in March of 1997 by Directorate of Resettlement under Ministry of Defence, regional Islam residing within Rakhin State, written that it was found out the crew of Islams wrecked near Yangye Island in AD 788-710 had been sent to villages in Rakhine City State and settled there. If study such findings together with Citizenship in Singapore, the regional Islam who were residing for thousands of century since their grand-ancastors did not get citizen rights fully in Rakhine State. It shows that it is required to enactaCitizen Law which is in accordance with international norms.
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ဒေသခံအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဥပဒေများအရ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ရရှိခံစား ခဲ့ပြီးသူများ ဖြစ်သည့်အပြင် ယခင်ဝန်ကြီးအဖွဲ့က တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်၍ “ဥပဒေသည် နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာသက်ရောက်မှုမရှိစေရ”ဟူသော ထုံးသာဓကနှင့်အညီ ပြည်သူများ ရရှိပြီးအခွင့် အရေးများကို ဥပဒေသစ်များ ပြဋ္ဌာန်းရာ၌ ယခင်ရရှိပြီးသော ဥပဒေပါအခွင့်အရေးနှင့် မွေးရာပါ အခွင့်အရေးများ ကို ဆုံးရှုံးနစ်နာစေရန် ဆောင်ရွက်နိုင် မည် မဟုတ်ပါ။
The regional Islams, residing within Rakhine State have been enjoyed Citizen rights under Contitutions of Union of Myanmar and National Registration Act and former Cabinet had recognized as natives so that former entitled rights under laws and vested rights by birth may not be performed to be lost in enacting new laws against retrospective effects.
၂၆။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေပြင်သင့်ကြောင်း တင်ပြချက်
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင် နိုင်ငံသားတစ်မျိုးတည်းသာပါရှိရာမှ နိုင်ငံသားသုံးမျိုးခွဲခြား၍ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းဖော်ပြထားသဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ နိုင်ငံသားတစ်မျိုးတည်းသာ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ပြန်လည် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးပါရန် အကြံပြု တင်ပြအပ်ပါသည်။
26. SUBMISSION FOR OUGHT TO REVISE THE CITIZEN ACT OF 1982
In the constitutions of 1947 and 1974, provided onlyatype of Citizen but there were three types of Citizens provided in the Citizen Act of 1982 so that hereby submit and advise ought to revise as only one type of citizen in accordance with the Constitution and international standards and norms.
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ၁၉၉၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် များ၏ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်များကို များသောအားဖြင့် လ၀ကဌာနမှ သိမ်းဆည်း၍ ၎င်းမှတ်ပုံတင်အစား ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်များကို ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်သူများ၏ မျိုးဆက် သားသမီးများ ကိုလည်း လ၀ကဦးစီးဌာနမှ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် (အဖြူကတ်)ကိုသာ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်သူ မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူမျိုးဆက်များကို လ၀ကဦးစီးဌာန ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းသည် အဆင့်တစ်ဆင့်လျော့ကျသည်ဖြစ်၍ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင် သူများ၏ တာဝန်မရှိဟု ဆိုရပေမည်။ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ကဒ်ပြားကိုင်ဆောင်ခဲ့ကြသူများ၏ မှတ်ပုံတင်များကို များသောအားဖြင့် လ၀ကမှ သိမ်းဆည်းပြီး ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် (အဖြူကဒ်) ၅၀၀၀၀၀ကျော် ထုတ်ပေးထားခြင်းမှာလည်း အမိန့်စာများသည် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လွှမ်းမိုးရာကျရောက်သဖြင့် ပြန် လည်ပြင်ဆင် ပယ်ဖျက်သင့်ပါသည်။
အထက်ပါ တင်ပြချက်များအရ ဆိုပါလျှင် ရခိုင်ပြည်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ဒေသခံအစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များမှာ တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို ယခင်ကပင် ရရှိခံစားခဲ့ပြီး သူများဖြစ်၍ ဥပဒေအရ ဆက်လက်ရရှိခံစားထိုက်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ဆုံးဖြတ်ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။
27. TEMPORARY CERTIFICATE
Department of Immigration and Populations seized national registration cards of Islam residing in Buthitaung+Maungtaw Township of Rakhine State after 1993 and issued temporary certificates instead of national registration cards. Department of Immigration and Populations also issued temporary certificate (white cards) only to children, descendants of holder of national registration cards. The issue of over 500000 temporary certificates (white cards) after seizure of national registration cards from holder of national registration cards is alleviation of status and those orders were over whelming upon provisions of laws so that ought to cancel those orders.
According to above mentioned facts as the regional Islam residing within Rakhine State have been enjoyed rights of natives and Citizen formerly we herebysubmit respectfully to the Union Hluttaw in order to decide that they are still entitled to enjoy under laws.
သဘာဝအလျောက် မွေးရာပါ နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြောင်း တင်ပြချက်များ
” သမိုင်းစာမျက်နှာအပေါ် ပျောက်ဆုံးနေသည့် ရခိုင်သမိုင်းအချို့ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်တင်ပြခြင်း”
ဝေသာလီ ရခိုင်ပြည်တွင်း ပြောဆိုခဲ့ကြသော စကားများမှာ ယနေ့ ရခိုင်ပြည်မှ ဒေသခံမွတ်စလင်များ ပြောနေသော စကားဖြစ်ကြောင်း တင်ပြချက်။
ဘိုးတော်ဘုရားက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူမျိုးအသီးသီးတို့၏ ဘာသာစကားများကို မှတ်တမ်းတင်စေ ခဲ့ရာ ပညာရှင်များ ပြုစုလေ့လာမှတ်တမ်း တင်ထားသော ပုရပိုက်တစ်ဆူကို စကားစုဘုရားဟု အမည်ပေးခဲ့ သည်။ ထိုစကားစု ဘုရားပုရပိုက်တွင် ဟိန္ဒူစကား၊ ဘင်္ဂလီစကား၊ ကလယ်စကား၊ ပသီစကား၊ အာမေးနီးယား စကား၊ အင်္ဂလိပ်စကား၊ ဘရင်ဂျီစကား၊ ပသျှူးစကား၊ ဝေသာလီရခိုင်စကား၊ အက္ကပတ်စကား၊ ကသည်း စကား(မဏိပူရပုဏ္ဏားစကား)ဓည၀တီပုဏ္ဏား စကားတို့ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ယှဉ်တွဲဘာသာပြန်ဆို မှတ်တမ်း တင်ထားခဲ့သည်။
ဒေါက်တာဒဂုန်ရေး စာပေဗိမာန်စာမူဆုရ ” ရာဇ၀င်ထဲမှာ ပုဏ္ဏား” အမည်ရှိစာအုပ်၏ စာမျက်နှာ (၁၇၂) မှ (၁၈၀) အထိတို့တွင် စကားစုဘုရားပုရပိုက်ထဲမှ ဝေသာလီစကားအလုံး (၃၀၀)နီးပါးကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားရာ ထိုဝေသာလီခေတ်က ရခိုင်ပြည်သုံးစကားလုံးများ၏ ၈၀%ခန့်မှာ ယနေ့ ရခိုင်ပြည်မှ ဒေသခံ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ နေ့စဉ် ပြောဆိုနေကြသော စကားလုံးများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
(စကားစုဘုရားပုရပိုက်ကို အမရပူရမြို့နယ်၊ တောင်သမန်တောင်လေးလုံးကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော် ဦးပညာဇောတ (ကိုပညာ-အမရပူရ)က ကျေးဇူးပြုကြောင်း ဒေါက်တာ ဒဂုန်က ဖော်ပြထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ (စကားစုဘုရား ပုရပိုက်ပါ ဝေသာလီစကားများကို)
SUBMISSION ABOUT VESTED CITIZENS BY BIRTH NATURALLY
“SUBMISSION AND RESEARCHES IN RESPECT OF SOME HIDDEN
RAKHINE HISTORICAL FACTS”
Submission of the fact that the words used in Waithali Age of Rakhine City State were the words used by regional Muslims in Rakhine State today.
(1) WAITHALI (VESALI) AGE’S RAKHINE WORDS
As Botaw Phaya had allowed to record the languages of respective races in Union of Myanmar,arecorded palm _ leaf inscription of group of words made by scholars was named as Sakasu paya. In such inscription Hindu Language, Bingali language, Kalai Language, Pathi Language, Armenian Language, English Language, Catholic Language, Pashu Language, Waithai Rakhine Language, Akhapak Language, Kathe Language (Manipur Language), Danyawadi Language etc were translated into Myanmar Language and recorded.
In pages 172-180 of the book named as “Yazawun Hteka Puna” written by Dr. Dagon, mentioned that almost 300 words of Waithali were described in Sakasu Paya Palm-leaf inscription so that about 80% of Rakhine City used words of that Waithali Age were found out that those words are daily using by today regional Islams in Rakhine State.
(Sakasu Paya Palm- leaf inscription was given by Sayadaw U Pyinnya Jawta of Taungthaman Taunglaylone Monastery, Amarapura Township (Ko Pyin Nyar- Amarapura) to Dr. Dagon (Payasakasu palm leaf inscription contained Waithali Words) .
(၂) အနန္ဒစန္ဒြကျောက်စာပါ စကားလုံးများ
မြောက်ဦးမြို့၊ ရှစ်သောင်းပုထိုး၌ စိုက်ထူထားသော အာနန္ဒာစန္ဒြကျောက်စာတွင် ရေးသား ထားသော စာလုံးများကို Oxford University မှ ကျောက်စာပညာရှင် Dr. E.H.Jone Stene က အေဒီ ၁၉၃၅ မှ ၄၂ အထိအတွင်း ဖတ်ခဲ့သည်ကို အခြေခံ၍ ဆရာကြီး ဦးစံသာအောင်က “အနန္ဒ စန္ဒြ၊၈-ရာစု ရခိုင်ဝေသာလီမင်း” စာအုပ်ကို ရေးသားရာတွင် ကျောက်စာပါ စကားလုံး (၁၆)လုံးကို မြန်မာမှုပြုကာ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ “တော်တော၊ ဇဂတ်၊ ဗိရှ်၊ အောက်ဇိတ်၊ ရှောတ်၊ နာမ်၊ ရှာကေ၊ ကာမ်၊ ဖော်ဒ်၊ ပုသ်တ်၊ ပူရ်ဗော၊ ဖုတ်(ဖီတာ)၊ ပါန်စ်၊ ပါန်စာရှ်၊ ပရ်ဇာ၊ ဖိရိတီ၊ ဖြိတီ” ဆိုသည့်စကားလုံးများဖြစ်ရာ ယခု ရခိုင်ပြည်တွင်းနေ မွတ်စလင်များ ပြောဆိုနေ သော စကားလုံး များဖြစ်ကြပါသည်။
(2) THE WORDS CONTAINED IN THE STONE INSCRIPTION OF ANANDA SANDRA
Sayagyi U San Tha Aung had written the book known as “Ananda Sandra,8th Century Rakhine Waithali King “based on stone scholar of Oxford University, Dr. E.H. Jone Stene who had read words written in Anandra Sandra Stone inscription, erected at Shitthaung Pahto Mauk-U town, during AD 1935 to 1942. The sixteen words contained in stone inscription were translated into Myanmar Language and described. Those words were the same words now using by Musilms in Rakhine State.
(က) အေဒီ ၁၇၉၉ ခုနှစ် အင်းဝတွင် ရုံးစိုက်သော ဗြိတိသျှသံအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Francis Buchanin က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘာသာစကားများကို လေ့လာသုတေသနပြုခဲ့ရာ ရခိုင်ပြည် အတွင်း Rosswan နှင့် Rovinga စကားနှစ်မျိုးမှာ လူအများနားလည်သုံးနှုန်းခဲ့ကြသော စကားဖြစ်ကြောင်း Rosswan စကားကို ဟိန္ဒူများကပြောပြီး၊ Rovinga စကားကို မူဆလင်တို့ ပြောဆိုကြောင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
(Asiatic Researches, Calacatta V5(1881) Page -237 ကို ရည်ညွှန်းသည်။ )
(a) Francis Buchanan,amember of British diplomats, based at Ava in AD.
1799 had studied and researched languages in Myanmar. He had written that the two languages known as Rosswan and Rovinga were used by majority of people, Rosswan Language was spoken by Hindu and Rovinga language was spoken by Muslims.
(ခ) ဝေသာလီခေတ်ပျက်သုံးပြီးနောက်ပိုင်း အင်ဒိုအာရီယန်များသည် မွန်ဂိုလွိုက်များနှင့် သွေး နှောပြီး သည့်အခါမှ ယခုခေတ်သုံး ရခိုင်စကားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ တောင်ကြားလမ်းများရှိရာ သံတွဲခရိုင်နှင့် အမ်းမြို့တ၀ိုက်တွင် နေထိုင်သူများပြောသော ရခိုင်စကားသည်
(b) After the fall of Waithali Age, Indo – Aryans mixed blood with Mongoloids and then occurred present used Rakhin language. The Rakhine Language spoken by inhabitants in Thandwe district and surrounds of Am town was almost the same as Bamar Language.
ဗမာစကားနှင့် ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး တူညီကြပြီး၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်နှင့် စစ်တွေခရိုင်တို့မှ ပြောဆိုသော ရခိုင် စကားများမှာလည်း လေယူလေသိမ်း ကွဲလွဲမှုရှိသော်လည်း ဗမာစကားနှင့် အသုံးအနှုံးများ နီးစပ်ယုံသာ ရှိကြသည်။
The Rakhine Languages spoken by Rakhines, residing in Kyaukphyu District and Sittwe District were different in pronounce but only adjacent to Bamar Language.
ဦးစံသာအောင်ရေး အေဒီခြောက်ရာစုနှင့် ယင်းမတိုင်မီ ရခိုင်ပြည်သုံးအက္ခရာစာအုပ်၏ အမှာစာတွင် မြန်မာတို့ပြောသော စကားမှာ တိဗက်မြန်မာစကားအနွယ်အဖြစ် လက် ခံကြပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာစကားနှင့် ရခိုင်စကားမှာ အသံသာကွဲလွဲကြောင်း၊ မည်သည့်အတွက် ဤသို့ကွဲလွဲချက်များရှိ သည်ဆိုသည်မှာ စဉ်းစားဖွယ်ရာကောင်းကြောင်း၊ ရှေးမြန် မာကြီးများ သည် မြန်မာစကားနှင့် စာအရေးအသားကို ရခိုင်သို့ယူလာပြီး၊ ရခိုင်တွင် ချန်ထားခဲ့သော ရိုးမတောင်ကြီးအကာအကွယ်ကြောင့် အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ နဂိုအတိုင်း ကျန်ရှိနေသည် ဟု အဆိုရှိကြောင်း စသည်ဖြင့် ၎င်း၏ အတွေ့အကြုံအရ ထင်မြင်ချက်ကို ရေးသားဖော်ပြပါရှိသည်။
(C) PRESENT RAKHINE LANGUAGE
In preface of the book known as Rakhine City State used words before A.D. 600, U San Tha Aung wrote that Myanmar Language had been accepted as Tibet- Myanmar language; Myanmar language and Rakhine language are different from pronounce what kind of difference might be considered; the ancient Myanmars had brought Myanmar language and literature to Rakhine and then left in Rakhine and those were stable without changes due to Yoma mountains formerly.
(၃) ရိုဟင်ဂျာ၊ အာရကန်နီး(စ်)၊ ရခိုင်နှင့် မောက်
ရိုဟင်ဂျာ၊ အာရကန်နီး(စ်)၊ ရခိုင်နှင့် မောက်စသည့် အမည်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သမိုင်း အထောက်အထားတင်ပြချက်အချို့
(3) ROHINGYA, ARAKANESES, RAKHINE AND MAUK
Submission of some historical documents in respect of Rohingya, Arakanes, Rakhine and Mauk.
ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် ဝေါဟာရအပေါ် ရခိုင်အမျိုးသားအချို့၏အမြင်
(က) ရခိုင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (ရန်ကုန်)က အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စဟီလာရီကလင် တန်သို့ တင်ပြခဲ့သည့် (၂၉-၁၁-၂၀၁၁)ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်တွင်”ရခိုင်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်”ကို ဖွင့်ဆို တင်ပြခဲ့ ရာ၌ –
” ရခိုင်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်” ကို ဖွင့်ဆိုတင်ပြခဲ့ရာ၌-
“စစ်တကောင်းဒေသိယစကား၌ ရခိုင်ပြည်ကို “ရိုဟန်ဂ်သှ်ျ” RAHANG’SH ဟူ၍ ‘ဟ’ အသံအစားထိုး၍ သုံးကြောင်း”
“အရှေ့ဘင်္ဂလားနယ်သားတို့က ရခိုင်ကို Maugh or Magh ဟုခေါ်စေပြီး စစ်တကောင်းနယ်သားတို့က ရခိုင်ကို ရိုဟန် ROHANG ဟု ခေါ်ကြသည် ” ဟု ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
Outlook of some Rakhines upon the expression known as Rohingya.
(a) In the declaration of Rakhine Literature and Culture Association (Yangon), sent to Ms. Hilary Clinton, Secretary of Foreign Affairs on (29-11-2011) defined and explained the expression “Rakhine”, that in regional words of Chittagong, Rakhine City had been substituted with “Ha” sound and used as “RAHANG’SH”.
” East Bangalar regional people called Rakhine as Maug or Magh and Chittagong regional people called Rakhine as ROHANG.”
(ခ) ရခိုင်သဟာယအသင်း (ရန်ကုန်)ကလည်း “ရခိုင်ဆိုသော စကားရပ်၏ ရင်းမြစ်နှင့် ပုံစံအမျိုးမျိုး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မဂ္ဂဇင်းများတွင် ဆောင်းပါးရေးသားဖော်ပြခဲ့ရာ၌-
” အလယ်ခေတ်ဘင်္ဂါလီစာပေများနှင့် Rennell ၏ မြေပုံတွင် သင်္ကတရိုက်မူရင်း RAKSHATUNGA မှ ဆင်းသက်လာသည့် ROHANG ကို သုံးစွဲခဲ့ကြသည်” ဟုဖော်ပြထားပါသည်.။ ရခိုင်သဟာယအသင်း (ရန်ကုန်) ၏ ဆောင်းပါးတွင် “သီရိလင်္ကာ သာသနာဝင် မှတ်တမ်းများတွင် ရခိုင်ပြည်ကို RAKK-HANGA- PURA ဟု ဖော်ပြထားသည်ဟုလည်း ကျမ်းအကိုးအကားများဖြင့် တင်ပြထားသည်။
(b) Rakhine Welfere Association (Yangon) wrote in its article by the title ” The Source and various forms of Rakhine Words” in magazines that ” In middle age Bengali literatures and Rennell’s map, used ROHANG descended from RAKSHATUNGA” In article of Rakhine Welfare Association (Yangon) submitted together with references that in srilinga’s sasana records Rakhine City was described as RAKK-HANGA-PURA.
(ဂ) ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာ အေးမောင်က ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိဟူ၍ အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေရာက ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ “ဘင်္ဂါလီတွေက ရိုဟင်ဂျာလို့ ဘာကြောင့် ခံယူကြသလဲဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘင်္ဂါလီစကားအရ ရခိုင်ကိုခေါ်တာ၊ ဘင်္ဂါလီတွေက ရခိုင်ကို ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်ပြီး “ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ရခိုင်ပြည်က ပြန်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ”ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်တယ်။ အင်္ဂလန်က ပြန်လာတဲ့သူကို အင်္ဂလန်ပြန်လို့ ခေါ်သလိုပေါ့ဟု ပြောဆိုထားသည်။ (၁၄-၆-၂၀၁၂ နေ့ထုတ် Venus မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ -၂ ပါ ပြောကြားချက်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
(c) Dr. Aye Maung. Chairman of the Rakhine Nationalities Development Party, said many times. That there is no Rohingya but he continued that according to Bengali Language they called Rakhine as Rohingya and Rohingya means the Bengali who returned back from Rakhine. As the person who returned back from Rakhine. As the person who returned back from England should be called as England Returned person. (Referred to page2of Venus Journal, Published on 14-6-2012) .
(ဃ) စန္ဒသုဓမ္မရာဇာ၏ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နန်းရင်းဝန် Shar Alaol က ” The Lamentation of Shah Shujah” စာတမ်းကို ရေးသားတင်ပြရာတွင် ရခိုင်ပြည်ကို Rohang ဟု ခေါ်ပြီး၊ ထိုဒေသတွင် နေထိုင်သော လူမျိုးများကို Rohanga ဟုခေါ်ဆိုကြောင်း ရေးသားတင်ပြထားသဖြင့် Rohanga ဆိုသည်မှာ ရခိုင်တွင် နေထိုင်သူများကို ခေါ် ဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါက်တာအေးချမ်း၏ တင်ပြချက်သည် သမိုင်းကြောင်းအရ မှားယွင်းရန် မရှိပါ။ သို့ရာတွင် ထို Rohanga တို့ပြောဆိုသော စကားကို ရခိုင်ဒေသနေ ဘင်္ဂါလီဟု စွပ်စွဲ ခံနေရသူများကသာ ပြောတတ်ပြီး၊ ယနေ့ရခိုင်များ အဘယ့်ကြောင့် မပြောတတ်ဆိုသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်သင့်ပါသည်။
(d) Shan Alol, Islamic secretary of Sandra Dhamma Razar Wrote and submitted “The Lamentation of Shah Shujah” monograph and described Rakhine City as Rohang and the residents within that area were called as rohingya so that Rohingya means the residents in Rakhine. The submissions of Dr. Aye Chan was not wrong under history. But, the language spoken by Rohangs cannot speak by today Rakhines and Bingali only can speak such language, Such fact ought to be studied and yiewed.
(၄)ARAKANESE နှင့် ရခိုင်ဆိုသည့် စကားရပ်အပေါ် ရခိုင်အမျိုးသားအမြင်
4. THE OUTLOOK OF RAKHINE NATIONAL UPON THE WORDS ARAKANESE AND RAKHINE.
(က) ထွန်းရွှေခိုင် (စစ်တွေကောလိပ်) ရေး ရခိုင်ရှေးဟောင်းမြို့တော်များ စာအုပ် စာမျက်နှာ (၁၆)တွင် –
“အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားတို့က ရခိုင်ပြည်ကို အာရကန်ဟု ခေါ်ဆိုကြရာမှ အနောက် နိုင်ငံသားတို့ကလည်း အာရကန်ဟု ခေါ်လာကြခြင်းဖြစ်သည်”ဟု ရေးသားဖော်ပြ သည်။
(a) In page (16) of the book known as the ancient Rakhine Cities written by Tun Shwe Khine (Sittwe College)
” When Indian called Rakhine City as Arakanese, the Westerners also called as Arakanese”
(ခ) အာနန္ဒစန္ဒြကျောက်စာ၏မြောက်ဖက်စာမျက်နှာ-၄၂ကြောင်းမြောက်တွင်AREKADES’a အာရက္ခဒေသျှဟု ရေးသားပါရှိသဖြင့် AD ၁၁ရာစုလယ်ခန့်ကစ၍ AREKAဆိုသည့် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအမည်နာမကို ရရှိခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်ဟု ရခိုင်သဟာယအသင်း (ရန်ကုန်)၏ ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
(b) On 42nd page of Northern side of Arnanda stone inscription contained AREKADES so that with effect from middle of 11 century A.D, had name AREKA City and race. If was shown in article of the Rakhine welfere Association (Yangon).
(ဂ) လမ်းစဉ်ပါတီထုတ် “ရခိုင်” စာအုပ်စာမျက်နှာ-၃၅ တွင် ရခိုင်ပြည်သို့ ရှေးဦးလူတို့ ၀င်ရောက် လာသည့်အခါ ရခိုင်ပြည်၌လူမျိုးတစ်မျိုးရှိသည်။ ထိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် မူလရှိနေသူများကို ရက္ခိုက် ဟုခေါ်သည်။ ထိုမူလရှိနေသူများကို အကြောင်းပြု၍ ရှေးဦးစွာ ၀င်ရောက်လာကြသူတို့သည် ထိုဒေသကို ရက္ခိုက်ပြည်ဟုခေါ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ သမိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်ချိန်ကပင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟု ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
(c) In page 35 of the book “Rakhine” published by Lanzin Party shown that when ancient people entered in Rakhine City there wasarace Rakhine. Those people who were resided in North East part of India originally were called as RAKHAS.Therefore, wrote that it was formed since recording history.
(ဃ) ဆရာကြီး ဦးအောင်သာဦး (ဘီအေ) ရေးသားစီရင်ခဲ့သော “ရခိုင်ရာဇ၀င်” ကျမ်း စာမျက်နှာ (၇)တွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။
“တိုင်းရင်းသားများမှာ သကျသာကီဝင်အမျိုးအနွယ်ဝင်ဖြစ်ကြ၏။ ဤစကားကို ရှင်းပါဦးအံ့။ ဂင်္ဂါမြစ်ဝှမ်း ၊ ဗြဟ္မပုတြမြစ်ဝှမ်းစသော အိန္ဒိယပြည်မြောက်ပိုင်း၌ သကျသာကီဝင်လူမျိုးတို့သည် အနှံ့အပြားနေ လာခဲ့ကြောင်း ရှေးကဆိုခဲ့ပေပြီ။ ဣန္ဒမာယုသည်လည်း သာကီဝင်အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်း သိကြရလေပြီ။ အဇ္ဖုနရသေ့သည် ဣန္ဒမာယနှင့် ပေါင်းဖက်မိပြီးနောက် မိမိတို့နှင့် အမျိုးတူဖြစ်သော သကျ သာကီဝင် ခြွေရံသင်းပင်းများနှင့် ကစ္ဆပနဒီမြစ်ကို အနည်းငယ်စုံဆင်းပြီးလျှင် ဓည၀တီမြို့ကို တည်ထောင်ခဲ့ကြလေသည်။ အဇ္ဖုန၏ သားတော် သကျ သာကီဝင်ဖြစ်သော မရယုသည် အမျိုးအမည် မသိရသော တိုင်းရင်းသားများအပေါ်၌ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခြင်း မဟုတ်ပေ။
သို့သော် မာရယုမင်းမှာ ” ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်း အလွန်နိမ့်ကျသော ကျောက်ဂူ ကျောက်ခေါင်း များတွင် နေ၍ သားစိမ်းငါးစိမ်းနှင့် အသက်မွေးသော (ကျောက်ခေတ်) လူရိုင်းများ” ကို (တနည်းအားဖြင့် ဘီလူးများကို)နှိမ်နင်း၍ ယဉ်ကျေးအောင် ပြုပြင်ယူရပေသေးသည်။ ထိုလူရိုင်းများ၏ အရေအတွက်မှာ အလွန်နည်းပါး၍ တစတစ ပျောက်ကွယ်သွားလေတော့၏” ဟု ဆက်လက် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
(d) In page7of ” the Rakhine history” written by Saya Gyi U Aung Tha Oo (B.A), the Rakhine natives had been explained as follows.
” The Natives were generations of thakyathakeewun race. This words should be explained clearly that the thakyathakeewun race from Northern parts such as ginger valley and Byanmapotetara valley were residing spreadly; I had explained above; Eain Nanda Marayu was alsoadescendant of thakyathakeewun; after Azuna hermit had married to Eainma Marayu they founded Danyawaddi town, Marayu, son of them wasadescendant of thakyathakeewun did not rule upon unnamed natives.
But, Marayu King had uprooted all rude tribes and uplifted culture. Such rude tribes were very small and then disappeared.
(င) ရမ်းဗြဲတောင်ကျောင်းဆရာတော်၏ ရခိုင်ရာဇ၀င်သစ်ကျမ်းတွင် “မူလရှိနေသူ ရက္ခိုက် များကို ရှေးဦးဝင်ရောက်လာသူများက အောင်မြင်စွာ နှိမ်နင်းနိုင်ကြသည်။ ယင်းရက္ခိုက်များနေထိုင်ခဲ့သောနေရာဖြစ်၍ ရခိုင်ပြည်ဟုခေါ်တွင်ကြောင်း ဖွင့်ဆိုရေးသားဖော်ပြထားသည်။
(e) In new Rakhine history thesis, written by Yanbye South Monastery Sayadaw described that the initial entering people had fought Rakshas natives successfully. That region was called as Rakhine City.
(စ) ဆရာကြီး ဦးအောင်သာဦးက ၎င်း၏ ရခိုင်ရာဇ၀င်ကျမ်း စာမျက်နှာ (၈)တွင် ရခိုင်အစ မာရယုကဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး၊ မာရယုသည် သကျသာကီဝင်မျိုးဖြစ်၍ အမျိုးကို အလွန်စောင့်ကြောင်း၊ ကပိလ၀တ်၊ ဒေ၀ဒဟပြည်၊ ကောလိယပြည်ကို တည်ထောင်ကြသောအခါ အမျိုးပျက်အံ့မည်ကို စိုးရိမ်၍ “နှမနှင့် မောင် ပြည်တည်ထောင်ခဲ့ကြပေသည်” မျိုးစောင့်တရားရှိ၍ ဇာတိသွေး ဇာတိမာန်ကြီးသူများဖြစ်ကြ၏။ အမျိုးကို စောင့်စည်းတတ်သော သဘောတရားရှိခြင်းကြောင့်ပင်လည်း (ရက္ခိုက်စောင့်ရှောက်၏) ဟူသော စကားမှ ရက္ခိုင်၊ ရခိုင်ဟု ပြောင်းလာပြီး တိုင်းပြည်ကိုလည်း ရက္ခပူရ (ရခိုင်ပြည်)ဟု ခေါ်တွင်သည်ဟု ရေးသားဖော်ပြ ထားသည်။
(f) In page 8 of the Rakhine history thesis written by Saya Gyi U Aung Tha Oo explained that the commencement of Rakhine was Marayu. He wasathakyathakeewun and took care of race extremely.
When founded cities of Kapilawut, Dewadha and Kawliya, they were anxious to disappear generations and then had used to marry to simblings. The word Rakhas became to change as Rakhine.
(ဆ) ရမ်းဗြဲတောင်ကျောင်းဆရာတော်ရေးသားသည့် ရခိုင်ရာဇ၀င်သစ်တွင် ၀ံသာနုရက္ခိတများ လက်ကိုင်ထားကြသော မင်းဆက်ပေါင်းမြောက်များစွာတို့သည် မောင်နှမ အရင်းအိမ်ထောင်ပြု ခဲ့ကြကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
(g) In new Rakhine history written by Yanbye South Monastery, described that many dynasties had paid attention to generations and married to simblings.
(၅) မာဂဓပြည်မှ ၀င်ရောက်လာသော မောက်လူမျိုး၊ ရခိုင်လူမျိုးများမှာ မာဂဓပြည်မှ ၀င်ရောက်လာ သူများဖြစ်၍ “မောက်” လူမျိုးဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ဖူးကြောင်း တင်ပြချက်။
5. The Mauk race, Rakhine races who were entering from Margada City, were called “Mauk” race.
(က) ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့မှ “အသိအမြင်ရှိ နယ်စပ်ဒေသမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ”အမည်ခံ ဦးမြစိန်ထွန်းပါ (၅)ဦးတို့က (၁၀-၁-၁၉၉၇) ရက်စွဲဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရခိုင်သဟာယအသင်း ဥက္ကဋ္ဌထံသို့ စာတမ်းတစ်စောင်ပြုစု တင်ပြခဲ့ဖူးသည်။
ထိုစာတမ်းတွင် ဘင်္ဂလားဒေသတွင် ရခိုင်စစ်စစ်နှင့် ရခိုင်မျိုးနွယ်များဖြစ်ကြသော မြို၊ မရမာကြီး၊ သက်၊ ဒိုင်းနက်စသူ သန်းနှင့်ချီ၍ရှိသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ ခရိုင်(၃)ခရိုင်၊ ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် (၅၅၀၀)ခန့်တွင် နေထိုင်ခဲ့လျက်ရှိကြောင်း (ဘင်္ဂလားနိုင်ငံ၏ ဧရိယာ ၁၀% ခန့်မျှသော နယ်မြေဖြစ်ကြောင်း) ဖော်ပြထားသည်။
(a) U Mya Sein Tun and (4) Persons who were called themselves as Rakhine, residents of Buthitaung and Maungtaw had writtenamonograph to the Rakhine Welfere Association (Yangon) on (10-1-1997)
In that monograph described that the pure Rakhine and its ethnic groups such as Myo, Maramagyi, Thet, Dinet are residing at Bangladesh in million within (3) districts of are (5500) Square miles. That was the land area about 10% of Bangladesh.
(ခ) ထိုဘင်္ဂလားဒေသရှိ ရခိုင်များကို Magh မောက်လူမျိုးဟုခေါ်ပြီး တိုင်းရင်းသားအဆင့်အတန်း ပေး ထားရာ ရခိုင်အမျိုးသမီးဝန်ကြီးတစ်ဦး အပါအ၀င် လူနည်းစု ရခိုင်လူမျိုး ၀န်ကြီး (၃) ပါးပင်ရှိသည်။
(b) The Rakhines residing at Bangladesh are called as Magh and have been given national level. There are (3) ministers of Rakhine ethnic groups including on female Rakhine minister.
(ဂ) ဦးအောင်သာဦးရေး ရခိုင်ရှေးဟောင်းလူများ စာအုပ်ကို ရည်ညွှန်းပြီး ထွန်းရွှေခိုင် (စစ်တွေကောလိပ်) က ၎င်း၏ ရခိုင်ရှေးဟောင်းမြို့တော်များ စာအုပ် စာမျက်နှာ (၁၆)တွင် ဘင်္ဂါလီများကမူ ရခိုင်လူမျိုးကို Magh မောက်ဟု ခေါ်ကြသည်။ ရှေးဦးရခိုင်လူမျိုးတို့သည် မဂဓတိုင်းပြည်မှ ရောက်လာကြသူများဖြစ် ၍ “မာဂေးမောဂ်”ဟူ၍ ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဖော်ပြထားသည်။
(c) Tun Shwe Khine (Sittwe College) wrote the book known as the Rakhine ancient Cities referred to the book “Rakhine ancient people ” which was written by U Aung Tha Oo. In Tun Shwe Khine’s book, page 16 described that the Bingalies called Rakhine as Magh. Ancient Rakhine race were coming from Magada City and called then as ” Margale Magh.”
(ဃ) ဦးအောင်သာဦးက Arakanese Scripts its Origin and evolution စာအုပ်တွင် ” The ancient Arakanese were decendents of The Indo Aryans” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
(d) In the book ” Arakanese Script its origin and evolution” written by U Aung Tha Oo, described as ” The ancient Arakanes were descendants of the Indo Aryans.”
(င) E.B.Havelll ၏ “The History of Aryan Rule in India” စာအုပ် စာမျက်နှာ (၃၄)တွင် အာရိယာန်များသည် ယခုခေတ်အဂရာနှင့် အုဒ်တွင်ရှိသော မဇ္စိျိမဒေသမာဂဓတိုင်းမှ ၀င်ရောက်လာခဲ့ကြသည်” ဟုဖော်ပြထားသည်။ (မာဂဓတိုင်းမှာယခုအိန္ဒိယနိုင်ငံဘီဟာနယ်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ) မာဂဓတိုင်းမှ ၀င်ရောက်လာသူများဖြစ်၍ ရခိုင်လူမျိုးများကို “မောက်လူမျိုး”ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
(e) In page 34 of the book ” The History of Aryan Rule in India” written by E.B. Havell, described that the Aryans not only were residing at Majima regions that are now Aggara and Oad spreadly also moving forward to ginger valley and Bingalar region step by step.
(စ) ၁၈၂၄-၂၆ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲကာလအပြီး ရခိုင်အမျိုး သားများက ၎င်းတို့အား Maughဟုခေါ်ဝေါ်သည့်အစား ရခိုင်ဟုခေါ်ရန်နှင့် အာရကန်ကို ရခိုင်ပြည်ဟု ခေါ်ရန် အင်္ဂလိပ် အစိုးရထံ တင်ပြခဲ့ကြောင်း ဦး Virus (ရွက်ဟောင်း) ဆိုသူက (၇-၇-၀၉)ရက်စွဲဖြင့် Internet စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေးသားတင်ပြထားသည်ကို ဖတ်ရှုရပါသည်။
(f) After the Englo-Burmese first war in 1824-26, the Rakhine natives submitted to British Government in order to call them as Rakhine in stead of Maugh and to call as Rakhine State in Stead of Arakan. The person named as U Virus (Ywet Houng) wrote on internet on (7-07-09).
(ဆ) လမ်းစဉ်ပါတီထုတ် တိုင်းရင်းသားဓလေ့ထုံးတမ်းများ (ရခိုင်)စာအုပ် စာမျက်နှာ(၃၄)တွင် ” ရခိုင်တို့ သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဇ္ဈိမဒေသ မာဂဓတိုင်းမှ ၀င်ရောက်ခဲ့ကြသည်”ဟု ဖော်ပြထား သည်။ (မာဂဓတိုင်းမှာ ယခု အိန္ဒိယနိုင်ငံဘီဟာနယ်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။) မာဂဓတိုင်းမှ ၀င်ရောက်လာ သူများဖြစ်၍ ရခိုင်လူမျိုးများကို “မောက်လူမျိုး”ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
(g) In page 34 of th book called as the customs of natives (Rakhine), published by Lanzin Party described that the Rakhines were coming from India, Mazima region, Magada region so that such Rakhine had been called as ” Maugh.”
(ဇ) Footnotes in the article ‘ King Bering’ JBRS; Vth Anniversary Publication Vol.2, Page-489 တွင် Mog, Magh, Maghi, Magiကို ၁၅ရာစု၊ ၁၆ရာစုအတွင်း ရခိုင်ရှိ လူမျိုးဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။
(h) In page 489, 5th Anniversary publication Vol.2, “King Bering” JBRS, Footnotes in article defined Mog, Magh, Maghi, Magi as Rakhines during 15th century and 16th century.
(က) ဆရာကြီး ဦးစံသာအောင်ရေး အေဒီ(၆)ရာစုနှင့် ယင်းမတိုင်မီ ရခိုင်ပြည်သုံး အက္ခရာ ဟူသော စာအုပ်စာမျက်နှာ (၁၈) တွင် –
“အာရိယာန်လူမျိုးများသည် ယင်းတို့၏ မူလနေထိုင်ရာဖြစ်သော ရုရှားတောင်ပိုင်းဒေသ မှ အိန္ဒိယတိုက်သို့ ဘီစီ ၁၅၀၀ လောက်က ၀င်ရောက်လာကြသည်။ ယင်းတို့သည် ပန်ဂျပ်ကို ဦးစွာသိမ်းပိုက်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ဂင်္ဂါမြစ်ဝှမ်းသို့ ပျံ့နှံ့သွားကြသည်။ သူတို့သည် တိုင်းရင်းသား အိန္ဒိယလူမျိုးများနှင့် အိန္ဒိယ မြောက်ပိုင်းတွင် ရောနှောသွားကြသည်။ ယင်း ကာလမှစ၍ အိန္ဒိယတိုက်သားများကို အင်ဒို အာရီယာန် လူမျိုးဟုခေါ်တွင်လေသည်” ဟု ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။
6. INDO- ARYAN
THE INDO – ARYAN RACE
(a) The Alphabets of Rakhine before6A.D., written by Saya Gyi U San Tha Aung, in page 18 described that the Aryans had entered in India from their former Southern part of Russia in 1500 B.C. s They had occupied Punjab firstly and then spread to Ginga valley gradually. They had mixed with Indian natives in Northern part of India. With effect from that time Indian continent people were called as Indo-aryans.
(ခ) မော်ရစ်ကောလစ်ရေးပြီး ဦးလှဒင် မြန်မာပြန်ဆိုသည့် ရတနာရွှေမြစာအုပ် စာမျက်နှာ ၂၅၀ တွင် ရှေးဟောင်းသုတေသန ကျောက်စာဖက်လိုက်စား သူတို့က သီရိဂုတ္တတောင်ကုန်းသည် တစ်ခါက တည်ရှိခဲ့ဖူး သော ဓည၀တီမြို့ဟောင်း၏ အရှေ့မြောက်ဖက်၌ တည်ရှိကြောင်း၊ ထိုမြို့တော်၏ မြို့ရိုးဟောင်းများကို ယခုတိုင် တွေ့မြင်နေရသဖြင့် ထိုမြို့ရိုးကို အေဒီတစ်ရာစုထက်စော ၍ တည်ထောင်ခဲ့သော “အိန္ဒိယကုလားမြို့တော်” တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း စသည်တို့ကို ကျောက်စာအထောက်အထားများ၊ အကိုးအကားများစွာဖြင့် ပြကြသည်”ဟူ၍ ဖော်ပြထားပါသည်။
မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး ပုရ၀ုဏ်တံတိုင်းအတွင်းရှိ ရေကန်နှင့် ဟိန္ဒူနတ်ရုပ်များကို လေ့လာသည်ရှိ သော် အေဒီ ငါးရာစုအတွင်းက လက်ရာများဖြစ်ကြောင်း သပ္ပဒါန ပကာရန ရာဇ၀င်ကျမ်းသည် မဟာမြတ်မုနိ ရုပ်ပွားတော်ကို သွန်းလုပ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော သမိုင်းဖြစ် ကြောင်း ထိုကျမ်းသည် အိန္ဒိယပြည်၏ အရှေ့ပိုင်း ဒေသများ၌ နှစ်ပေါင်းရာစု များစွာကပင် နေရာအနှံ့ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ဤနိုင်ငံ၌မူ သိသူအလွန်နည်း လှသေးကြောင်း” စာ-၂၅၁ တွင် ထိုစာအုပ်တွင် ဆက်လက် ဖော်ပြထားသည်။
(b) In pages 50 of ” Golden Land” written byMaurice Collis and translated by U Hla Din, described the location of ancient Danyawaddy Town with stone inscription evidence.
If study lake and Hindu Nat Stute in Mahar Myat Muni Pagoda Campus were handicraft of 5AD. Thapadana Pakara history thesis as written about moulding of Mahar Myatmuni Buddha image. Such thesis was spread in eastern parts of India since many ancient years but in Myanmarasmall amount have known it.
(ဂ) ဦးအောင်သာဦးက ၎င်း၏ Arkakanese Scripts its origin and Evolution စာအုပ်တွင် ” The Brahmi Scripts Used During The Danyawaddy Age is Exactly Similar of the Original Brahmi Script of northern india” ဟု ရေးသားတင်ပြထားသည်။
(c) U Aung Tha Oo had written in his book ” Arakanese Scripts its origin and Evolution” that ” The Brahmi Scripts used During The Danyawaddy Age is Exactly Similar of the Original Brahmi Scripts of northern India.”
(ဃ) ရခိုင်ရှေးဦလူတို့သည် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်မှ ၀င်ရောက်လာခဲ့ကြသော အင်ဒိုအာရီယာန် များဖြစ် ကြပြီး၊ ဟိန္ဒိူယဉ်ကျေးမှုကို အခြေပြုခဲ့ကြောင်း သက္ကတကျောက်စာများအရလည်း အငြင်းပွားရန် အကြောင်းမရှိပါ။
(d) The ancient Rakhines were Indo- Aryans who were entering from small India Continent and based on Hindu Culture. There was no dispute under stone- inscription.
(င) သုတေသီ ဦးချန်ထွန်းက “အိန္ဒိယမှ ကုသမင်း ၂၆-ဆက်မြောက် မင်းဖြစ်သော ဗြဟ္မမသိန္ဒိမင်း ကွယ်လွန် သော နှစ်တွင်ပင်လျှင် မာရယုမင်းသားသည် ခြွေရံသင်းပင်းနှင့် တကွ မြောက်ပိုင်း ကုန်းမြင့် ဒေသမှ ထွက်ခွာလာပြီး ဝေသာလီ၌ မင်းအဖြစ်ကို ခံယူသည်” ဟု ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
(e) The researcher, U Chan Tun mentioned that in the year when 26th dynasty of Kutha King of India, Bramana Theikdi King, Maru Prince departed from northern range of mountains together with his staffs and servants to Waithali and then took throne as king.
(စ) ကျောက်စာတွင် ဦးစံရွှေဘုက ၄င်း၏ Legand of The Family Aryans Settlement of ArakanJBRS (1921) Vol.11, Page (2)စာအုပ်တွင် ” ၀ါလုဒေ၀၊ဗလုဒေ၀စသော ညီနောင်တစ်ကျိပ်နှင့်ခြွေရံသင်းပင်းတို့သည်အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှထွက်ခွါလာကြပြီး၊ရခိုင်တောင်ကုန်းဒေသမှတောင်ဘက်သို့ဆင်းလာကြပြီး၊ဒွါရ၀တီမည်သောသံတွဲတစ်ဝိုက်၌နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဟုလည်းကောင်း၊နှမတော်အဉ္စနဒေ၀ီနှင့်ပုရောဟိတ်ဗြဟ္မဏားတို့သည်မြောက်ဖက်သို့ထွက်ခွာလာခဲ့၍ဝေသာလီနှင့်ယင်းတ၀ိုက်ကိုအုပ်စိုးကြသည်ဟုလည်းကောင်းရေးသားတင်ပြထားသည်။
(f) In page2the book ”Legend of The Family Aryans Settlement of Arekan JBRS (1921) Vol II” written by U San Shwe Bu, described that according to stone inscription, Walu Dewan and Valu Dewa etc., (10) brothers departed from north-eastern part of India and arrived at Rakhine mountains and then resided at Dwarawaddy known as Thandwe surrounding. Their younger sister, princess Einsana Dewi and prophet Bhrama departed north part and ruled Wathali and its surroundings.
(ဆ) သို့ဖြစ်ပါ၍ ရခိုင်ရှေးဦးလူ မာဂဓလူမျိုးတို့သည် ရခိုင်ပြည်ရှိ မူလနေထိုင်သူ လူရိုင်း၊ ဘီးလူး၊ ရက္ခိုက် များကို အောင်နိုင်ပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်အတွင်း နေထိုင်ခဲ့ကြသဖြင့် ရှေးဦးရခိုင်များမှာ အင်ဒိုအာရီယာန် များ သာဖြစ်သည်။
(g) Therefore, ancient Rakhines were Margada race and after conquer upon natives they resided in Rakhine City so that ancient Rakhines were Indo-Aryans only.
(၇) မွန်ဂိုလွိုက်သွေးနှောပါဝင်လာသော မျိုးဆက်သစ်
မွန်ဂိုလွိုက်များ သွေးနှောပါဝင်လာသော ရခိုင်လူမျိုးဆက်သစ်
(က) ရခိုင်ပြည်ကို အေဒီ ၉၃၁-၆၄ တွင် ပျူဘုရင် ညောင်ဦး စောရဟန်းမင်းဝင် ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်ကို မြိုလူမျိုး အမြတူ နှင့် ရဲဖြူ (ပဲဖြူ) တို့ အုပ်စိုး စဉ်က ရှမ်းဘုရင်က အေဒီ ၉၇၆-၉၉၄အတွင်း တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး (၁၈) နှစ်ခန့် အုပ်ဆိုးခဲ့ကြောင်းG.E Harvey ၏ History of Burma P-10, P-137တို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။
7. NEW GENERATION OF MONGOLOYD NEW GENERATION OF MONGOLOYD RAKHINES
(a) Pyu king, Nyaung-U Saw Rahan had fought Rakhine City in 193-64 A.D. The Shan King fought and occupied while Myo race ”Amya Tu and Ye Phyu (Pe Phyu) were ruling Rakhine and ruled about (10) years. It was described in G.E. Harvey’s History of Burma P. 10 and P 137.
(ခ) ဝေသာလီပြည်မှာလည်း မွန်ဂိုအနွယ်ဝင်များ၏ တိုက်ခိုင်မှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည့် အပြင် အင်ဒို အာရီယာန်နှင့် မွန်ဂိုများနေရာအနှံ့ သွေးနှောခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် တောင်ကြား လမ်းများရှိရာ တောင်ကုတ်တောင်ကြားလမ်း၊ အမ်းတောင်ကြားလမ်းများ နေရာများတွင် သွေးနှောမှုပိုမိုများပြားခဲ့သည်။ ယနေ့ ဘူသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်မြေများမှာမူ မွန်ဂိုလွိုက်များနှင့် သွေးနှောမှုမရှိဘဲ မူလအင်ဒို အာရီယာန် အဖြစ် ရှိနေခဲ့ကြသည်။
(b) Waithali City was fought and destroyed by Mongos and Indo-Aryans and Mongos were mixed with blood. Especially there were more mixed blood people along taungkoke mountain roads and Am mountain roads. Today Buthitaung and Maungtaw regions are left behind as Indo-Aryans without mixing blood.
(ဂ) တပင်ရွှေထီးနှင့် ဘုရင့်နောင်တို့ မြောက်ဦးမြို့ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ၀ိုင်းရံပိတ်ဆို့ခဲ့စဉ်ကလည်းကောင်း၊ မင်းရဲကျော်စွာ၏ တပ်မတော်က ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်စဉ်က လည်းကောင်း၊ မွန်ဂိုလူမျိုးများနှင့် ဒေသခံ ရခိုင်များ ထပ်မံသွေး ရောနှောခဲ့ကြရာမှ ယနေ့ ရခိုင်လူမျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသခံများနှင့် စစ်တကောင်းရှိ မောက်လူမျိုးများမှာ အင်ဒိုအာရီယာန် အဖြစ် ကွဲပြားလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
(c) While Tapinshwentee and Bayintnaung had fought Maruk-U for many years and Min Ye Kyaw Swar had fought again, Mongos and Rakhine natives mixed blood again so that taday Rakhine have been accurred. But natives of Buthitaung and Maungtaw and Maugh in Sittgone were separated as Indo-Aryans.
(ဃ) ရခိုင်ပြည်တွင်းနေ မူလအင်ဒိုအာရီယာန်များမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအဖြစ် ကျန်ရှိနေပြီး၊ အင်ဒို အာရီယာန်နှင့် မွန်ဂိုလွိုက်သွေးနှောသူများမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်လာကြသည်။
(d) Former Indo-Aryans in Rakhine City had been left as lslam and Indo-Aryans and Mongoloyd mixed blood were become as Buddhists.
(၈) ရခိုင်ပြည်နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသနာ
(က) Studies in Dutch relations with Arakan, in JBRS Vol. II Page-86တွင် ရခိုင်ဘုရင်များသည် မွတ်ဆလင်ဘွဲ့ကို ခံယူကြသည့်အပြင်Dutchလူမျိုးကုန်သည်များနှင့် ရခိုင်မိခင်တို့မှ မွေးဖွားသည့် ကလေးများ ကိုDutchက ဖခင်မရှိသည့်အခါ ၄င်းတို့ကိုDutchဆွေမျိုးတို့က ပြန်လည်ခေါ်ယူကြရာတွင် ကလေးများကို မွတ်ဆလင်အဖြစ်သာ မှတ်ပုံတင် စာရင်းရေး သွင်းစေပြီး ခေါ်ဆောင်သွားစေကြောင်းDutch Dagh register in Bataviaမှတ်တမ်းများအရ တွေ့ရှိရသည်ဟု ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ ရခိုင်ဘုရင် သီရီသုဓမ္မရာဇာ ကိုယ်တိုင်ပင် ၄င်း၏မွတ်ဆလင်အမည်ကိုDutch Bataviaတွင် မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းIbid Page-75တွင် ဖော်ပြထားသည်။
8. RAKHINE CITY AND ISLAM RELIGION
(a) In page 86 of ”Studies in Dutch relations with Arakan, in JBRS Vol. II, ”described that the Rakhines Kings had taken title of Muslim and the children born of Dutch marchants and Rakhine mother, when Dutch father passed away, their Dutch relatives had brought them as registered Muslims only. It was found out in Dutch Dagh register in Batavia record. The Rakhine King, Thiri Thudhamma yaza himself took Muslim name. It was found out in P 75 of Dutch Batavia.
(ခ) မြောက်ဦးမြို့မှ ရှာဖွေတွေ့ရရှိသည့် အေဒီ ၁၅၅ ခုနှစ်ထုတ် ရခိုင်ဘုရင် သဇတ (ခ) အလီရှား လက်ထက် ထုတ်ဝေခဲ့သော ဒင်္ဂါးပြားတွင် အာရဗီဘာသာစာ ဖြင့် ရေးထိုးပြီး ရှေ့မျက်နှာစာတွင် ဖော်ပြထားသောစာ၏ အဓိပါယ်မှာ ” အလ္လာအရှင် မြတ်မှအပ မည်သည့်ဖန်ဆင်းခံမျှ ခ၀ပ်ကိုးကွယ်ခြင်း ခံယူထိုက်သော အရည်အချင်း မရှိကြောင်းနှင့် ဖန်ဆင်းရှင် အလ္လာအရှင်မြတ်သာလျှင် အမှန်တကယ်ခ၀ပ် ကိုးကွယ်ခြင်းခံယူထိုက်သော အရှင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်တော်မျိုး ယုံကြည်ပါ၏။ တမန်တော် မူဟမ္မဒ်သည် ဖန်ဆင်းရှင် အလ္လာအရှင်မြတ်ဖက်သို့ ဖိတ်ခေါ်ရန် နိူးဆော်သူအဖြစ် စေလွှတ်ခြင်းခံရသော နောက်ဆုံး ရစူလ် တမန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်မျိုးယုံကြည်ပါ၏။ ကျွန်တော်မျိုး၏ နိုင်ငံကို အလ္လာအရှင်မြတ် စောင့်ရှောက်တော်မူပါစေဟု အဓိပါယ်ရရှိပြီး ဒင်္ဂါး၏ ကျောဖက်ပါစာ၏ အဓိပါယ်မှာ –
သနားကြင်နာခြင်းတို့၏ ဖခင်အယ်လ်မူဇာဖားဆူလ်တန်အာလီရှားဟု ဘုရင်၏ အစ္စလာမ်အမည်ကို အပြည့် အစုံရေးထိုး ထားပြီး ကျွန်တော်မျိုးနိုင်ငံကို အလ္လာအရှင်မြတ်စောင့်ရှောက်တော် မူပါစေဟု ထပ်မံဖော်ပြထား သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
(b) In dinga coin, issued under rakhine King Thazarta (a) Alisha, in 1525 A.D, founded in Mauk-U, the frontage was written by Arabic Words. The meaning of it was Muhamed was the last prophet and Allah must take care of my country. The meaning of the word in back surface was Allah shall take care of my country and described full name of such
King. In page 49-50 of the coin and Bank note and Burma by M. Rabinson and L.A. shar described the form of such dinga coin and
(The Coin and Bank note and Burma by M.Rabinson and L.A sharစာမျက်နှာ ၄၉-၅၀ တွင် ထိုဒင်္ဂါးပုံနှင့် အာရဗီဘာသာကို အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် ဘာသာပြန် ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
Arabic language. Tose were translated into English language.
It isarare event all over the world in respect of non-Islamic person’s acts upon Allah.
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဟုတ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် အလ္လာအရှင်မြတ်မှတပါး ခ၀ပ်ကိုး ကွယ်ခြင်းခံထိုက် သူမရှိ ကြောင်း ယုံကြည်ပါ၏။ အလ္လာအရှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုး၏ နိုင်ငံအား စောင့်ရှောက်တော် မူပါဟူ၍ အထင်အရှား သိမြင်စေနိုင်သော ဖော်ပြချက် မျိုးတစ်ရပ်အဖြစ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တွေ့မြင်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းပါသည်။
(ဂ) ဗိုလ်မှူးဘရှင် (မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင်ဥက္ကဌ) ရေးသားတင်ပြခဲ့သော”The Coming of Islam to Burma to 1700 AD”ဆောင်းပါး၌ ရခိုင်ပြည်သို့ ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိခဲ့ဖူး သူ ပေါ်တူဂီဘုန်းတော်ကြီးFray Sabastien Manrique၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းကို ရည်ညွန်းပြီး အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားတင်ပြထားသည်။” We know that The preceptor of king Thirithudama wasamuslim, who had been on hajj/pilgrimage twice, He was very influentiat at the court and the Arakanese regarded him asasaint”
(c) In article ” the coming of lslam to Burma to 1700. A.D” written by Col. Ba Shin (Chairman of Myanmar History Commission), described thataprotugues Reve. Fray Sabastin Manrique who had arrived at Rakhine had written diary col Ba Shin referred to such diary and wrote as follows. ” We know that the preceptor of King Thirithudama wasaMuslim, who had been on hajj/pilgrimage twice. He was very influential at the court and the Arakanese regarded him asasaint”
(ဃ) မြောက်ဦးမြို့မှ သမိုင်းပညာရှင် ဦးသာထွန်းအောင် ရေးသားပြုစုသည့် ၁၉၂၇ ခုနှစ်ထုတ် ” ရခိုင်မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး ” တွင် မြောက်ဦးခေတ်၌ အစ္စလာမ်ဘာ သာပြန့်ပွားလာခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အထူးဖော်ပြချက်အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
” သက္ကရာဇ် (၈၈၇) ခုနှစ်၊ ကိုးဆက်မြောက် ဇလတ္တာမင်း စောမွန်လက်ထက်တော်၌ ရုပ်ပါသျှာမင်း၏ သံအမတ်ကြီး ကာဒီ။ မူသျှာ၊ ဟောနုများတို့သည် နိုင်ငံတော်၌ မဟာမတ်ဒန်သာသနာစည်ပင်ကျယ်ပြန့် စေခြင်းငှာ ဗလီကျောင်းတို့သည် မြို့တော်၌ အပြန်အနန့်တည်ထောင်ဆောက်လုပ်ကြရန် မြို့တော်တွင် လူအပေါင်းတို့အား ဟောပြောပြ သလျက် နေ့စဉ်မပြတ် ပြုလုပ်တော်မူလေသည်။ ထိုအခါ အချို့သော ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတို့သည် ယုံကြည်လျက် ၄င်းဘာသာ၌ ၀င်၍ ၄င်းတရားကို ဆောက်တည်လျက်ရှိကြ လေသည်။ သို့နှင့် မဟာမတ်ဒါန်လူမျိုးတို့သည် နိုင်ငံတော်၌ ဖုံးလွှမ်းစိုးမိုးလျက် ပြန့်နှံ့စွာရှိလေသည်။ ဘုရင် မင်းမြတ် ကိုလည်း လက်ဆောင်ပဏ္ဍာပို့ဆက်လျက် ဘုရင်မင်းအား ၄င်းသံ အမတ်ကြီးတို့ကို များသောအားဖြင့် မေတ္တာသက်ဝင်လျက်ရှိလေသည်။
(d) In ” Rakhine Grand History ” written by historian U Tha Tun Aung of Mrauk-U and published in 1972, described in respect of propagation of Islam in Mrauk-U Age especially as follows.
”At the time of Saw Mon King who was 9th dynasty of Zalatta in 887 A.D. The Ambassadors of Ruth Passia King Kardi, Musha, Haw Mu Myar, Sopke every day throughout City in order to propagate Mahar Maddan Sasana. At that time some Buddhists confided in it and took such religion. Thus, Mahar maddan race overwhelmed the city. Sent presents to the king so that the king believed in such ambassadors.
(င) နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ဦးလှထွန်းဖြူရေးသားသော ” အောင်းပန်းကြီး ငွေ စကားရည်လုပွဲ ရခိုင်ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ ” စာအုပ်စာမျက်နှာ-၄၇-၄၈ နှင့် ကျောက်တော်မှ ဆရာတော် ဦးဥာဏရေး ” ဓည၀တီတဇ၀င်သစ်ကျမ်း ” ဒုတိယတွဲ၊ စာမျက်နှာ-၁၆၁၊ ၁၆၂၊ ၁၆၃ တို့တွင်လည်း အစ္စလာမ် တရားဟောဆရာများ၏ ဟောပြောချက်အရ မြောက်ဦးမြို့တွင် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များ အစ္စလာမ်ဘာ သာကို ကူးပြောင်းကိုယ်းကွယ်လာမှု ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာကာ ဗုဒ္ဒသာသနာ တိမ်ကော မည့်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း ရှင်ငယ် ဦးမြ၀ါက ” ရွှေမျဉ်း ဓမ္မသတ် ” ကို ပြုစုပြီး ထားမြစ်စေခဲ့ရကြောင်း ရေးသားတင်ပြကြသည်။
(e) In page 47-48 of the book ” Aungpan Gyi Ngwe Debate of Rakhine nationalities, ” written by the State Council Member U Hla Tun Phyun and in page 161,162,163 of ”New history of Danyawaddy” 2nd edition, witten by Sayadaw U Nyana of Kyauktaw described that according to speakers of Islam religion the Buddhists became as Islam in Mrauk-U widely and Buddhism might be weaken condition and Shin Nge U Mya War had written ” Shwemyin Dhamathut” and prohibited it.
(စ) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သမိုင်းဌာန ပါမောက္ခ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဆရာကြီးG.H.Luceက ရခိုင်ပြည် မြောက်ပိုင်းနေ မြို့နှင့် ခမွီးအကြောင်း ရေးသားရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
” နတ်မြတ်အရှေ့ မယူမြစ်ဒေသ၌ အများစုနေထိုင်ကြသူများမှာ ရိုဟင်ဂျာဟု ယနေ့ သိနေကြသော မူဆလင်များဖြစ်ကြသည်။ ၄င်းတို့က ဤဒေသတွင် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကပင် နေထိုင် ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဤသို့ ဆိုခြင်းသည် ချဲ့ကားခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် မူဆလင်တို့သည် ဘင်္ဂလားကို အေဒီ ၁၂၀၂ ခုကပင် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ သိကြသည်။ ထို့နောက် ရှေးပုဂံမင်းများနှင့် ဆက်စပ်လူသိများခဲ့သော နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ၊ ပဋိက္ကရား (ကိုမိလာ) ကို ဖြိုဖျက်၍ ရခိုင်နယ်စပ် သို့ မကြာမီ ရောက်လာခဲ့သည်။ အချို့ မူဆလင်ခေါင်းဆောင် များ သို့မဟုတ် မူဆလင် ဘာသာပြောင်းလဲခဲ့သူ ဒေသခံအကြီးအကဲများသည် မြန်မာနိုင်ငံဖက်တွင် အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြဟန်တူသည်”(Phases of Pre Pagan, Burma, Languages and History VIII MRU and K’UMI (N-ARAKAN)ဆောင်းပါးကို ရည်ညွန်းပါသည်။
(f) Professor G.H Luce of Yangon University, History Department mentioned as follows in writing about Myo and Kha Mwei, residents of North part of Rakhine
”The residents at May Yu river region East of Nat River, are today Muslims know as Rohingyas. They said they gad resided there over 1000 years. Such speaking is extending real facts. We have known that Muslims gad occupied Bingalar since 1202A.D. Then the last arrived at Rakhine frontier recently. When fightings had been occurred, it seemed to be involved by ethnic groups. Some Muslim leaders or regional leaders who had changed to Muslim religion, seemed to be settled at Myanmar side ” Referred to (Phases of Pre Pagan, Burma, Languages and history VIII MRU and KUMI (N-ARAKAN) article.
(ဆ) သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာ သန်းထွန်းက G.H.Luee ၏ ဆောင်းပါကို ၁၉၉၄ခု၊ သြဂုတ်လထုတ် ကလျာမဂ္ဂဇင်းတွင် ရေးသားဖော်ပြရာ၌ ” ရခိုင်မင်းကလည်း မူဆလင်ဘွဲ့ရှိတယ်။ အ၀မင်းဆီဝင်ရောက် လာတယ်။ မူဆလင်မင်းကတော့ နတ်မြစ်အရှေ့ မယူဖြစ်ဒေသက ရိုဟင်ဂျာဖြစ်မှာလို့ ဆင်ခြင်မိတယ်။ သူတို့ကလည်း အဲဒီအရပ်မှာ နှစ် (၁၀၀၀) ထက်မနည်းတော့ဘူးလို့ပြောလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီလောက် မရှိပေမယ့် ၁၂၀၂ ခုလောက်က ဘင်္ဂလားကို မူဆလင်အယူရှိသူတွေ စတင်ဝင် ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါက ဖြစ်နိုင်တယ်။
(g) The Historian Dr. Than Tun wrote an article in Kalyar Magazine, issued in August of 1994 in respect of G.H. Luce’s article, he described that Rakhine King had Muslim title. He arrived at Ava King. I think that Muslim king might be Rohingya residing at May Yu Region of East of Nat river. They used to say that they had resided there for over 1000 years. But it was not such period and might be at about 1202 A.B. When Muslims began to intrude in Bengalar, Since (800) years they might be arrived.
အနှစ် (၈၀၀) ကပေါ့။ သူတို့ရောက်လာတာ။ အဲဒီဝန်းကျင်က ဗုဒ္ဒဘာသာနိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပဋိက္ကရား (COMILLA) လည်း ပျက်စီးခဲ့ရတာဖြစ်မယ်။ အချို့မူဆလင် ခေါင်းဆောင်ဟာ အင်းဝမင်းနှင့် မိတ်သဟာဖြစ်တဲ့ သဘောကို ဒီကျောက်စာမှာ ရေးမှတ်ခဲ့တယ်လို့ ထင်းရပါတယ် ” ဟု တင်ပြထားသည်။
At that timeaBuddhist City Pareit Kayar (Comilla) had been destroyed. I think that some Muslim leader seemed to be friendship with Ava King, which had been written in this stone inscription.
(ဇ) ဆရာကြီး လူစ်နှင့် ဒေါက်တာသန်းထွန်းတို့သည် AD ၁၄၄၂ တွင် အင်းဝဘုရင် နရပတိလက်ထက် ရေးထိုးခဲ့သော ကျောက်စာကို လေ့လာမှတ်သားတင်ပြခဲ့ကြရာတွင် နရပတိမင်းနန်း တက်သော အခါ အရပ်ရှစ်မျက်နှာမှ လာရောက်သော ဧည့်သည်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ” စစ်ကိုင်း ” ထူပါရုံဘုရားကျောက်စာ ” တွင် မှတ် တမ်းရေးသားရာ၌ –
” မဇျွိမဒေသအရပ်၊ နှိုက်ရှေ့က ပုဂံမင်းကြိတိုပ်စစ်ထိုင်လေစေသည်။ သက်မြုန်ချင် ကိုင်အစိုင်ရသော ကစ္စပတိ အဿပတိမည်သော ပန်သေမင်တိုပ်၏ အမျိုပ်အနွဲ ဖွပ်သော ရခိုင်မင်သည် ဖိုဝ် ” ဟုပါရှိရာ ဆရာကြီးများက ” ပန်သေမင် ” ဖြစ်သော မူဆလင်ခေါင်းဆောင်သည် အ၀မင်းနှင့် မိတ်သဟာဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ကောက်ချက်ချ တင်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
(ကျောက်စာပါ စာသားများကို ရှေးဟောင်းမြန်မာကျောက်စာများ၊ ပဉ္စမတွဲ၊ စာ-၃၅ နှင့် ၃၆ တွင် ရှေးဟောင်း သုတေသန ဦးစီးဌာနက ဖော်ပြထားပါသည်။)
(h) Luce and Dr. Than Tun had studied and mentioned in respect of stone inscription written in 1442 A.D. by Ava Narapati King. In record of stone inscription known as Saggaing Htupayone Pagoda meant that Muslim leader seemed to be friendship with Ava King.
(ဈ) မော်ရစ်ကောလစ်ရေး မြန်မာဘာသာပြန် ရတနာရွှေမြေစာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၂၀၇-၂၆၀ တွင် မန်နရစ်ဘုန်းတော်ကြီး၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းများအရ သီရိသုဓမ္မရာ ဇာမင်းနန်းတတ်ပွဲတွင် မွတ်ဆလင်မြင်း တပ်သား (၆၀၀) ခြံရံလျက် နန်းတော်မှ ထွက်လာကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
(i) ”The Golden Land” written by Maurice Collis and translated book, in page 207-260 described that according to diary of Manaris Rev. the ceremony of taking throne of Thirithu Dhamma Yazaar tazar the King departed the palace by mean of surrounding by (600) Muslim mounted soldies.
(ည) AD ၁၂၃၄-၃၇ အတွင်း ရခိုင်ဘုရင် ” ငနှလုံးမင်း ” လက်ထက် စစ်တတောင်း ကို စစ်ချီတက် သိမ်းပိုက်ပြီး စစ်တကောင်းသား တစ်ဝက်ဖြစ်သည့် သုံ့ပန်း ၄၂၇၀၀ ကို ရခိုင်ပြည်တွင်းသို့ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင် လာကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်တွင်းရှိ သင့်လျော်ရာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်စေကြောင်း ရခိုင်ရာဇ၀င်သစ်ကျမ်း၊ စာမျက်နှာ – ၃၅၂/၃၅၃ တွင်ဖော်ပြထားရာ ထို ၄၂၇၀၀ အနက် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်နှင့် ဟိန္ဒူဘာသာ ၀င်များလည်း ပါရှိလာနိုင်သော်လည်း စစ်တကောင်းမှာ AD ၁၂၀၀ ကျော်ကစ၍ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီးဖြစ်၍ အများစုမှာ မွတ်ဆလင်များ သာဖြစ်ကြောင်း ပညာရှင်များက သုံးသပ်ကြသည်။
(j) During 1234-37 AD Rakhine King Nga Na Lone fought Chittagong and occupied it. Brought half of Chittagongs 42700 war victims to Rakhine and allowed to work reasonable businesses within Rakhine City. It was described in Pages 352/353 of the New Rakhine History. The scholars gave comment that the majorit of sc victis ight be Muslims.
(ဋ) လောင်းကြက်ခေတ်၏ နောက်ဆုံးဘုရင် မင်းစောမွန်ကို အင်းဝဘုရင်မင်းခေါင် ၏ သားမင်းရဲကျော်စွာမှ AD ၁၄၀၇ ခုတွင် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာ မင်းစောမွန်မှာ ဒေလီမင်းထံသို့ သွားရောက်ခိုလှုံခဲ့သည်။ လောင်းကြက်မြို့ ပျက်ဿုန်းပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်သည် မြန်မာဘုရင်လက်အောက်ခံအဖြစ် (၂၄) နှစ်ခန့် ရှိနေခဲ့သည်။
ဒေလီမင်းစူရတန်က မင်းစောမွန်အား ” ငါ၏သား မင်းစောမွန်နှင့် ငါသည် ကိုယ်သာ နှစ်ခု အသက်ကား တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည်။ နှလုံးသည် တစ်ခုတည်းဖြစ်သည်။ ငါ၏ပြည် စူရတန်နှင့် ငါ့သား ရခိုင်ပြည်သည်လည်း တစ်ပြည်တည်းသာဖြစ်ကြစေ” ဟု ပြောဆိုပြီး ရခိုင်ပြည်တွင် ကိုယ်တိုင်မင်းလုပ်ခဲ့သည်။ ဒေလီမင်းက စစ်သူကြီး စန်ဒီခန်အား စစ်အင်အား (၅၀၀၀၀) ကျော်ဖြင့် ဝေလှခင်၏ခေါင်းကို ဖြတ်ယူစေခဲ ပြီး မင်းစောမွန်ကို ရခိုင်ပြည်တွင် ၁၄၃၁ ခုနှစ်တွင် လောင်ကြက်မြို့၌ နန်းတက်ခဲ့သည်။ စန်ဒီခန်၏ စစ်တပ်သည် လောင်းကြက်တွင် ၂-နှစ်နေပြီးနောက် မြောက်ဦးမြို့ကို တည်ဆောက်ရာတွင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြပြီး၊ ၁၄၃၃တွင် မြောက်ဦးမြို့တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာစစ်တပ်၏ရန်ကြောင်း စန်ဒီခန်၏ စစ်တပ်အား ရခိုင်ပြည်တွင် စစ်သား (၅၀၀၀၀) ခန့် ၀တ်ပြုကြသည်။ ဗလီကျောင်းများကို မြောက်ဦးမြို့အနှံ့ တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ စန်ဒီခန့်ဗလီကြီးမှာ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်စာရင်းတွင် အပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမွတ်ဆလင်များ အနက် မည်ရွှေ့မည်မျှြ့ပန်သွားကြောင်း သမိုင်းစာမျက်နှာများတွင် မတွေ့ရှိရပါ။ Bangladesh District Gazatters စာ-၃၆ တွင် မွတ်ဆလင်စစ်သားများ ၀င်ရောက်လာပြီးနောက် မွတ်ဆလင်တရားသူကြီး Qazis များ ခန့်အပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ စန်ဒီခန့်စစ်တပ်ကြီး ရခိုင်ပြည်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ သည့် မှတ်တမ်းများရှာဖွေမတွေ့ရပါ။
(အကျယ်ကို ရမ်းဗြဲတောင်ကျောင်းဆရာတောင်၏ ရခိုင်ရာဇ၀င်သစ်ကျမ်းတွင် လေ့လာဖတ်ရူနိုင်ပါသည်။ ) (Journal of Burma Research Society Vol1.2, P-493တွင်လည်း လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်သည်။
(k) When Min Ye Kyaw Swar, son of Ava King fought Min Saw Mon, the last king of Loung Kyet Age, in 1470 A-D. Min Saw Mon took asylum under Deli King. After destroyed loung kyet city the Rakhine City was under the rule of Myanmar King for about (24) years.
Deli king Suratan was very familiar with Min Saw Mon and allowed his Commander Wai Lu Khin (Walikhan) to occupy Loung Kyet City and gave the throne to Min Saw Mon. But Wai Lu Khin arrested Min Saw Mon and then then gave the throne to Min Saw Mon of Loung Kyet City in 1413 A.D. Sandi Khan’s forces stayed in Loung Kyet for (2) Years and helped in Construction of Maruk U City and then stayed in Marauk-U in 1433. Due to forces of Myanmar Sandi Kha’s forces about (50000) worshipped at Rakhine City. They founded mosques throughout Mrauk-U City. Sandi Khan’s mosque was contained in ancient heritage list. There was no findings in respect of how much muslims returned back among them. In page 36 of Bangladesh District Gazetters described that after entering Muslims solders appointed Muslim Judges and ruled. There was no record in respect of Sandi Khan’s Judges and ruled. There was no record in respect of Sandi Khan’s forces returning back. (May find in Page 493, Vol II, Journal of Burma Research Society)
(ဌ) A History of Chittagaung by Dr.S.B.Qanungo. Vol.1, Page-219နှင့်Ibid page -75တို့တွင် ရခိုင်ဘုရင်သည် အရေးပါသော ဌာနများ၊ တရားသူကြီးများ၊ နန်းတွင်းစာဆိုတော်များ၊ အတွင်းဝန်များ၊ ဘုရင်ခံများ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို မွတ်ဆလင်များအား ခန့်ထားကြောင်းနှင့် Lashkar Wazur, Ashraf Khan, Qureishi Magan. Sukiman, Sayed Musa, Sayed Mohomed Khan, Navay Majlis,Sayed Shahတို့လည်း ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသော်လည်း ရခိုင်သမိုင်းများတွင် မတွေ့ရှိရ။ အချို့အရေးပါသော ရာထူးနေရာတွင် အာရပ်၊ အီဂျစ်၊ ဆီးရီးယား၊ တူရကီ၊ အဆီဘီးနီးယားဘာသာ၊ ဘင်္ဂလီ၊ တရုတ်များကိုလည် တစ်ဦး တစ်ယောက်ခန့်ထားကြောင်းIbid Page-290တွင် ဖော်ပြထားသည်။
(I) In page 219 and 75 of Vol I, A History of Chittagong by S.B. Qanungo described that the Rakhine King had appointed Muslims in important departments as Judges, royal writers, Secretaries, governors and generals and contained Lashkar Wazur, Ashrof Khan, Qureishi Magan, Sukiman, Sayed Masu, Sayed Mohomed Khan, Navay Majlis, Sayed shah etc. But did not find it in history of Rakhine.
In page 290 also described that Rakhine King appointed some Arabs, Egypts, Serias, Turakee, Ashiberia, Bengalis and Chinese in important posts.
(ဍ) ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ညွန်ကြားရေးမှူးရုံးက ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသော ၁၉၉၇ ခု၊ မတ်လအတွင်းက ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေသော သာသနာရောင်ဝါထွန်းစေဖို့ စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ-၆၅ တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းစဉ်ဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာ စတင်ဝင်ရောက်လာပုံကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထား ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် ၁၂၀၀ ခန့်ကစ၍ အုပ်စုလိုက်လည်းကောင်း တစ်ဦးချင်း နှစ်ဦးချင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း ပြန့်နှံ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်ဟု နိဒါန်းချီထားပြီး ရခိုင်ပြည်သို့ အစ္စလာမ်သာသနာရောက်ရှိလာပုံနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်။
” အေဒီ ၇၀၀ နှင့် ၁၅၀၀ အကြားတွင် အနောက်တိုင်းမှ အာရဗ်ကုန်သည်၊ ပါရှင်းကုန်သည်နှင့် ရောမကုန် သည်တို့သည် မိမိတို့ ပင်ရင်းတိုင်းပြည်များမှ ရွက်သင်္ဘောများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း ကိုလည်းကောင်း၊ယင်းကိုကျော်လွန်ကာအရှေ့ဖက်တရုတ်ပြည်ကမ်းခြေသို့လည်းကောင်း၊ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးအတွက် ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ရမ်းဗြဲကျွန်းအနီး ပျက်စီးသော အာရဗ်သဘောင်္ရှိ မွတ်ဆလင်တို့သည် ထိုအခါကပင် ရမ်းဗြဲကျွန်းတွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ဟုလည်းကောင်း၊ စာမျက်နှာ၂၇ တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ကမန်မွတ်ဆလင်တို့အပြင် စစ်တွေမြို့အရှေ့ပိုင်း ဒေသများ၊ ရမ်းဗြဲကျွန်းနှင့် သံတွဲတ၀ိုက်တွင် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြသော အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သည့် ရခိုင်များ အနှံ့အပြားရှိနေသည်ဟုလည်းကောင်း
AD ၁၈၀၁ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထပ်၊ ရခိုင်ဖက်မှ ၀င်ရောက်လာသော မွတ်ဆလင် ၃၀၀၀ ကျော်ကို မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းဒေသအချို့တွင် နေရာချလာခဲ့ကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြထား သည်။
(m) In page 65 of the light of Sasana Published by Directorate of Resettlement, Ministry of Defence, in Marchof 1997 , 1st edition under the title of lslam religion and Union of Myanmar, described the brief history of lslam religion and Union of Myanmar. It mentioned that Islam had arrived since about 1000 years or 1200 years by means of group by groups or persons by persons gradually. It also described as follows in respect of arrival of Islam into Rakhine.
”Between 700 A.D and 1500 A.D, Arab Merchants, Persian merchants and Rome merchants from western countries arrived at Myanmar coast and east coasts of China for trading. The Muslims from shipwreck near Yanbye Island settled at Yanbye Island since at that time. Also described in Page 67 that there were Kaman Muslims at east of Sittwe, Yanbye Island and Thandwe surroundings and native Rakhine who had worshipped Islam spreadly. In 1801 A.D. Botaw Paya allowed to settle over 3000 Muslims coming from Rakhine in some regions of middle part of Union of Myanmar.
(ဎ) ရခိုင်သက္ကရာဇ် ၉၆၅ ရေးထိုးထားသော ပါရှန်းဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် ဒင်္ဂါးတွင်Sultan Bahadur Shah ဟု(AD 1554-1555)တွင် အုပ်စိုးခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလား စူလ်တန် စော်ဘွား၏အမည်ကို ရေးထိုးထားသည့် ထိုအကြောင်းခြင်း ရာကိုရခိုင်သမိုင်းတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း၊Ibid 192နှင့်194တို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။ မင်းစောလှ နှင့် မင်းစင်္ကြာတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရင်များ(AD-၁၅၅၅ မှ ၁၅၇၁ )ခုနှစ်အတွင်း နန်းစံ ခဲ့ကြ သော်လည်း ဘင်္ဂလားဘုရင်၏ အမည်ဖြင့်သာ ဒင်္ဂါးထုတ်ဝေခဲ့သည်မှာ အံ့သြဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။
(n) In dinger coin written by Persian language and lssued in 965 Rakhine Era mentioned as Sultan Bahadur Shah (AD 1554-1555).
The Rakhine history did not mention such fact. Min Saw Hla and Min Satkyar were Buddhist Kings ruled between (AD. 1555-1571) but it was strange that why issued dinger coin by the name of Bengali King.
(ဏ) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၃-၂၉)၊အတွဲ-၁၊အမှတ် (၁၅) မြန်မာသံတော်ဆင့်(THE MYANMAR GERALD)အပတ်စဉ်ဂျာနယ်အချုပ်ပို (က) တွင် လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ကရခိုင်သမိုင်း သုတေသီသုံးသပ်ချက် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားရာ၌ မြောက်ဦးခေတ်တွင် ဘင်္ဂါလီများ စတင်ရောက်ရှိလာခြင်း ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ရခိုင်ဘုရင်လက်အောက်ရှိစဉ်က သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ယူလာသူများကို လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင်လည်း ကောင်း၊ အခြားအမှုထမ်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ ခိုင်းစေခြင်းဖြင့် ဘင်္ဂေါနယ်မှ အခြေချနေထိုင် လာ သော ဘင်္ဂါလီများ၊ ရခိုင်ဒေသတွင် ၁၅ ရာစုတွင် စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ (၁၇) ၇ာစုတွင် ပေါ်တူဂီနှင့် ရခိုင်တို့ ကျွန်အရောင်း အ၀ယ်ပြုလုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် ကျွန်ဈေးကွက်တွင် ဖမ်းဆီးရောင်းချခဲ့သော ဘင်္ဂေါနယ်မှ ဘင်္ဂါလီများရှိခဲ့ရာ ထိုကျွန်များကို လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင်လည်းကောင်း၊ လက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လည်းကောင်း၊ အမှုထမ်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရခိုင်ဒေသသို့ ဘင်္ဂါလီအချို့စတင်ရောက်ရှိ လာခဲ့သည် ဟုဆိုသည် ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
(o) In additional paper (A) of weekly journal named the Myanmar Herald, No. (15), Vol. I, published on june (23-29) of 2012 described that while under the rule of Rakhine King in Mrauk U age, the war victims brought by Rakhine King had allowed to steele and work in agricultural works and other staffs works, Bengalis from Bengalar commenced to enter in Rakhine region in 15th century. In 17th century Portuguese and Rakhine had traded slaves of Bengalis and such slaves were used in agricultural works, handicraft works and staff works so that some Bengalis had arrived at Rakhine region initially.
(တ) တဖန် (၂၅-၆-၂၀၁၂) နေ့ထုတ်Favourite News Weeklyတွင် ” ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စအရင်း အမြစ် ဘယ်ကလာ ” ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ရေးသားရာ၌လည်း ဘင်္ဂါလီလား၊ ရိုဟင်ဂျာလား၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှလာပြီး မကွဲ မပြားနဲ့၊ ရှုပ်ထွေးလာခဲ့၊ ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (၅၂၈)နှစ် သရစ်သက္ကရာဇ် အေဒီ (၁၄၃၀) လေးမြို့ခေတ် ရခိုင်ဘုရင်မင်းစောမွန်လှက စခဲ့တာပါ။ ဒီအစက အဆုံးမသတ်နိုင်ဘဲ ရှုပ်သထက် ပိုရှုပ်လာတယ်။ လူဦးရေးတိုးလာတယ်။ ခေတ်တွေပြောင်းလာတယ်။ ရေကြည်ရာ၊ မြတ်နုရာရှာလာကြတယ်။ ဒါလည်း လောက သဘာဝ တရား ပဲပေါ့ဗျာတဲ့။ စသည်ဖြင့် ဖော်ပြထားရာ ဘင်္ဂါလီဟုဆိုဆို၊ ရိုဟင်ဂျာဟုဆိုဆို ၄င်းတို့၏အဆိုအရပင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၅၂၈) နှစ်က ရောက်လာကြောင်း မငြင်းဆိုနိုင် သည့်အဆုံး မီဒီယာများကပါ ၀န်ခံလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(p) Again in Favorite News Weekly, published on (25-6-2012) described that the arrival of Bengali or Rohingya commenced from Rakhine King Min Saw Mon in Lay Myo Age Ad (1530) since 582 years. Those medias have admitted that Bengalis or Rohingyas had come since 528 years.
(ထ) ရခိုင်မင်းဆက်၏ နောက်ဆုံးဘုရင် (၂) ပါးတို့မှာ စန္ဒသတိဿ (အောင်စုန်) နှင့် မဟာ သမ္မတ (သတိုးအောင်) တို့ဖြစ်ပြီး၊ ရမ်းဗြဲမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ရမ်းဗြဲမျိုးဆက်ဖြစ်၍လည်းရခိုင် သားငထွေး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့က ဘိုးတော်ဘုရားထံသို့ သွားရောက်စစ် ပန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Out Line of Burmese History by GE Harvery က ၄င်း၏စာအုပ် စာမျက်နှာ-၉၇ တွင်ရေးသားတင်ပြထားသည်။
(q) The last two Rakhine Kings, Sanda Thathitha (Aung Sone) and Mahar Thamada (Thodo Aung) were generation of Yanbye. It was described in Page 95 of Out Line of Burmese History written by G.E Harvey. Also described that the group led by Rakhine native ”Nga Than Htwe” had come to Botaw Paya and supported war.
(ဒ) (၁) ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ ရသစုံမဂ္ဂဇင်း၊ ဒေါက်တာ သန်းထွန်း (သမိုင်းပညာရှင်) ဗုဒ္ဒေါရ်မောကန် ခေါင်းစဉ် အောက်ရှိ စာမျက်နှာ-၁၅၀ တွင် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအဆောက်အုံး ၌ ရှေးဟောင်းသုတေသန လုပ်သင့်သော နေရာစာရင်း (၁၈၉၂) ခုနှစ်၊ စာမျက်နှာ-၇၊ စာမျက်နှာ-၈၊ စစ်တွေခရိုင် ဗုဒ္ဓမကမ်ဂူ၊ အစဉ်အလာပြောစကားအရ ဂူနှင့် ဗလီကို ဗုဒသြလိယာ မွတ်ဆလင်သူတော်စင်တစ်ဦးအား အသိအမှတ် ပြုပြီး အရင်နှစ်-၁၂၀၊ ခရစ်နှစ် ၁၇၇၁ ခန့်က တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း။
( r ) (1) In page No. 151 of Music Magazine, Dr. Than Tun (Historian) wrote and article about list of ancient properties research place at ancient building (1892) page 7/8, Sittwe district described aboutaMuslim saint about 1771 A.D and former 120 years.
(၂) အထက်ပါဆောင်ပါးတွင် မြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံး ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနမှူး ဂျာမန်လူ မျိုးပညာရှင် ရန်ကုန်ကောလိပ်ပါဠိပါမောက္ခ အမိလ်ဖိုခင်ဖာ(Emil Forchamfmer)၏ ရခိုင်ရှေးဟောင်း လက်ရာအစီရင်ခံစာ (၁၉၈၂) ခုနှစ်၊ ဓါတ်ပုံ-၆၈ (၄၂)၊ စာမျက်နှာ (၆၀)၌ ထင်ရှားကြီးကျယ်သော မွတ်ဆလင် သူတော်စင် ဗုဒ္ဒေါရ်သြလိယ (Budder Auliah)ကို ရည်မှန်းပြီး ဗုဒ္ဒေရ်မောကန်အား ခရစ်နှစ် ၁၇၅၆ ခုနှစ်က တည်ဆောက်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
(2) In such above article also mentioned about Budder Auliah and construction of Budder Maukan in 1756 A.D. (Attached-30)
(၃) အထက်ပါဆောင်းပါးတွင် ရခိုင် တိုင်းဒုတိယအရေးပိုင်Deputy Commissioner Col: Neslon Deviesမှတ်တမ်းအရ ခရစ်နှစ် ၁၇၃၆ တွင် စစ်တကောင်းမှ စစ်တွေသို့ (မာနိခ်ျ) နှင့် (ကျန်) ညီနောင်ရောက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
(3) In above article also described that according to record of described that (Marmiche) and (Kyan) brothers had arrived7 at Sittwe from Sittgang in 1736.
(ဓ) ဒန္ဒသုဓမ္မရာဇာမင်း (၁၆၅၂-၁၆၈၄) လက်ထက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ မဂိုဧကရာဇ် ရှဂျီဟန်၏ ဒုတိယသားတော် ရှာရူဂျာနှင့်အတူ နောက်လိုက်အင်အား (၃၀၀) ခန့် ၁၆၆၀ ပြည့် ရခိုင်ပြည်သို့ ၀င်ရောက် ခိုလှုံ့ခဲ့ကြောင်း၊ ရခိုင်သမိုင်း၊ မြန်မာ့သမိုင်း၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတို့တွင် ဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(s) In Sand Thu Dhamma Yazar King age (1652-1684) second son of Mago King Shugitan of India and about (300) followers took asylum under Rakhine City in 1660 A.D. It was read in Rakhine history Myanmar History and Would History.
(၉) ရိုဟင်ဂျာဟု တရားဝင်သုံးစွဲခဲ့သည့် အထောက်အထားအချို့
(က) ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားများ ဒီမိုကရေစီပါတီ၏ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ထုတ် ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် သတင်းလွှာ၊ စာမျက်နှာ (၈) တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအငြိမ်းစားအောင်ကြီး၏ မူဂျာဟစ်လက်နက်ချပွဲတွင် ၄င်းတို့က ထိုနယ်သားများကို ခေါ်တောဟူ၍လည်း မခေါ်ရန် ၊ ဘင်္ဂါလီဟုလည်းမခေါ်ရန်၊ ရခိုင်မွတ်ဆလင် ဟူသော အမည်နာမကိုလည်း မလိုချင်၊ သူတို့ကို (ရိုဟင်ဂျာ) အရှေ့သားဟု အာရဘစ်ကားနှင့် အဓိပါယ်ရှိ သောနာမည်ကို ခေါ်ရန် တင်ပြကြပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးရာတွင်လည်း ၄င်းတို့က အယူဝါဒအရ ဘာသာကို အစွဲမပြုဘဲ ဒေသကို အစွဲပြုသောကြောင့် ၄င်းတို့နာမည်ကို ရွေးချယ်တင်ပြရာ စစ်ဘက်ရုံးချုပ်မှ လူကြီးများဆွေးနွေးပြီး ဥပမာ – မြန်မာပြည်တွင် မှီတင်းနေထိုင်၍ ရှေးယခင်အင်္ဂလိပ်တို့ အမည်ပေးခေါ်ဝေါ်ခဲ့ သော လ၀လူမျိုးကို ၀ လူမျိုးခေါ်ဘိသကဲ့သို့ ကရင်နီဟုခေါ်တွင်သော တောင်ပေါ်ကရင်လူမျိုးစုကို ကယား လူမျိုး ဟုခေါ်ခြင်း၊ ယခင်တလိုင်းဟုခေါ်ကြသော ဝေါဟာရကို မွန်ဟုပြောင်းခြင်း များရှိသကဲ့သို့ သဘောထား၍ ကိုးကန့်နယ်၊ ၀နယ်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ပူတာအို၏ မြောင်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်တုံမြောင်ပိုင်းဒေသတို့ စုပေါင်း၍ စစ်ရုံးချုပ်အောက်တွင် နယ်စပ်ဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခု ဖွင့်လှစ်၍ နယ်စပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ရေး အစီအစဉ်တွင်ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသကို မေယူဒေသဟု သတ်မှတ်ပြီး၊ စစ်ရုံးမှ အုပ်ချုပ်ရန်တင်ပြပြီး၊ အစိုးရ ကက်ဘီနက်မှလက်ခံသဖြင့် ဗိုလ်မှူးကြီးစောမြင့်ကို ထိုဒေသများအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ နာမည်ကိုလည်း ရခိုင်မွတ်ဆလင်အစား ရိုဟင်ဂျာ သုံးစွဲခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်ဟု ထည့်သွင်းရေးသား ဖော်ပြထား ပါသည်။
(9) Some evidence of commencement of usage as Rohingya legally
(a) In page No. 8 of the news bulletin published by the Union National Democrate Party (UND) in February of 1992, mentioned as follows.
The Retired Brigadier General Aung Gyi said at surrendering ceremony of megahits that the residents of such region submitted that they did not want to call as Khawtaw; did not call as Bengali, did not want the name as Rakhine- Muslim but they wanted to call as Rohingya. In management sector, Buthitaung – Maungtaw had been prescribed as May Yu region and put under the rule of Colonel Saw Myint, the administrator of such region. Allowed the name Rohingya to use instead of Rakhine Muslim.
(ခ) (၁၈-၇-၆၁) နေ့တွင် အတွဲ -၂၁၊ အမှတ်-၆ စာစောင်တွင် မေယုနယ်မှာလေ ဘယ်လိုခြေရှိပါလိမ့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာစောင်များတွင် ထည့်သွင်းထုတ်ဝေခဲ့ဖူးသည်။ ထိုဒေသရှိ လူများစု၏ အမည်ကို ရိုဟင်ဂျာဟု ဖော်ပြထားသည့် စာစောင်များဖြစ်သည်။
(b) In Vol. (12) No. (6) paper published on 18-7-61 also expressed the situation about Mayu with heading ” How the situation in Mayu Frontier Area” there also mentioned ethnic Rohingya.
(ဂ) ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပညာရေးနှင့် စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ညွန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် တပ်မတော်ခေတ်ရေး စာစောင် (၂) စောင်အနက် (၈-၈-၆၁) နေ့ထုတ် အတွဲ-၁၂၊ အမှတ် (၉) စာစောင်တွင် ပျောက်သောသူ ပြန်၍ တွေ့သည့်ပမာ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး (၇၉%)ရှိကြောင်း ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး၊
( c ) In Journal No. 9, Vol. 12, Tatmadaw Khityae, issued on (8-8-61) bye Directorate of Education and Psycho affair under Ministry of Defence described with heading finding out the one of lost brethren that 97% of Rohingya race in Buthitaung – Maungtaw and there were relatives.
(ဃ) (၂၅-၉-၅၄) နေ့ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုနှင့် မိန့်ခွန်းတွင် ဘူးသီးတောင်မောင်တော နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများမှာ မွတ်ဆလင်များဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားဖူးသည်။
(d) In speech of the Stat prime minister U Nu made on (25-9-54) addressed that the Rohingya race residing at Buthitaung Maungtaw rigion was Muslim.
(င) ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဘဆွေက (၃-၁၁-၅၉) နှင့် (၄-၁၁-၅၉) နေ့ ဘူးသီးတောင်မောင်တော လူထုစည်းဝေးပွဲတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသည် အခြားတိုင်းရင်းသားများနှင့်တန်းတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ရာဇ၀င်အထောက်အထားများ တင်ပြဟောပြောခဲ့ဖူး သည်။
(e) Deputy Prime minister and Defence Minister U Ba Swe addressed on (3-11-59) and (4-11-59) at Buthitaung – Maungtaw Public meeting that Rohingya were residing within Union of Myanmar like that of other natives equally since many years by mean of showing historical documents
(စ) (၂၀-၁၁-၆၀) နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် နယ်ခြားဒေသအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှ နယ်ခြားအုပ်ချုပ် ရေးအရာရှိ ရခိုင်တိုင်းမင်းကြီးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ မေယုနယ်ခြားခရိုင် သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြရာ ရိုဟင်ဂျာများက လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုကြကြောင်း၊ ဂျပန်ကို ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများ၏ ခုံခံမှုကြောင့်မြောက်ဖက်သို့ ဆက်လက်ချီ တတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ သူရသတ္တိရှိသူ များဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်ချမ်းရေးကို မြတ်နိုးလိုလားပြီး သစ္စာရှိကြသော စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပြည်ထောင်စု၏ လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည့်အပြင်မြန်မာ့အသံ (ရေဒီယို အစီအစဉ်) မှလည်း အကြောင်းတရားအတိုင်း ထုတ်လွှတ်ခဲ့ ဖူးသည်။
(f) In Myanmar Ahlin Newspaper published on (20-11-60) described that the frontier administrator of the Frontier Management Office, Commissioner of Rakhine Division and members arrived at May Yu frontier district, Rohingyas had welcomed them; Rohingya defended Japanese so that they could not march to northern races; they were courageous persons; they wanted peace and loyal to Union; they were an interesting race and then broadcasted such subject from Myanmar Radio.
(ဆ) (၁၅-၅-၆၁) နေ့မှစ၍ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု၏ အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို တစ်ပတ်လျှင် (၃) ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ဒုတိယမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှ ရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားဖြင့် အသံလွှတ်ခွင့်ကို အစိုးရအဖွဲ့ဆုံးဖြတ် ချက်အရ အသံလွှတ်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့သို့ ရိုဟင်ဂျာ အစီအစဉ်ဖြင့် အသံလွှတ်ခဲ့သည့်ကိစ္စကို ပြန်ကြားရေးနှင့် အသံလွှတ်ဦးစီးဌာနထုတ် နှစ်(၃၀) မြန်မာ့အသံစာအုပ် စာမျက်နှာ (၇၁) တွင် တရားဝင်ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည် ။
(g) According to decision of the cabinetaRohingya broadcasting programme had been performed (3) times per week as nationalities programme with effect from (15-5-61). Such facts were described in Page (71) , Myanmar Radio book for (30) years, published by Department of Information & Broadcasting.
(ဇ) လူနည်းစုတိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာဘာာအစီအစဉ်ကို ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ မေ (၁၅) ရက်နေ့မှ စတင်ခဲ့ သည်။
(h) The minority native Rohingya programme was commenced on (15-5-1961) .
(ဈ) မြန်မာ့အသံနှစ် (၃၀) ရွှေရတုသဘင်အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာအစီ အစဉ်မှူး ဦးဘထွန်း နောက်ဆုံးတန်း အမှတ်စဉ် (၁၂) တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
(i) Rohingya language announcer U Ba Tun was attended at Myanmar Radio (30) years golden Jubilee ceremony, sitting at Sr.No.(12) of last row .
(ည) မြန်မာ့အသံ (၂၅) နှစ်မြောက် ငွေရတုသဘင်စာအုပ်အဖြစ် ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ ဖောဖော်ဝါရီလ တွင် သောတရှင် မဂဇင်းကို ထုတ်ဝေခဲ့ရာ ထိုစာအုပ် စာမျက်နှာ-၅၅ တွင် ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှစ၍ တိုင်းရင်း သားဘာသာစကားများဖြင့် အသံလွှတ်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရက်စွဲများကို ဖော်ပြရာ၌ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ အဓိက ရှမ်းနှင့် ကချင်ဘာသာ၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ်က စကောကရင်နှင့် ပိုးကရင်ဘာသာ၊ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် ချင်းဘာသာ၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် မွန်ဘာသာ၊ ပအို(၀်)ဘာသာ၊ လားဟူဘာသာ၊ ရိုဟင်ဂျာဘာသာ နှင့် ကယားဘာသာတို့ အသံလွှတ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
(လာဟူးနှင့် ရိုဟင်ဂျာဘာသာတို့ဖြင့် အသံလွှတ်ခွင့်ကို (၁၅-၅-၆၁) နေ့မှ စ၍ ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး၊ (၁-၁၀-၆၅) နေ့တွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်းကိုလည်း လေ့လာသိရှိရသည်။
(j) In page No. (55) of Thawta Shin Magazine Published in Ferbuary of 1971 for 25th year Silver Jubilee of Myanmar Radio described the diary of broadcasting languages programmes of nationality from 1947 to 1959 and 1959 to 1959. Rohingya Language had been broadcasted from 1961.
(ဋ) ၁၉၆၄ ခုနှစ် စာပေဗိဗာန်မှ တုတ်ဝေသည့် မြန်မာ့စွမ်းစုံကျမ်း အတွဲ (၉)၊ စာ(၉၀) တွင် မေယုနယ်ခြား ခရိုင်အကြောင်း ဖော်ပြထားရာ မေယုနယ်ခြားခရိုင် (ဘူးသီးတောင် မောင်တော) တွင် လူဦးရေ (၄) သိန်း (၅) သိန်းခန့်ရှိရာ (၇၅%) မှာ ရိုဟင်ဂျာ များဖြစ်ပြီး ရခိုင်၊ မြို၊ ခမီ၊ ဒိုင်းနက်စသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများတို့ နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ (စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ-၉) တွင် မောင်တောမြို့အကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
(k) In page No. (90), Vol (9) of Myanmar encyclopedia, published in 1964 by Sarpay Beil Hman described about May Yu District and it had population of about (4) lakhs or (5)lakhs, 75% were Rohingyas. In volume (9) also described about Maungtaw town.
(ဌ) မူဂျာဟစ်လက်နက်ချအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သော တပ်မတော်ဒုတိယကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကြီး၏မိန့်ခွန်းကို (၈-၇-၆၁)နေ့တွင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ စာမျက်နှာ-၅ နှင့် ၆ တို့တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ရာ မေယုခရိုင်ဟာ အနောက်ဖက်မှာ ပါကစ္စတန်နယ်စပ်နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ဆက်စပ်နေပါ တယ်။နယ် နမိတ်ခြင်းဆက် စပ်နေတဲ့အလျောက်ပြည်နယ်ရဲ့ အရှေ့ဖက်နှင့် အနောက်ဖက်မှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာကို ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ လူမျိုးစုများရှိပါတယ်။ အနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ လူတွေကို ပါကစ္စတန်ဟုခေါ်ပြီး အရှေ့ဖက်မှာရှိတဲ့ မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့သူတွေကို ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် နည်းနည်းပြောကြားချင်တာကတော့ အခုဆို ပါကစ္စတန်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ပြည်နယ်တစ်နယ်ထဲမှာ ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးထဲ တိုင်းပြည် (၂) ပြည်ခွဲပြီး ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်ပြည်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ နယ်မှာလဲ ဒီလိုပဲ လူမျိုးစဉ်ဆက်နေတာရှိတယ်။ ဥပမာ ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင် လီဆူးဆိုတဲ့လူမျိုးရှိတယ်။ မြန်မာပြည် ဖက်မှာ အီကောလူမျိုးရှိသလို တရုတ်ပြည်ဖက်မှာလည်း အီကောလူမျိုးတွေရှိတယ်။ မြန်မာပြည်ဖက်မှာ လ၀ လူမျိုးတွေရှိသလို တရုတ်ပြည်ဖက်မှာလည်း လ၀တွေရှိတယ်။ အဲဒီလိုပဲ မြန်မာပြည်ဖက်မှာ ရှမ်းတွေရှိသလိုပဲ တရုတ်ပြည်ဖက်မှာ တိုင်ဆိုတဲ့ ရှမ်းတွေရှိတာပါပဲ။ ဒီလူတွေက စကားတစ်မျိုးတည်းရှိပြီး ဘာသာလည်း တူတယ်။ ကိုးကွယ်တာချင်းဆိုလဲ အားလုံးတူတယ်။ ယိုးဒယားနယ်စပ်မှာ စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
(ထိုမိန့်ခွန်းတွင် ရိုဟင်ဂျာများကို ဆွေမျိုးအရင်းများလို သဘောထားပြီး ဆောင်ရွက် ကြရန်လည်း ကောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိ ဗိုလ်မျူးကြီးစောမြင့်နှင့် ဗိုလ်မှူးကြီး ရဲခေါင် တို့ကို ဒီဒေသက ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ လိုအပ်ရာတွေ လုပ်ကြဖို့ အမိန့်ပေးကြောင်း၊ ယခုအချိန် ကစ၍ လူနည်းစုကိုးကွယ်သော ဘာသာဝင်တွေအဖြစ် စောင့်ရှောက်မယ်။ ကာကွယ် မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်စေလိုကြောင်းကိုပါ တရားဝင်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။)
(l) The speech of Brigadier General Aung Gyi, Deputy Chief of Defence Commander (Army) who had attended at mujahit surrendering ceremony, was published in page (5/6) of the Myanmar Ahlin Newspaper. It described that May Yu district was adjacented to frontier of parkistan in the west so that there were Muslims in eastern side and western side of the State. The people residing at western side were called as parkistan and the people residing at eastern side, within Union of Myanmar, were called as Rohingyas.
In such speech also described in order to perform with Rohingyas as relative and ordered to administrator Colonel Saw Myint and colonel Ye Khaung to carry out for Rohingyas residing at that areas.
(ဍ) ၁၉၇၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံပထ၀ီ အထက်တန်းကျောင်းသုံးစာအုပ်၊ စာမျက်နှာ -၈၆ တွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ပျံ့နှံနေထိုင်ရာပြ မြေပုံကိုပါ ထည့်သွင်းပြီး ကျောင်းသားများကို သင်ကြားပေးခဲ့ရာ၌ ရခိုင်ပြည် မြောက်ပိုင်း၊ ဘူးသီးတောင်မောင်တောဒေသရှိ လူမျိုးများကို ရိုဟင်ဂျာ နှင့် သက်လူမျိုးများ နေထိုင်ရာဒေသ အဖြစ် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
(m) In page No. (86) of High School used Myanmar Geography book published in 1978 described the map where nationalities were residing spreadly. It residing spreadly. It referred to the residents in Buthitaung- Maungtaw, the northern part of Rakhine State as Rohingya and Thet race.
(ဎ) ရိုဟင်ဂျာကျောင်းသူ/သားများ အသင်းချုပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ရိုဟင်ဂျာကျောင်းသူ/ကျောင်းသား အသင်းချုပ်အဖွဲ့လည်း ထူထောင်ခွင့် လျှောက်ထား ခဲ့ရာ (၃-၁၂-၅၉) ရက်စွဲပါ မှတ်ပုံတင်အမှတ်-၁၁၃-၅၉ ဖြင့် ”This is to cerify that Rangoon University Rohingya Students. Association is one of the Registered Associations of the University of Rangoon for the Academic year 1959-1690 ”ဟူ၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့စွဲပါ စာအမှတ်-RG. 7/60 ဖြင့် ၁၉၆၀-၁၉၆၁ ခုနှစ်အတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရိုဟင်ဂျာကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအသင်းချုပ်ကို ထပ်မံသက် တမ်းတိုးခွင့် ရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
(n) Establishment of Association of Rihingya Students.
In Yangon University, Rohingya students had applied to establish student association and allowed as per registration No. 113-59, dated (3-12-59). In such registration certificate described This is to certify that The Rangoon University Rohingya Students Association is one of The Registered Associations of the University of Rangoon for the Academic Year 1959-60. According to letter No. RG-7/60, dated (17-12-1960) of Yangon University Rohingya students Association had been extended its registration.
(ဏ) ရိုဟင်ဂျာခေတ်သတင်းစဉ် (THE ROHINGYA TIME’S NEWS)
ရိုဟင်ဂျာခေတ်သတင်းစဉ် (THE ROHINGYA TIME’S NEWS)ရိုဟင်ဂျာ ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများ အသင်း အချုိ့မှ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် သတင်းစာအမည်၊ အမှတ်အသားကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ရန်ကုန်မြို့စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရေးရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၃၉၁၉/၆၀ ဖြင့် ချုပ်ဆိုခဲ့ သည်ကို တွေ့ရသည်။
(o) The Rohingya Times News
It was found out that the Rohingya students association registered The Rohingya Times News on (16-12-1960) at Yangon deeds registration office as per registration no. 3919/60.
(တ) ၁၉၆၀ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုနေ့ တိုင်းရင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပြပွဲကို အောင်ဆန်းအား ကစားကွင်း၌ နိုင်ငံတော်က ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာရိုးရာကျင်ပွဲ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တခမ်းတနား ကျင်းပခွင့်ပြုခဲ့သည်။
(p) The Union Day of 1960, Cultural shows of the nationalities had celebrated at Aung San Playground led by The State and Rohingya Kyin show had been allowed celebrated grandly.
(ထ) မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း ဖြစ်ရပ်မှန်များ ၁၉၅၈-၁၉၆၂ မြန်မာနိုင်ငံရေး (တိယတွဲ) ကို ဦးကျော်ဝင်း၊ ဦးမြဟန်နှင့် ဦးသိန်းလှိုင်တို့က ပြုစု၍ မြန်မာ့သမိုင်းပါ ဖြစ်ရပ်မှန်များ စိစစ်ရေးအဖွဲ့က စိစစ်ပြီး (၁၉၉၁) ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ရာတွင်လည်း ရိုဟင်၈ျာလူမျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရိုဟင်ဂျာအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ပေသင့်၊ မသင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဖတ်ရှုရပါသည်။
(q) The real events of Myanmar History (1958-1962) (Vol-3) was compiled by U Kyaw Win, U Mya Han and U Thein Hlaing and published in 1991 , described about discussion made between representatives of Yangon University Rohingya Association in respect of Rohingya race whether to prescribe Rakhine State or.
(ဒ) သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ ရိုဟင်ဂျာများသည် ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် မျိုးဆက်ပေါင်း များစွာက တည်းက နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာများ မျိုးဆက် ပေါင်းများစွာ ရှိနေကြသည်မှာ ငြင်းဆိုမရသည့် အချက်ပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး သမ္မတရှမ်းလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်သူ စပ်ရွှေသိုက်က ရခိုင်မူဆလင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဌာနေတိုင်းရင်းသား များ ဖြစ်ကြသည်မှာ သေချာသည်။ အကယ်၍ သူတို့ကိုသာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားထဲသို့ မထည့်ပါက မိမိကိုယ်တိုင်လည်း တိုင်းရင်းသားအဖြစ် မခံယူသင့်ဟု ပြောဆိုခဲ့ဘူးပါသည်။
(r ) According to historical records, it was obvious that Rohingyas were residing in northern part of Rakhine City since many generations.
It was undeniable face. The first president of Union of Myanmar, Sao Shwe Thike (Shan) had spoken that Rakhine – Muslims were sure natives of Union did and if did not include them as natives we also did not include as natives.
၁၀။ အစ္စလာမ်အမွေအနှစ်၊ ရခိုင်ပြည် (Heritage)
စန်ဒီခန့်ဗလီ – ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ (မင်းတရားပြင်ရွာ) က၀ါလောင်ရွာတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၆၀၀) ခန့်က မင်းစောမွန် (ခ) နရမိတ်လှလက်ထက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်စန်ဒီခန့်က စန်ဒီခန့်ဗလီကြီးကို ခရစ် သက္ကရာဇ် အေဒီ ၁၄၃၃ ခုနှစ်က တည်ဆောက် ခဲ့သည်။
၀လီခန့်ဗလီ – အေဒီ ၁၆၆၈ ခုနှစ် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့တွင် ရှာရူဂျာဗလီကြီးကို တည်ဆောက် ခဲ့သည်။
ကန်ကြီး (၁၂) ကန် – ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ ပန်းမြောင်းရွာတွင် အေဒီ ၁၆၆၈ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော ကန်ကြီး (၁၂) ကန်နှင့် ဗလီကြီးကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။
နာဇီရွာဗလီ – ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နယ်၊ စက်ရုံစုရပ်ကွက်၊ နာဇီဗလီကို အေဒီ ၁၇၈၇ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဒေါရ်မောကန်ဗလီနှင့် အုတ်ဂူ – ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့တွင် အေဒီ ၁၇၅၆ ခုနှစ် ခန့်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့အပြားတွင် အစ္စလာမ်ဘာသနာဗလီကြီးများ။ သူတော်စင်များ ၀တ်ပြုသည့် ဂူဗိဗ္မာန်များ စသည့် အထောက်အထားများ ကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
10. ISLAMIC HERITAGE IN RAKHINE CITY
Sandikhant mosque : it was founded since 1433 A. D by General. Sandikhant in Mrauk-U Town, Rakhine State at Kawarloung village (Mintara Pyin Village), under the rule of King Min Saw Mon (a) Nara Meik Hla about (600) years ago. Walikhan mosque: Shar Shu jar mosque had been founded in 1668 A.D at Mrauk-U town, Rakhine State.
12 big lakes: It was found out 12 big lakes and big mosque at Pan Myoung Village of Minpya Township, Rakhine State, Those were founded in 1668A.D. Nazi village mosque: It was funded at Set Youne Su Ward of Sittwe township: Rakhine State in 1787 A.D.
Buddaw Mawkan mosque and tomb: It was built in about 1727 A.D, at Sittwe town, Rakhine State. Can be found out and studied many lslamic mosques and worshipping tombs everywhere of Rakhine State.
(၁၁) ရခိုင်စာပေနှင့် ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု
ဦးစံသာအောင်၏ အေဒီ-၆ရာစုနှင့် ယင်းမတိုင်မီ ရခိုင်ပြည်သုံး အက္ခရာစာအုပ် အမှာစာတွင် မြန်မာ အရေး အသားသည် အိန္ဒိယနယ်စပ်တွင် တည်ရှိသည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စာအရေးအသားသည် သမုဒ္ဒရာကြီးကို ဖြတ်၍ လာစရာမလိုပေ ဟု ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
ရှေးခေတ် ရခိုင်ပြည်တွင် ရှေးခေတ်အိန္ဒိယတိုက်ငယ်သုံးစာနှင့် အရေးအသားကို အသုံးပြုကြောင်း သက်သေ အထောက်အထား အမြောက်အများ ရှိခဲ့ပေသည်။ ယင်းတို့၏ ဗျည်းနှင့် သရများကို ခွဲထုတ်ကြည့်ပါက စာလုံးပုံသဏ္ဍာန်သို့ ပြောင်းရန် အလွန်နီးစပ်ကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရပေသည်ဟုလည်းကောင်း၊ စာပိုဒ်က အမှတ် ၁၂-၃ တွင် အိန္ဒိယပြည်မြောက် ပိုင်းသုံး ဗြဟ္မိပွားဗျည်းများနှင့် ရခိုင်ပြည်သုံးဗျည်းများမှာ မတူညီကြောင်း၊ ရခိုင်ဗျည်းများမှာ ပျူဗျည်းများနှင့် မတူညီကြောင်း၊ ပျူတို့ထံမှ ဆင့်ပွားလာရခြင်းမဟုတ် ဟုလည်းကောင်း ဦးစံသာအောင်က ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
ဦးစံသားအောင်သည် အောက်ဖော်ပြပါ ခေါင်းစဉ်များဖြင့် အဆိုပါစာအုပ်ကို ရေးသားတင်ပြ ထားသည်။ အမှာစာ(၁) အပြော အရေးအဖတ်၊ (၂) ရှေးဦးအိန္ဒိယ အက္ခရာ၊ (၃) ရှေးအိန္ဒိယတိုက်၏ သမိုင်း အတိုချုပ် (အေဒီ ၅ ရာစုထိ) (၄) ရှေးအိန္ဒိယသမိုင်းအတိုချုပ်၊ (အေဒီ ၆ ရာစုမှ ၁၀ ရာစု အထိ ဟိန္ဒူမင်းဆက်များ)၊ (၅) အိန္ဒိယအက္ခ ရာ၏ ယေဘူယျသဘာဝ၊ (၆) အိန္ဒိယဗြဟ္မီ အက္ခရာမှ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာသော အန္ဒိယတိုက်အက္ခရာများ၊ (၉) အေဒီ ၄ ရာစုမှ ၆ ရာစုနှင့် ယင်းမတိုင်မီ ရခိုင်ပြည်သုံး အက္ခရာကို ဖော်ထုတ်ခြင်း စသည်ဖြင့် ကျောက်စာပုံ၊ ဒင်္ဂါးပုံများကို ဓါတ်ပုံ (၃၅) ပုံဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထိုကျောက်စာဒင်္ဂါးစာများ၏ ဘာသာပြန်ဆိုချက်များကိုလည်းကောင်း၊ ဗြာဟ္မီဘာသာရပ်မှတစ်ဆင့် ကွဲပြားလာသော အက္ခရာများကို ဇယားပေါင်း (၂၆)ခုဖြင့်လည်းကောင်း၊ စနစ်တကျ ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤစာအုပ်ကို ရှာဖွေဖတ်ရူကြည့်ပါက ရခိုင်ပြည်၏ စာပေ အရေးအသားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတို့သည် အိန္ဒိယ တိုက်ငယ်မှတဆင့် ရောက်ရှိလာကြောင်း ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်သည်။ သုတေသီ ဦးအောင်သာဦး၏ အိန္ဒိယ ကျောက်စာနှင့် ရခိုင်ပြည်ရှိ ခေတ်အသီးသီးမှ ကျောက်စာနှိုင်း ယှဉ်ချက်ဇယားကို ၄င်းရေးသားသော စာအုပ်တွင် နောက်ဆက်တွဲဖြင့် တင်ပြထားသည်။
11. RAKHINE LITERATURE AND RELIGION
In preface of the book. The Alphabest used by the Rakhine City before 6th century A.D. ” written by U San Tha Aung, described that Myanmar writing was existed at frontier of India. The culture and literature was not necessary to come and across the ocean. There were many evidences that ancient Indian small continent used alphabets and writings had been used by ancient Rakhine City. If separated their alphabets and consonants it was found out that, it was very adjacent to change alphabet form. In paragraph 12-13 described that the alphabets used by northern India was the same as alphabets used by Rakhine City but those were different from pyu’s alphabets so that those were not come from Pyus. U San Tha Aung mentioned it.
U San Tha Aung had written such book under the headings. Preface (1) speaking, writing and reading, (2) Ancient India alphabet, (3) Brief history of ancient Indian small continent (upto 5th century of A.D), (4) Brief history of ancient Indian History, (from 6th century of A.D up to 10th century of A.D Hindu dynasties), (5) General characters of Indian alphabets, (6) The India small continent’s alphabets came from Indian Brami alphabets, (7) Excavation of Rakhine Cit used alphabets before from 4th Century A.D up to 6th Century A.D etc. Such book was written about literature, writing and reading of Rakhine City together with stone inscription, dinger coin’s photograph (35) Nos, translations systematically with (26) schedules.
The comparative schedules of india stone inscription and stones inscriptions in several ages of Rakhine Cities, book was written by researcher U Aung Tha Oo. (Attached-41)
ရခိုင်ပြည်တွင် ပြည်တွင်းဖြစ်သာသနာဟူ၍ မရှိပါ။ ကမ္ဘဘာသာကြီးအားလုံးသည် ရခိုင်ပြည်အတွင်း ခေတ်အချိန်အခါနှင့် တပြေးညီ ၀င်ရောက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
There was no domestic religion in Rakhine City. The World religions were arriving at Rakhine City according to time and conditions.
(ဂ) ဘီစီခြောက်ရာစုမတိုင်မီ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ တိုင်းအသီးသီးတွင် ဟိန္ဒူဘာသာကို လူများစု ကိုးကွယ်ကြ သဖြင့် အိန္ဒိတိုက်ငယ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်တွင်လည်း အိန္ဒိယမှ ၀င်ရောက်လာသော အင်ဒိုအာရိယာန်လူမျိုးများနှင့် သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်များမှာ ဟိန္ဒူဘာသာကိုပင် ကိုးကွယ်ကြကြောင်း ဗြဟ္မီစာဖြင့် ရေးသားထားသော ကျောက်စာများ၊ ဒင်္ဂါးစာများအရလည်းကောင်း၊ သမိုင်းစာအုပ်များတွင် ဖော်ထုတ် တင်ပြချက်များအရလည်းကောင်း သိရှိရသည်။
( c ) As majority of people in India had worshipped Hindu religion before 6th Century B.C, the Indo-Aryan entered in Rakhine City which wasapart of India small continent and the kings had worshipped Hindu religion. It was known from historical books.
(ဃ) အချို့ဘုရင်များမှာ ဗိဿနိုး၊ သီဝ၊ နန္ဒီစသည်တို့ကို ကိုးကွယ်ကြပြီး အချို့သော ပြည်သူများမှာ နေ၊ လ၊ မီး၊ ရေ၊ လေ စသည်တို့ကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ရာမ၊ လက္ခဏာ၊ သီတာ ဇာတ်ထုတ်တို့သည် ရခိုင်ပြည်တွင်း ဟိန္ဒူသာသနာပြုခဲ့ပုံ ဇာတ်လမ်းများပင် ဖြစ်ကြသည်။
(d) Some Kings had worshipped Vishano, Shiva and Nandi etc. Some people had worshipped Sun, Moon, Water and Air respectively.
(င) မော်ရစ်ကောလစ် Into Hidden Burma စာအုပ်ကို ဗြိတိသျှသံဖနှောင့်အောက်မှ မြန်မာနိုင်ငံ ဟုဦးမောင်မောင်ကြီး ဘာသာပြန်ဆိုသည့် စာအုပ်ပထမတွဲ စာမျက်နှာ -၂၉၀ တွင် ခရစ်နှစ်များ စတင်ခဲ့သည့် ပထမရာစုနှစ်နှင့် ထိုမတိုင်မီကတည်းကပင် မိခင် အိန္ဒိယပြည်ကြီးသည် သံတွဲမြို့မှ တဆင့် ၄င်း၏သားသမီးပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာကို လည်းကောင်း၊ ၄င်း၏ အမွေယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းကောင်း၊ ၄င်း၏ ဘာသာအယူဝါဒကိုလည်းကောင်း၊ ၄င်း၏အနုပညာကိုလည်းကောင်း၊ အရှေ့ဘက်သို့ သွန်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ် လေသည်ဟူ၍လည်းကောင်း။
(e) Into Hidden Burma the book written by Mauice Collis was translated by U Maung Maung Gyi. In page No. 290 of Vol. I described that mother India had pushed its heritage, religion, culture and arts towards eastern direction via Thandwe town before 1st century A.D.
(စ) ဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ ၁၂ တွင် ထို့ကြောင့် ရခိုင်ပြည်သည် ပထမနှစ် ၁၀၀၀ အတွင်းဝယ် ကုလားမင်း အဆက်ဆက် အုပ်စိုးခဲ့သည့် ကုလားပြည်တစ်ပြည်သာဖြစ်ခဲ့သည် ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ စာမျက်နှာ-၁၃ တွင် ခရစ်နှစ် ၅၉၇ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ရခိုင်ရာဇ၀င်သည် စတင်လာခဲ့တော့သည်ဟု စံရွှေဘူးကဆိုသည် ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ စာမျက်နှာ-၂၁ တွင် ခရစ်နှစ် ၉၅၇ ခုနှစ်မတိုင်မီက ရခိုင်ပြည်သည် ကုလားပြည်တစ်ပြည် ဖြစ်ခဲ့သည်ကတော့ မှန်ပေ၏ ဟူ၍ လည်းကောင်း။
(f) In Vol. ll , page 12 described that Rakhine City was reled by dynasties of Kalar Kings within first 1000 years. In page 13, described that after 957 A.D. Rakhine history had been commenced. In page 21 described that it was corrected that Rakhine City wasaKalar City before 957 A.D.
(ဆ) စာမျက်နှာ ၂၃ တွင် သီရီဂုတ္တရ တောင်ခြေတ၀ိုင်တွင် ဟိန္ဒူဘုရားများကို ရုပ်ပုံပေါ်တွင် ထုထားသည့် ပန်းပုလက်ရာများ ရှိနေ၏။ လက်ရာဟန်မှာ ခရစ်နှစ် ၉၅၇ မတိုင်မီခေတ်က ဖြစ်သည်ဟုပြနေရာ ထိုခေတ်က ရခိုင်တိုင်းသည် ထိုဟိန္ဒူဘုရား ရုပ်ပုံများ ရှိနေခြင်းမှာ မြောက်ဦးမှ ဘုရားကျောင်းများတွင် ဟိန္ဒူဘုရားများရှိ နေခြင်းကဲ့သို့ သိပ်ပြီး မဆန်းကျယ်တော့ ပေ ဟူ၍ လည်းကောင်း။
(g) In page 23, described that there were images of Hindu gods and sculptors around Thirigatetara Mountain. Those handicrafts had shown that Rakhine City had images of Hindu gods before 957 A.D which were the same in temples of Mrauk-U so that it was not so strange.
(ဇ) ရခိုင်ပြည်ကို ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များက အေဒီ ၁ ၇ာစုမှ ၁၁ ရာစုအထိ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် စိုးမိုး အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်ဟု ရေးသားထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
မော်ရစ်ကောလစ်ရေး Arakan’s Place In the Civilization Of the Bay’ စာအုပ်တွင် ဝေသာလီ ကျောက်လှေကားမြို့တော်ကို တည်ထောင်အုပ်စိုးခဲ့ကြသော စန္ဒြမင်းများသည် ဘင်္ဂလားနယ် အရှေ့ဘက် ဒေသမှ ဟိန္ဒူမင်းများဖြစ်ကြသည် ဟု ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။ ရခိုင်ပြည်နှင့် နယ်စပ်ချင်းကပ်လျက်ရှိသော အရှေ့ဘင်္ဂလားပြည်၊ ယခင် ပဋိက္ခရား (ကိုမီလာ) ပြည်မှာ AD ၁၁ ရာစုအထိ ဗုဒ္ဒဘာသာကိုးကွယ် သူများဖြစ်ကြပြီး၊ ဟိန္ဒူဘုရင်များအုပ်ချုပ်သည့် ၁၁ ရာစုမှ ၁၂ ရာစုအထိ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များဖြစ်လာကြကာ၊ ၁၂ ရာစုမှ ယနေ့အထိ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုး ကွယ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
(h) It was found out the writings that Rakhine City had been ruled by Hindu Kings from 1st Century A.D up to 11th Century A.D for over 1000 years. In the book Arakan’s Palace in the Civilization of the Bay ” written by Maurice Collis described that the Sandra Kings who had ruled Waithali Kyauk Hlay Kar City were Hindu Kings from eastern region of Bengalar. (It was found out that the people of east Benglar City adjacent to Rakhine City, had worshipped Buddhism until 11th Century A.D but they had worshipped Hindum from 11th Century A.D until 12th century A.D during rhe ruleof Hindu Kings. Now they are worshipping lslam)
(ဈ) သုတေသီ D.G.E Hall-BURMA က စန္ဒြအနွယ်တော်မင်းများသည် အိန္ဒိယအမည် ဖြစ်သော ဝေသာလီ ကျောက် လှေကားမြို့ကို တည်ထောင်အုပ်စိုးခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
(i) The researcher A.G.E Hall – BURMA mentioned that descendants of Sandra Kings found and ruled Waithali Kyauk Hlay Kar City, the name of India.
(ည) တက္ကသိုလ် စာပေးစာယူစာအုပ်မှ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းပို့ချချက်များ သင်ရိုးအမှတ် မ – (၃၀၃) အတွဲ (၁) စာမျက်နှာ-၂၀ တွင် စနြေ္ဒမင်းဆက်တွေဟာ သီဝနတ်မင်းကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ် ဟူ၍ ရေးသားပို့ချထားသည်။
(j) In page 20 of book issued by University Distance Education, History Curriculum Ma (303) Vol. I described that the Sandra Kings had worshipped Shiva nuts.
(ဋ) မာဂဓတိုင်း(ယခုအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်)တွင် ဗိမ္မိသာရမင်းနှင့် သားတော် အဇာတသတ်မင်းတို့ အုပ်စိုးစဉ် အင်ဒိုအာရိယာန်အနွယ်ဝင်ဖြစ်သာ ဂေါတမဗုဒ္ဓသည် ၄င်း၏အဘိဓမ္မာများကို ဟောကြားခဲ့ရာ အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။
(k) The Buddha,adescendant of Indo-Aryan had preached Buddhism successfully during the rule of Veinumithara King and his son Azartathuk King in Magada region (now west Bengalar).
(ဌ) ရခိုင်ရာဇ၀င်ရေးသားဖော်ထုတ်ခဲ့သူအချို့က ရှင်တော်ဂေါတမ သက်တော်ထင်ရားရှိစဉ်ကပင် ရခိုင်ပြည်သို့ ဗုဒ္ဒသာသနာရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဟု ရေးသားကြသည်။ မာဂဓတိုင်းတွင်ပင် သီရိဓမ္မာသောက မင်းကြီး လက်ထက် တတိယသံဃာယနာတင်၍ အပြီးတွင် မေဂလိပုတ္တဿ ရဟန္တာ၏ စေခိုင်းချက်အရ မဟာရေ၀တ အမှူးရှိသော ရဟန္တာငါးပါးသည် မဟိသကတိုင်း အမည်တွင်သော ရခိုင်ပြည်သို့ကြွရောက် လာကြပြီးလျှင် ဒေ၀တသုတ္တန်ဒေသနာတော်ကို ဟောကြား၍ အဆုံး၌ လေးသောင်းသောသူတို့သည် တရားတည်းဟူသော အလင်းကိုရကြ၍ လေးသောင်းသော ရဟန်းတို့သည် ကျွတ်တန်းဝင်ကြကုန်၏။ ယင်းမှစ၍ ရခိုင်ပြည်ရှိ သာသနာ့ဝန်ထမ်းရဟန်းသံဃာအရေ အတွက်တိုးတက်များပြားလာခဲ့ သည်ဟု မေဓပညာ မော်ကွန်း လင်္ကာမတိသကရာဇ၀င်နှင့် ဝေသာလီရာဇ၀င်တို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။
(i) Some writers of Rakhine history wrote that the Buddhism had arrived at Rakhine City during the period while Buddha was still alive.
(ဍ) သို့ဖြစ်၍ ရခိုင်လူမျိုးများအတွင်း ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ၊ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များနှင့် ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံအရ တောတောင်ရေမြေတို့ကို ကိုးကွယ်သူများဟူ၍ ရှိလာခဲ့သည်။
(m) Therefore, there were worshippers of Hinduism, Buddhism and traditional worshipping such as mountain, river , fire etc., among Rahine People.
(ဎ) Maurice Collis ရေး The Land Of the Great Image အား ဦးလှဒင်က ရတနာရွှေမြေ အမည်ဖြင့် ပြန်ဆိုရေးသားသော စာပေဗိဗာန်ဆုရစာအုပ်၏ စာမျက်နှာ ၁၉၁ တွင် အေဒီ ၆၃၀ ခုနှစ်က ရခိုင်ပြည်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း၌ ပါဝင်ခဲ့၍ နေထိုင်သော လူမျိုးများမှာလည်း ဘင်္ဂလားပြည်မှ လူမျိုးများနှင့် အသွင်တူကြသည်။ ထိုနည်းတူ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ် မျိုးစလုံးပင် ရခိုင်ပြည်မှာ ထိုအခါက ပြိုင်တူ ထွန်းကားခဲ့သည့် ရာဇ၀င်အထောက်အထားများ ရှိနေပေသည်ဟု ရေးသားဖော်ပြထားပေသည်။ ရခိုင်ပြည်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားနေသကဲ့သို့ မာဂဓတိုင်းအမည်တွင်သော ဘင်္ဂလားတွင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကား ခဲ့သည်။ ရတနာရွှေမြေ စာအုပ် စာမျက်နှာ ၄၅၄ တွင် ရှစ်သောင်းဘုရားသည် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် ရှစ်သောင်းကို ဌာပနာထာ၍ ရှစ်သောင်းဘုရားဟု တွင်လေသည်။ ထိုဘုရားကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ရာလောက်က အိန္ဒိယတိုင်းသား ကုလားပန်းရံဆရာများက အရှေ့ဘင်္ဂလားပြည်၌ တည်ထားခဲ့သည်ကို ရခိုင်ဘုရင်မင်း လက်ထက် စစ်တကောင်းကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စဉ်က ရခိုင်ပြည်သို့ ပင့်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထား သည်။ ဘင်္ဂလီလူမျိုးများ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ခဲ့စဉ်က ထုလုပ်ကိုးကွယ်သောဘုရားများကို ရခိုင်ပြည်သို့ ပင့်ဆောင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
(n) In page No. 191 of the book translated by U Hla Din ”The Land of the Great Image written by Maurice Collis described that the Rakhine region was included in India and the people were seemed to be like that of the races in Bangla State. Similary, Hinduism and Buddhism had been developed simultaneously in Rakhine City at that time . While Buddhism has been developed simultaneously in Rakhine City at that time. While Buddhism had developed in Rakhine City, also developed in Bangla at the time. In such translated book also described that the Shit Thoung Pogoda had been enshrined eighty thousand Buddha Statues so that called as the Shit Thaung Pagoda such Pagoda had been constructed since two hundred years ago by Indian Kalars masons at East Bangalar State.
While Rakhine King fought and occupied Chittagong it was brought it was brought to Rakhine. The Buddha Statue built by Bengalis Buddhist had been brought to Rakhine.
(ဏ) လွန်ခဲ့သော နှစ်တရာခန့်က ရေးသားခြင်းများ လွန်ခဲ့သောခရစ်က္ကရာဇ်-၁၆ ရာစုအစ ပေါ်တူဂီဘုရင့် ဘုန်းကြီး Sebastiao Manrique ၏ ခရီးသားမှတ်တမ်းကို မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြ ထားခြင်း ဖြစ်၍ ယခုအချိန် ထိဆိုလျှင် နှစ်ငါးရာခန့်ရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။
(o) It was described as per original travelling records of Sebastiao Manrique,aPotuguese Catholic Reverend at the Beginning of 16th Century A.D. Now it was about 200 years.
(တ) တမန်တော် မိုဟာမက် (ဆွ) ကွယ်လွန်တော်မူပြီး အနှစ်တရာအတွင်းမှာပင် အစ္စလာမ် သာသနာသည် ယခု အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် ပါကစ္စတန်အကြားရှိ ခိုင်ဗရ်တောင်ကြားလမ်းမှ တဆင့် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ အေဒီ – ၆၀၀ ကျော်မှစ၍ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အာရပ်လူမျိုးကုန် သည် များစွာသည် အတည်တကျ အိုးအိမ် တည်ထောင်၍ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အစ္စလာမ်သာသနာ သည် မော်လ၀ီဆူဖီဆရာများ၏ ဟောပြောသင်ပြမှုကြောင့် ငြိမ်းအေးစွာ အိန္ဒိယပြည်တွင် ပျံ့နှံ့လေသည်ဟု စာပေဗိမာန်ထုတ် စံလွင်ရေး ပါကစ္စတန်စာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ ၁၀/၂၀ နှင့် ၂၂ တို့တွင် အကျယ်တ၀င့် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။ နောင်တွင် (အစ္စလာမ်ဘုရင်) အက္ကဗရ်သည် အိန္ဒိယအမျိုးသား အပေါင်းကို ညီညွတ်အောင် ဟိန္ဒူများအပေါ် နှိပ်ကွပ်ခြင်းကင်းလျက် လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်ဟု စာမျက်နှာ-၂၇/၂၈ တွင် ဆက်လက်ရေးသားထားသည်။
(p) In pages 10/20 and 22 of the book Pakistan written by San Lwin described that after the death of prophet Mohamed within one hundred years Islam. Arrived at India small continent via Khine var mountain road which was situated between now Afghanistan and Parkistan. With effect from 600 A.D many Arab merchants had settled at Southern India. Th ey were Islams. Then, Islam had been developed in India spreadly due to preacher of Mawlawi Suphie teachers peacefully.
(ထ) မောင်တောမြို့ရှိ မိုဟမ္မဒ်ဟနီဖာနှင့် ကိုင်ယာပူရီတောင်ခြေကို သက်သေထူခြင်း
မောင်တောမြို့နယ်သို့ ပထမဆုံးရောက်ရှိလာသော မွတ်စ်လင်မ်အုပ်စုမှာ စတုတ္ထ ခလီဖာကြီး ဟဇရသ်အလီ (ရသွီ) ၏ သားတော် မိုဟမ္မဒ်အလ်ဟနီဖာနှင့် အပေါင်းအပါ အုပ်စုဖြစ်သည်။ အေဒီ ၆၀၀ ခုနှစ်က ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုဖြတ်ပြီး၊ ရေးကြောင်းလမ်း မှတဆင့် မောင်တောကမ်းခြေ၊ မောင်တော်မြို့၊ လဘောစားရွာ (Arabsha Para) သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ကူဖာ ဒေသတွင် ရှုပ်ထွေးပွေလီ ခဲ့သော နိုင်ငံရေး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှောင်ကွင်းနိုင်ရန်အတွက် မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့်အတူ ထွက်ခွာလာ ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
မိုဟာမ္မဟဒ်ဟနီဖါသည် မော်တောဒေသခံ ကီယာဖူရီသခင်မနှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး သေတပန် သက်တစ်ဆုံး နေထိုင်ခဲ့ကြ၏။ ၄င်းတို့၏ ဂူသင်္ချိုင်းရှိရာနေရာရှိ တောင်ခြေကို ဟနီဖာတောင်ခြေ (Hanif Tonki) နှင့် ကိုင်ယာပူရီတောင်ခြေ (Kayapuri Tonki) ယနေ့တိုင် ခေါ်တွင်လျက်ရှိသည်။ မောင်တောမြို့သို့ရောက်ရှိလျှင် သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
(Abul-Fazl Ezzati, 1994, The Spread of Islam, Tehran, Ahlul Bayt World Assembly, Publication, Page-301, 333 နှင့် Wikimedia the free encyclopedia ရှိ Islam in Burma တို့တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
(q) Proved on Mohamed Hanipha and Kineyar Puri mountain foot in Maungtaw.
The first arrived Muslim group to Maungtaw were son of 4th Khalifargyi Hazared Ali, Mohamed AI Hani Phar and his colleagues. In 680 A.D. they had arrived at Arabsha Para Village, Maungtaw, Maungtaw beach via waterways of Maungtaw beach by mean of crossing Bengalar Bay in 680 A.D. At that time, in Kuphar region in order to avoid complicated political surroundings, departed from family su rrounding.
Mohamed Hanifa had married to Khine Yar Phyuri Tha Khin Ma, resident of Maungtaw and settled down. Their locations of tombs were called as Hanifa Tonki at Hanifa mountain foot road and kyapuri Touki at Kayapuri mountain foot road.
You may study in (Abdul . azi Ezzati, 1994, The spread of Islam, Tehran, Ahlul Bayt World Assembly, Publication, Page 301/333 and Wakimedia the free encyclopedia, lslam in Burma.)
(ဒ) အိန္ဒိယတိုက်ငယ်တွင် အထူးသဖြင့် ပါကစ္စတန်နှင့် ဘင်္ဂလားနယ်တွင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် အများစုသည် အစ္စလာမ်သာသနာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ရာ ဘင်္ဂလားပြည်နှင့် ဆက်စပ် လျက်ရှိသော ရခိုင်ပြည် မြောက်ပိုင်း ၌ ရခိုင်လူမျိုး ဟိန္ဒိူဘာသာဝင် အများစုမှာ အစ္စလာမ်သာ သနာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ် လာကြပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာများမှာ ထိုသူများ ပင်ဖြစ်ပါသည်။
(r ) In Indian small continent, especially in Pakistan and Bengalar region, the majority Hindu people converted to lslam so the northern part of Rakhine City adjacent to Bengalar region, the majority of Hindu People also converted to lslam. Rohingyas are those Hindu People.
(ဓ) ယခင်မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီမှ ထုတ်ဝေသည့် ကမ္ဘာနိုင်ငံများ အမှတ် (၁) စာအုပ်တွင် ပါကစ္စတန်သမ္မတနိုင်ငံအကြောင်းကို စာမျက်နှာ – ၃၀၅ မှ ၃၂၇ ထိ ဖော်ပြထားရာ အရှေ့ပါကစ္စတန်တွင် ဘင်္ဂလီ လူမျိုး အများအပြားရှိပြီး အခြားလူမျိုးစုများ နှင့်အတူ မဂ်လူမျိုး (ရခိုင်) များလည်း စစ်တကောင်းကုန်းမြင့် ဒေသတ၀ိုက်တွင် နေထိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၏ လူဦးရေအနက် (၂၃%) မှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေသေးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
(s) In page No. 305-327 of the book World Countries No (1) , published by former Myanma Socialist Programme Party, described that in east Parksitan there were many Bengali races and Maugh (Rakhine) were staying there together with other races. The 23% of Benglas people were Hindus.
(န) ရခိုင်ပြည်တွင်လည်း မူလဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့လည်းကောင်း၊ အစ္စလာမ် ဘာသာ သို့သော်ကောင်း၊ ကူးပြောင်း ကိုးကွယ်ကြစေကာမူ ကူးပြောင်း ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုသော ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ရခိုင်လူမျိုးများမှာ ယခုအထိတည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
(t) Although majority of former Hindus in Rakhine City converted to Buddhism and lslam, there are many Hindu Rakhines who do not change religion are existing in Rakhine State.
(ပ) ရခိုင်ပြည်သည် ဘင်္ဂလားပြည်၏ သစ္စာခံတော်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဘင်္ဂလား ၁၂-မြို့ခေါ် ဂင်္ဂါမြစ်ဝှမ်း ဒေသသည် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အင်ပါယာအဖြစ်သို့လည်းကောင်း၊ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ကျရောက်ခဲ့ကြကြောင်း History Of Burma အပါအ၀င် သမိုင်းစာအုပ်တိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ စစ်တကောင်းနယ်သည် ၁၄၉၅ မှ ၁၆၆၆ ခုနှစ်အထိ ရခိုင်ပြည်၏ လက်အောက်ခံဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က စစ်တကောင်းနယ်တွင် နေထိုင်သူ အများစုသည် အစ္စလာမ်သာသနာကိုလည်းကောင်း၊ အချို့မှာဟိန္ဒူသာသနာကိုလည်းကောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းတွင် နေထိုင်သူများမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာကိုလည်းကောင်း လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည် ကိုးကွယ် ခဲ့ကြသည်။ ရခိုင်ဘုရင် နရမိတ်လှ (ခ) မင်းစောမွန် (၁၄၀၄-၁၄၃၄) သည် ဘင်္ဂလားပြည်တွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံနေရာမှ ရခိုင်ပြည်ကို သိမ်းပိုက်ထားသော မွန်ဘုရင် ရာဇာဓိရာဇ် (၁၃၈၅-၁၄၂၃) ၏ စစ်တပ်ကို ဘင်္ဂလား၏ စစ်ရေးအကူအညီဖြင့် တိုက်ခိုက်ရယူကာ မြောက်ဦးမြို့ကို ၁၄၃၃-ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မြောက်ဦးတွင် စန္ဒီခန်ပလီကျောင်းတည်ဆောက်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်မှု ပေးခဲ့သည်။
(u) Every history book had described that Rakhine City was under the rule of Bengalar City and vice versa, 12-Bengalar towns (a) ginga valley wasamember state under Rakhine emperor. Chittagong region was from 1495 A.D up to 1666 A.D. At that time, the majority people residing in Chittagong region were lslam and some were Hindus.
In Southern part and middle part of Rakhine the residents were Buddhists. The Rakhine King nara Meik Hla (a) Min Saw Mon (1404-1434) had taken asylum under Bengalar State and he had fought Mon King Yazar Deriz (1385-1423) who had ruled and occupied Rakhine by taking military assistance of Bengalars State and then founded Mrauk U in 1433 A.D. He had founded Sandi Khan mosque in Mrauk-U and allowed to worship independently.s
(ဖ) ရခိုင်ဘုရင်များသည် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်း မပြုခဲ့သည့်အပြင် နည်း အမျိုးမျိုးဖြင့် သိမ်းသွင်းစည်းရုံးထားခဲ့သည်။ အဆိုပါအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အနေဖြင့် ဘာသာတူဖြစ်သည့် မဂိုဘုရင်များ၏ သစ္စာတော်ကို မခံယူကြစေရန် ဘုရင်များကိုယ်တိုင်ပင် အစ္စလာမ်ဘွဲ့အမည်ကိုများကို ခံယူခြင်း၊ အစ္စလာမ်ဘွဲ့အမည်ဖြင့်ပင် ဒင်္ဂါးတံဆိပ်များ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေ သုံးစွဲခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အထောက် အထား အပြည့်အစုံရှိသည်။ အစ္စလာမ်ဘွဲ့ကို ခံယူကြသော ဘုရင်များအနက် မင်းခရီ (၁၄၃၄-၁၄၅၉) သည် အလီခန်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဘစောဖြူ (၁၄၅၉-၁၄၉၂)သည် မေနုသျှားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဘစောမင်းညို (၁၄၉၂-၁၄၉၄)သည် မူမက်ရှားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မင်းရန်အောင် (၁၄၉၄)သည် နူရီရှား အဖြစ်လည်းကောင်း၊ စလင်္ကသူ(၁၄၄၉-၁၅၀၁)သည် ရှိတ်အဗဒုလ္လာရှားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မင်းရာဇာ (၁၅၀၁-၁၅၂၅) သည် ဂျလာလ်ရှားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သဇတ(၁၅၂၅-၁၃၅၁)သည် အလီရှားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မင်းဖလောင်း သည် စကွန်ဒါရှားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မင်းရာဇာကြီးသည် စွယ်လင်ဆောလိမ်ရှားအဖြစ် စကွန်ဒါရှား အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ထင်ထင်ရှားရှား အစ္စလာမ်ဘွဲ့အမည်များ ခံယူခဲ့ကြသည်။ ငွေဒင်္ဂါးများ တွင်လည်း –
(v) The Rakhine Kings did not restrict and oppress upon Islams and organized by many ways and means. There were full evidences that Rakhine Kings took Islamic titles and moulded dingar Coils by Islamic tiles with the intention not to loyal to Mago Kings who were same lslams. Those Rakhine Kings who had taken lslamic title were as follows. Min Khayee (1434-1494) as Ali Khan tile, Ba Saw Min Nyo (1492-1494) as Muhamed Sha title: Min Yan Aung (1494) as Neuni Sha title; Salin Kathu (1449-1501) as Sheikh Abdullah Sha title: Min Yazar (1501-1523) as Deline Yutsha title; Min Saw O (1523-1525) as Jalar Sha title; Thaza Ta (1525-1551) as Alisha title: Min Pha Yaung as Sconda Shatitle; and Min Yazar Gyi as Swel Linsaw Leinya title respectively.
(ဗ) ဥပမာ။ ဆင်ဖြူသခင် နရဓိဗတိဆောလိမ်သျှ သက္ကရာဇ် ၉၆၃ ဟု ရေးထိုးထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာသည် ဘင်္ဂလားနှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ထွန်းကားခဲ့ သည်။ ယခုဖော်ပြခဲ့သည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှာ ဟိန္ဒူဘာသာမှ ကူးပြောင်းလာသောသူ များအကြောင်းပင် ဖြစ်ကြသည်။
Example: Written and issued as Shin Phyu Shin Nara Deikva Tisaw Leinsha, 963 A.D. In northern part of Rkhine City, lslam had developed as in Bengalar Simultaneously. Now present Muslims are changed from Hindus.
(ဘ) ရခိုင်ပြည်တွင် ဗုဒ္ဒဘာသာကို အစဉ်တစိုက် လက်ခံကိုးကွယ်ယုံကြည်နေပြီးသူများမှလည်း အစ္စလာမ် ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ယုံကြည်ခဲ့သောသူများ ရှိနေခဲ့ကြောင်းကို ဓည၀တီ ဆရာတော် ဦးညာဏက ရခိုင်ရာဇ၀င် ဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ ၁၆၁/၁၆၃ တွင် မင်းဘာကြီးလက်ထက် ပါရှင်အင်ပါယာ ဖတ်တကာဒီ ဦးဆောင်သော သံအမတ် (၃) ဦးဘုရင်ထံသို့ ရောက်လာကြသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အစ္စလာမ်တရားဟော သာသနာပြု ဆရာများလည်းပါလာကြပြီး ရခိုင်ပြည်သူတို့အား အစ္စလာမ်တရားတော်ကို ဟောကြားသင်ပြရာ ရခိုင်အမျိုးသားအချို့ယုံကြည်လာကြပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်ဟု ဖော်ပြထား သည်။
(x) In page 161/163 of the book Rakhine History 2nd Volume, written by Danyawaddy Sayataw U Nya Na, described that under the rule of King Min Bar Gyi, (3) ambassadors led by Persian emperor Phet Takardi arrived at the King. The Islamic preachers from india were together with them and they preached lslam to Rakhines changed to lslam.
(မ) ဤသို့ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်အချို့ အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ကြကြောင်းကို ရခိုင်အမျိုးသား ခေါ်ဆောင်ကြီး နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ဟောင်း သတင်းစာဆရာ ဦးလှထွန်းဖြူက ၄င်းရေးသား ထားသော အောင်ပန်းကြီးငွေစကားရည်လုပွဲ စာအုပ်တွင် အတည်ပြု ဖော်ပြထားသည်။
(y) In respect of such fact, U Hla Tun Phyu, the member of the State Council, confirmed in his book known as the Aungpan Gyi Ngwe debate.
12. A NATURAL METHOD FOR DISTINGUISHING BETWEEN BANGLADESH CITIZENS AND MYANMAR CITIZENS.
With effect from over (60) years ago, small pox vaccination had been made in Union of Myanmar and Bangladesh. All of Myanmar Citizens were vaccinated on their lest arms.
Myanmar Citizens and Bangladesh Ctizens can be distinguished easily by mean of seeing their arms only
This is to submit that all staffs, Hluttaw Representatives and people in Rakhine State can be distinguish primarily by abouve method.
(က)ဘုံပေါက်သာကျော်ရေးသောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံနှင့်ရိုဟင်ဂျာအန္တရာယ်စာအုပ်စာမျက်နှာ (၉၁) တွင်ရခိုင်ပြည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr. Patson ၏အစီရင်ခံစားနှင့်သမိုင်းပညာရှင် Dr.Barnerjee၏ မှတ်တမ်းများအရရခိုင်ပြည်ကိုဗြိတိသျှတို့သိမ်းခဲ့သည့်၁၈၂၅ပတ်ဝန်းကျင်ကရခိုင်လူမျိုး ၆၀၀၀၀၊ မူဆလင် ဘာသာ ၀င် ၃၀၀၀၀နှင့်ဗမာအပါအ၀င်အခြားတိုင်းရင်းသား ၁၀၀၀၀၊စုစုပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ ရှိသည်ဟုဖော်ပြ ထား သည်။
13. NUMBERS OF MUSLIM PEOPLE
(a) In page (91) of the book Union of Myanmar and danger of Rohingya, written by Bonpuak Tha Kyaw, Described that according to report of Mr. Patson, Rakhine State Administrator and the historian Dr. Barnerjee’s records there were 60000 Rakhines. 30000 Muslims, Bamar and other nationalities were 100000, altogether total 100000 people in about 1825, when the British and occupied Rakhine City.
(ခ) ၁၈၂၅-၂၆တွင်လူဦးရေ၁၀၀၀၀၀ရှိနေရာက၁၈၃၁ခုနှစ်တွင်၁၇၃၀၀၀၊၁၈၃၉ခုနှစ် တွင် ၂၄၈၀၀၀၊ ၁၉၀၂ခုနှစ်တွင်၇၆၂၁၀၂ဦးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာခဲ့ သည်။ထပ်မံ ၀င်ရောက်လာသူများသည်ယခင်ကဗမာရခိုင်စစ်ပွဲကြောင့်ဘင်္ဂလားသို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြသူများဖြစ်ရာယခုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသောအခါမူလမိဘဘိုးဘွားများနေထိုင်ခဲ့သောနေရာကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်အပါအ၀င်လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍တရားစွဲဆိုခဲ့ကြခြင်းများရှိနေခဲ့ရာအမှုပေါင်းများစွာကိုအင်္ဂလိပ်တရားသူကြီးများကဖြေရှင်းပေးခဲ့ သည်။
(b) In 1825-26 there were 100000 people and were increased to 174000 in 1831, 248000 in 1839, 762102 in 1902 gradually. As the next intruders were departed people to Bangalar due to original Bamar Rakhne war, when they had returned back they sued in order to regain theirs ancestor’s places including titleship of agricultural lands so that the English judges had settled many cases.
(c) In 1785, as there were many people who did not want to stay under the rule of Botaw phaya and Myanmar Kings, ran away to other side country when English had ruled, the returned back people had been identified as Rakhines legally. But some Rakhine historians had recorded the entering Muslims as illegal intruders.
(d) In the crisis occurred between regional Rakhine and lslam, the Rakhine Buddhists had lslam, the Rakhine Buddhists had taken shelters in Dinapur refugee camp and lslam had taken shelter in Younger refugee camp respectively. Among such refugees, the returned back Rakhine. Buddhists had been recorded as legal comers but coming of Muslims had been recorded illegal comers, by some historians.
(e) In Myanmar Ahlin New Year Newspaper Published in April of 1935, described the numbers of Muslims that 51612 were Rakhine Muslims
It was found out that Rohingyas were ancient settlers of Indo-Aryan descendent converted to lslam in 8th century A.D & new generation of mixed blood.
Although they were war victims, slaves and farmers, they had settled down before 1823 A.D. It was obvious that they were not comers under British Age.
ရခိုင်ပြည်ကိုရှေးအခါက Rohang ဟုခေါ်ဆိုပြီး၊ Rohang တွင်နေထိုင်သူများကို Rohingya ဟုခေါ်ဆို သဖြင့်ရိုဟင်ဂျာသည်သမိုင်းအကြောင်းအရပေါ်ပေါက် လာသောလူမျိုးစုတစ်စု၏ အမည်သာဖြစ်သည်။သို့ဖြစ်၍ရိုဟင်ဂျာသည်နိုင်ငံရေးအရဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်သည့်အပြင်မူဂျာဟစ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့်လည်းမတူပေ။
In ancient time the Rakhine State was called as Rohang and the people in Rohang well called as Rohingyas so that Rohingya wasaname of an ethnic group only occurred under historic event.
Therefore, Rohingya was not created under politics and not the same as mujarhids armed organization.
Although Rohingya’s spoken dialect are not the same as Rakhine’s spoken words, it ought to be taken care of the fact that their word; are the same as ancient Waithali (Vesali) Words. The Culture is the same too.
Although the culure and religion ofarace could be dissappered by overwhelming ofastrong group through successful war or by any means, its historical events could not be disappeared. Such fact was proved by world political histories. Now, some persons are making accusation upon Rohingyas who are residing within Rakhine State as an ethnic group and citizens as Illegal intruders by mean of concealing the real events and agitate to send to third country by means of writing papers and retrospective effect. Therefore we hereby compile and submit this monograph with the intention to be considered and viewed upon such historical events in accordance with international standards and norms, and in order to know about the real facts that Rohingyas are regional lslam, ethnic group and citizens in Rakhine State.